ကိုကိုညီလေးမာနတေယျ – My Blog
သူငယျခငျြး ငါတျောတျောအခကျအခဲ ဖွဈနလေို့ပါကှာ။ကူညီပေးပါလား ခကျတယျကှာ။မငျးကလဲ ဇှတျကွီးပဲ။အေး ရရငျ ငါပွောမယျ။မငျးကိုဆကျသှယျလို့ရမယျ့ဖုနျးပေးခဲ့” ”အေးအေး ကြေးဇူးတငျပါတယျကှာ” ငွိမျးခမျြး တယောကျ မငွိမျးခမျြးနိုငျသေးပါ။သူထောငျကလှတျလာတာမကွာသေး။သူထောငျကရြတာလဲ ခုသူမကျြနှာအောကျကပြွီးအကူအညီတောငျးနရေတဲ့ ဝယေံဟိနျးရဲ့ အပွဈလဲမကငျးပေ။သူတို့တှကေ တောငျကွီးနညျးပညာတက်ကသိုလျက ပထမနှဈကတညျးက တဆောငျတညျးနခေဲ့ခငျခဲ့ကွတဲ့သူငယျခငျြးတှေ။မဂြောတှမေတူကွပမေယျ့ ဆိုးဖျောဆိုးဖကျငတျဖျောငတျဖကျတှမေို့ ညီအကိုတှထေကျခဈြကွသညျ။သူက မိဘမရှိ။ဦးလေးဖွဈသူက ကွညျ့ရှူ့စောငျ့ရှောကျထားတာ။
ညီအကိုသားခငျြးမရှိတော့ သူငယျခငျြးတှကေို အရမျးမငျသညျ။ဒါကွောငျ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ပတျသတျလာရငျ အစစအရာရာ အနဈနာခံသညျမို့ သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးတှပေေါသညျ။နောကျဆုံးနှဈစာမေးပှဲဖွပွေီးညမှာတော့ သူငယျခငျြးတှေ ခှဲရတော့မယျဆိုပွီး သောကျကွစားကွသညျ။ပွီးတော့ လြှောကျလညျကွတော့ သူက မသှားခငျြ။မူးနလေို့ တခုခုဖွဈမှာစိုးလို့တားသေးသညျ။ဝယေံထကျက မရ။အတငျးကိုသှားခငျြနသေညျ။သူကတျောတျောမူးနသေညျ။ဆိုငျကယျသူစီးမယျဆိုတော့လဲ ပေးမစီး။သူ့နောကျကဘယျသူ့မှမလိုကျရဲ။သူကလိုကျပွီး ထိနျးရသညျ။လြှောကျလညျကွရငျး လုံခွုံရေးရဲတှနေဲ့ ငွိကာ ပွသာနာတကျကွသညျ။သူက အတနျတနျတားတဲ့ ကွားက ဝယေံထကျက တားမရ။ရဲတှကေစကျနဲ့ လူချေါတော့ ရောကျလာတဲ့အခါ ထှကျပွေးကွရငျး ဆိုငျကယျတဈစီးကိုဖွတျကြုံးလိုကျသညျ။သူတို့လဲ ဆေးရုံရောကျသှားသညျ။
ဝယေံထကျတိုကျလိုကျတဲ့ဆိုငျကယျက မောငျးတဲ့ကောငျမလေး နရောမှာပှဲခငျြးပွီးဆုံးသှားလို့ ကောငျမလေးရဲ့မိဘတှကေ အမှုဖှငျ့ထားသညျလို့ သူငယျခငျြးတှကေ ပွောသညျ။ဝယေံထကျကွောကျနသေညျ။သူ့မိဘတှခေကျြခငျြးလိုကျလာပွီး အမှုပိတျပေးဖို့ လုပျပမေယျ့မရ။ထောငျကသခြောပေါကျကမြညျ့မို့ ဝယေံထကျ အဖမျးမခံပဲ ထှကျပွေးမယျလုပျသညျ။သူငယျခငျြးတှကေ အတငျးတားရသညျ။နောကျဆုံး သူက သူ့မှာ ဘာမှမရှိ။
သူ့ဦးလေးကလဲ သူ့ဟာနဲ့သူ။သူထောငျကလြို့ ဝမျးနညျးမယျ့သူမရှိ။ဝယေံထကျက မိဘအသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ သူ့ကောငျမလေးကလဲ တငိုငိုတရီရီ။နောကျဆုံး သူဘယျသူ့ကိုမှမတိုငျပငျပဲ ဆိုငျကယျကိုသူမောငျးတာပါလို့ ဝနျခံလိုကျသညျ။သူငယျခငျြးအားလုံးအံ့သွကုနျကွသလို သူတို့ကိစ်စကို သိတဲ့ရဲတယောကျကတောငျသူ့ကို မငျးထောငျကမြှာနျောလို့ သတိပေးသညျ။နောကျဆုံး သူထောငျကသြှားတော့ ဝယေံထကျက ထောငျကထှကျလာရငျ ဘာပဲအကူအညီလိုလို သူ့ဆီလာခဲ့ပါ သူပွနျပွီးကြေးဇူးဆပျခငျြပါတယျလို့ပွောသညျ။သူထောငျကတြော့ အငျးစိနျထောငျကသြညျ။ထောငျဝငျစာလာတှမေ့ယျ့သူမရှိ။လှနျခဲ့တဲ့နှဈနှဈလောကျက သူ့သူငယျခငျြး ဇှဲနိုငျက လာတှသေ့ညျ။သူငယျခငျြးတှအေားလုံးအကွောငျးပွောပွသညျ။
ဝယေံထကျက အိမျထောငျကနြပွေီ။သူ့ကောငျမလေးနဲ့မဟုတျ။သူဌေးသမီးနဲ့ အိမျထောငျကပြွီးသူဌေးဖွဈနပွေီ။ကနျြတဲ့သူငယျခငျြးတှကေ ဘယျသူကဘယျမှာရှိတယျဆိုပွီးပွောသညျ။နောကျပိုငျး သူ့သူငယျခငျြးတှတေယောကျပွီးတယောကျလာတှကွေ့သညျ။ဝယေံထကျတော့မပါ။သူထောငျကလှတျတော့ သှားစရာမရှိ။ဦးလေးက ဆုံးသှားတာနှဈနှဈကြျောပွီ။တကောငျကွှကျတဈမကျြနှာ။နစေရာမရှိ။စားစရာမရှိ။ဘုနျးကွီးကြောငျးတဈကြောငျးမှာကပျနပွေီးအလုပျရှာပမေယျ့ ထောငျထှကျတဈဦးမို့အလုပျကမခနျ့ခငျြ။သူ့သူငယျခငျြးတှကေ နိုငျငံခွားမှာရောကျတဲ့သူနဲ့ နယျမှာရောကျတဲ့သူနဲ့။
နောကျဆုံး ဝယေံထကျဆီသှားပွီအကူအညီတောငျးတော့ ရှောငျဖယျဖယျ။ ”တောကျ ဒီခှေးသား ကြေးဇူးရှိလို့ ကြေးဇူးဆပျတာပေါ့ကှာ” ”ထားလိုကျပါကှာ။ငါလဲအရမျးကိုအခကျအခဲ ဖွဈနလေို့။အေးလေ သူလဲ ငါလိုထောငျထှကျတဈဦးကို ဘယျလိုအလုပျပေးခငျြမလဲ။သူကခုဆို ကုမ်ပဏီရဲ့တာဝနျရှိတဲ့သူ။ပွီးတော့ သူဌေးအငယျစားလေ” ”ဘာဆိုငျလဲကှာ သူအစား မငျးထောငျကခြံတာလေ။
အားလုံးသိတာပဲ” ”နပေါစကှော” ”ခမျြးကွီး မငျးနညျးနညျးတော့ သညျးခံပေးကှာ။ငါအမွနျဆုံး အလုပျရှာပေးမယျ။ငါလဲ အလုပျတှမေပွတျသေးလို့။သူငယျခငျြးစိတျခြ။မငျးကိုမှမယုံရငျဘယျသူ့ကိုမှယုံစရာမရှိဘူး။မငျးရဲ့ အကွောငျးကို ငါတို့အသိဆုံးပဲ။ရော့သူငယျခငျြး မငျးအသုံးလိုနမှောစိုးလို့။ဒီတိုငျးပေးရငျမငျးကယူမှာမဟုတျဘူး။မငျးအဆငျပွတေဲ့တနကြေ့ ပွနျဆပျ ဟုတျပွီလား” ”အေးကြေးဇူးကှာငါမငျးဆီက ယူနရေတာမြားလှပွီ” ”မလိုဘူးဟြောငျ့။နောကတခါဆို လကျသီ ဟားဟားဟား” ဒီလိုနဲ့ ဆယျ့ငါးရကျလောကျကွာတော့ ဇှဲနိုငျကအပေါငျးအသငျးတှကေို ပွောလိုကျသညျထငျသညျ။
ဝယေံထကျ သူ့ကို သူ့အိမျမှာ ခွံစောငျ့ အလုပျကိုပေးသညျ။သူလဲ ဝမျးသာသှားသညျ။အိမျရောကျရောကျခငျြး ဆောကျနဲ့ထှငျးသလို သူ့မိနျးမ ဥမ်မာခငျက သူ့ကို ကွညျ့ပွီး ကိုကိုက ဘယျလိုလူနဲ့အပေါငျးအသငျးလုပျတာလဲမသိဘူး ဒီလိုထောငျထှကျတဈဦးကို အရေးအရာလုပျပွီး အလုပျပေးသေး လို့သူ့ကိုအထငျသေးတဲ့အကွညျ့နဲ့ကွညျ့ကာ ပွောတော့ သူ့ဘဝမှာ တခါမှဒီလို အထငျအမွငျသေးတဲ့အကွညျ့နဲ့ ကွညျ့ကာ ပွောတာမခံခဲ့ရဘူးပေ။ထောငျကတြော့လဲ ထောငျထဲမှာအလိုကျသိမှုအနဈနာခံမှုတှကွေောငျ့ လူခငျမြားရသလို ထောငျကထှကျတော့လဲ ထောငျထှကျမှနျးမသိကွ။သိတော့လဲ သူ့ရဲ့အပွောအဆို အပွုအမူနပေုံထိုငျပုံတှကွေောငျ့ အထငျသေးမခံရ။အလုပျလိုခငျြသျောလညျး ထောငျထှကျတဈဦးမို့ မခနျ့ခငျြတာကို နားလညျသညျ။
ခုလို ရှမှေ့ာ ပျေါတငျပွောပွီးအထငျသေးတဲ့အကွညျ့မြိုးနှိမျ့ခတြဲ့အမူအရာမြိုးကိုခံလိုကျရတော့ စိတျထဲမှာတျောတျောကိုဒေါသထှကျသှားရပမေယျ့ မကျြနှာမပကျြမိအောငျထိနျးလိုကျရသညျ။ရုပျလေးလှသလောကျ အထငျသေးအမွငျသေးရှိတဲ့ဥမ်မာခငျပါလား။ သူဝယေံထကျတို့အိမျမှာနစေဉျအတှငျး ဝယေံထကျကတဈမြိုး ဥမ်မာခငျကတမြိုး နှိမျကာ ဆကျဆံတကျသညျ။ဝယေံထကျက သူငယျခငျြးကောငျးမပီသ။သူ့ကို သူငယျခငျြးမြားက ဆကျသှယျလို့အဆငျပွစေရေနျ သူထောငျကထှကျလာခငျြး ဖုနျးတဈလုံးဝယျပေးထားသညျ။
အဆငျပွလေားမေးတော့ အဆငျပွတေယျလို့သာပွောရသညျ။သူငယျခငျြးတှဆေုံတဲ့အခါမြိုးတှငျ ဝယေံထကျက ဘယျတော့မှမချေါ။နောကျမှသူငယျခငျြးတှမေေးမှ သိရသညျ။ဆုံမညျကိုသူမသိဘူးပွောတော့ သူငယျခငျြးတှကေ မငျးမလိုကျခငျြဘူးလိုဝယေံထကျကပွောတယျလို့ပွနျပွောကွသညျ။သူတခါတလတေော့ ဝယေံထကျတို့လငျမယားအကွောငျးပွောမိသညျ။သူ့ကို သူငယျခငျြးတယောကျအနနေဲ့မဆကျဆံခငျြတောငျမှ အိမျစတေယောကျလိုမဆကျဆံသငျ့ဘူးလို့မွငျမိသညျ။ထမငျးဟငျးစားရတာတောငျ ခှဲခွားမှုရှိသညျ။စိတျထဲမှာ တျောတျောကို စိတျနာမိသညျ။သူတို့မှာသမီးလေးတယောကျရှိသညျ။နှဈနှဈနီးပါးရှိပွီးခဈြစရာအတျောကောငျးသညျ။ကလေးက သူ့ကိုခငျပမေယျ့ သူတို့တှကေ မဆကျဆံခိုငျး။တဈနှဈနီးပါလုပျပွီးတော့ သူငယျခငျြး သကျဦးရဲ့အကူအညီနဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုမှာအလုပျရသညျ။အငျဂငျြနီယာတဈဦးလဲဖွဈတာမို့ လစာကမဆိုးပေ။
သူ့ရဲ့လုပျရညျကိုငျရညျနဲ့ အနဈနာခံမှု ပေါငျးသငျးဆကျဆံမှုတှကွေောငျ့တဈနှဈလောကျကွာတော့ သွစတွေးလကြိုသှားဖို့ တာဝနျပေးခံရသညျ။သုံးနှဈလောကျကွာတော့သူပွနျလာတော့ ပိုကျဆံအတျောမြားမြားစုမိတာမို့ တိုကျခနျးတဈခနျးနဲ့ ကားတဈစီးဝယျကာ ပိုတဲ့ငှတှေကေို ဘဏျမှာစုထားနိုငျသညျ။အပိုသုံးစရာလဲမရှိတာမို့ သူ့အတှကျ လစာက ပိုရုံမက စုပငျစုနိုငျသညျ။ခဈြရမယျ့သူလဲမတှသေ့ေးတာကွောငျ့ ကွေးစားတှနေဲ့ တှလေို့ကျ ကကတှနေဲ့တှလေို့ကျနဲ့ ဘဝကိုပြျောပြျောကွီးဖွတျသနျးနသေညျ။သူငယျခငျြးတှနေဲ့ဆုံတော့ ဝယေံထကျနဲ့ပါတှသေ့ညျ။သူကတော့မကျြနှာပွောငျပွောငျပငျ။သူ့စိတျထဲမှာတော့ သိပျမကနြေပျပမေယျ့ ဘာမှတော့မပွောတော့။ဝယေံထကျတို့က အိမျကို ငှါးကာ ကှနျဒိုတိုကျခနျးမှာ ပွောငျးနသေညျတဲ့။
သူသှားလညျတော့ ဥမ်မာခငျကပါ အပွောအဆိုပွောငျးလဲလာသညျ။သူက ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ မနျနဂြောတဈဦးဖွဈနသေညျ့အပွငျ အနအေထားကလဲ ပွောငျးလဲလာသညျကိုး။သွျော လူတှေ လူတှေ ပိုကျဆံမရှိရငျ သူငယျခငျြးကအစ ပွောငျးလဲ လာပါလားလို့တှေးမိလိုကျသညျ။ နောကျပိုငျးမှာ သူဝယေံထကျတို့ လငျမယားနဲ့မကွာခဏဆုံဖွဈသညျ။ဘနျကောကျတို့ စငျကာပူတို့သှားရငျလဲ တူတူသှားဖွဈသညျ။ဝယေံထကျတို့ ဆောကျလုပျရေးကုမ်ပဏီနဲ့ သူတို့ကုမ်ပဏီက အပွနျအလှနျဆကျဆံမှုရှိသညျကိုး။သူတို့ဆီက ယန်တယားတှကေို ငှါးရမျးအသုံးပွုတာမို့ အမွဲဆကျဆံမှုရှိနသေညျ။သူလဲခုဆို ကုမ်ပဏီက အရေးပါတဲ့နရောတဈခုကိုအခြိနျတိုအတှငျးမှာရယူနိုငျခဲ့သညျ။သူ့ရဲ့ ရိုးသားမှု ကွိုးစားမှုကွောငျ့ အသိအမှတျပွုခံရသညျလို့ သူထငျမိသညျ။
ဒီလိုနဲ့ တဈရကျမှာ သူ ဘနျကောကျကို အလုပျကိစ်စနဲ့ သှားရသညျ။သုံးရကျလောကျနပွေီး အလုပျပွီးတော့ အပွနျအတှကျလကျဆောငျဝယျဖို့အသှားမှာ ဥမ်မာခငျနဲ့ဆုံသညျ။ ”ဟယျ ကိုငွိမျးခမျြး ဒီရောကျနတောလား” ”ဟုတျတယျ။ ဥမ်မာတို့လဲရောကျနတောလား။တယောကျတညျးလား။သမီးရော” ”သမီးကမပါဘူး။ကြောငျးတကျရတာမို့ သူ့အဘှားတှနေဲ့နခေဲ့တယျ။ကိုကိုက အလုပျကိစ်စနဲ့ စင်ျကာပူကိုမနကေ့သှားတယျ။ဒီနပွေ့နျရောကျမယျပွောတာပဲ” ”အျော ဟုတျလားဒါဆိုတယောကျတညျးပေါ့။မနကေ့ရောကျတာလား” ”ဟုတျတယျ ကိုကိုကတဈလလောကျရှိပွီ။လှမျးချေါလို့လာတော့မှ အရေးပျေါကုမ်ပဏီကခိုငျးလို့သှားရတာ” သူတို့နှဈယောကျ ဆိုငျတဈဆိုငျမှာထိုငျရငျးပွောနကွေသညျ။တျောတျောလေးကွာတော့ ဥမ်မာခငျလဲ ပွနျသှားသညျ။သူလဲဥမ်မာခငျရဲ့ နောကျပိုငျးကိုကွညျ့ရငျးနဲ့မှ အငျး ဒီဆျောကမဆိုးပါဘူး။ကိုယျလုံးကငါးရံ့ကိုယျလုံးလေးနဲ့။အသားကလဲဖွူ။သူဌေးသမီးဆိုတော့ တဈသငျလုံးအလုပျကွမျးလဲမလုပျဖူးတော့ အသားအရညျကအစတျောတျောလှတာပဲ။စိတျဓာတျလေးကသာမကောငျးတာ။ဝယေံတော့ ဘယျလိုစားလဲတော့မသိဘူး။
သူသာဆိုရငျဆိုတဲ့အတှမြေိုးတှေးနမေိလိုကျသညျ။ကိုယျလုံးကတော့ သူ့အကွိုကျငါးရံ့ကိုယျလုံးလေးပငျ။ဥမ်မခငျကို အရငျကအကွောငျးတှပွေနျတှေးမိရငျး ဒီဆျောကို ဖွုတျရလို့ကတော့ အရှကျဆိုတာဘာမှနျးမသိအောငျကိုလုပျမယျဆိုပွီးစိတျရိုငျးတှဝေငျမိသညျ။သူဟိုတယျကိုပွနျရောကျတော့ ဥမ်မခငျဆီဖုနျးဆကျကာပွနျရောကျပွီလားမေးတော့ ရောကျပွီဆိုပွီးပွောသညျ။နာရီဝကျလောကျစကားပွောဖွဈကွသညျ။ညနခွေောကျနာရီခှဲကြျောတော့ ဥမ်မာခငျက သူ့ဆီဖုနျးဆကျသညျ။ဝယေံထကျက ပွနျမလာဖွဈတော့ဘူးတဲ့။သူ့ဟာသူပွနျဖို့ပွောတာမို့ ဘယျနပွေ့နျမှာလဲမေးတော့ သူကလဲ ဥမ်မာခငျဘယျနပွေ့နျမလဲမေးလိုကျသညျ။မနကျဖွနျလယောဉျလကျမှတျမရနိုငျတာမို့သဘကျခါမှပွနျမယျပွောတာနဲ့ သူလဲ တူတူပွနျကွတာပေါ့ပွောလိုကျသညျ။ညနစောတူတူစားကွမလားမေးလိုကျတော့ ဥမ်မာခငျကလဲ စားမယျလို့ပွောသညျ။
သူလဲ ရခြေိုးအဝတျလဲကာ ဥမ်မာခငျ တညျးတဲ့ဟိုတယျဆီထှကျလာလိုကျပွီးချေါတော့ ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျကွာမှ ထှကျလာသညျ။ဇီးရိုးကှာတားဂငျြးဘောငျးဘီအကွပျလေးနဲ့ ခြိုငျးပွတျအနကျလေးကိုဝတျထားသညျ။ဖွူတဲ့အသားနဲ့လိုကျဖကျသလို ခွအေိတျအဖွူဝေါ့ကငျးရူးအနကျကိုဝတျထားတာမို့ တကယျ့လူငယျစတိုငျလျအပွညျ့ပငျ။ သူတိူ့ဆိုငျကောငျးကောငျးတဈဆိုငျမှာ ဝငျပွီးညနစောစားလိုကျကွသညျ။သူ့ကို သောကျခငျြသောကျလလေို့ပွောတာနဲ့ သူလဲ ဘီယာလောကျသာမှာပွီးသောကျသညျ၊ဥမ်မာခငျကလဲ သူလဲသောကျမယျဆိုပွီးယူသောကျသညျ။နှဈခှကျလောပျသောကျပွီးတော့ဥမ်မာခငျမူးနပွေီ။သူ့ယောကျကြားကိုမကနြေပျတာရငျဖှငျ့သညျ။စီးပှားရေးကိုပဲ မဲလုပျပွီးသူနဲ့သမီးကိုသိပျဂရုမစိုကျကွောငျး၊ ဒီလိုတှသှေားလာရတာ သူကအတငျးလိုကျနလေို့သာသှားနရေကွောငျး။မိသားစုကိုအခြိနျမပေးကွောငျးပွောသညျ။
သူလဲ အလိုကျသငျ့နားထောငျရငျး ဘီယာကိုထညျ့ပေးနသေညျ။ခုလဲ သူမကို သူစိမျးနယျမှာတယောကျတညျးထားခဲ့ကွောငျး ပွီးတော့ပွနျမလာနိုငျတော့ပဲ တယောကျတညျးပွနျခိုငျးကွောငျးမကနြေပျခကျြတှကေို ရငျဖှငျ့နသေညျ။တျောတျောလေးလဲ မူးနတောမို့ ပွနျမယျပွောတော့ မပွနျခငျြသေးဘူး ကခငျြသေးတယျလုပျနသေညျ။သူလဲ ကိုယျ့နိုငျငံမဟုတျတာမို့ ပွနျတာပဲကောငျးတယျပွောပမေယျ့မရ။ဒါကွောငျ့သူလဲ တက်ကစီတဈစီးတားကာ ကလပျတခုကိုသှားခိုငျးလိုကျသညျ။ကလပျရောကျတော့ ဥမ်မာခငျ ကနလေသေညျ။သူလဲ စိတျပကျြလကျပကျြနဲ့သာကွညျ့နတေော့သညျ။ခဏကွာတော့ သူ့ကို အတငျးလာဆှဲချေါကာ တှဲကဖို့ချေါတာနဲ့ သူလဲ အလိုကျသငျ့ ကလိုကျသညျ။ကနရေငျးနဲ့ သူမရဲ ရငျတှတေငျတှကေို မကွာခဏထိမိသညျ။
သူမကတော့ မသိ။မောလာတော့ ဘီယာထပျသောကျပွနျသညျ။ဒီလို လှတျလှတျလပျလပျ ကဲခငျြတာကွာပွီတဲ့။ကဲခငျြလို့ သမီးကိုထားခဲ့ပွီးလာတာ ယောကျကြားကမရှိလို့ မကဲရဘူးဆိုပွီးစိတျပကျြနတော သူ့ကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောနသေညျ။ကလပျကနပွေနျလာတော့ သူမတျောတျောမူးနပွေီ။သူလဲ သူမဟိုတယျထိလိုကျပို့ပွီး အခနျးထိလိုကျပို့ပေးရသညျ။ဓာတျလှကေားစီးတော့ သူမ မဟနျနိုငျ။သူ့ရငျခှငျထဲမှာ။သူလဲ ဖကျထားရငျးနဲ့ နို့တှကေိုမကွာခဏထိမိရသညျ။သောကျလဲ သောကျထားတာမို့ စိတျကလဲ စိတျရိုငျးဝငျမိသညျ။အခနျးထဲရောကျတော့ တံခါးပိတျပွီးသူမကို ကုတငျပျေါ ကနျ့လနျ့ဖွတျပကျလကျတငျလိုကျသညျ။သူမကတော့ မူးနပွေီမို့ မသိတော့။သူဘေးနားမှာထိုငျရငျး အကငြ်္ီလတျပွတျအကွပျအောကျကနေ အသကျရှူတိုငျးမို့မို့တကျလာတဲ့ ရငျသားတှကွေညျ့ရငျး စိတျက ထလာသညျ။ဥမ်မာခငျကိုအရငျကမကနြေပျတာတှကေို တှေးမိပွီး ဥမ်မာခငျရဲ့ နို့တှကေိုလကျကလှမျးလိုကျပွီး ကိုငျလိုကျသညျ။
အကငြ်္ိကိုအောကျကနမေပွီးခြှတျလိုကျသညျ။အတှငျးခံကိုပါတခါတညျးခြှတျလိုကျသညျ။နို့တှကေိုလကျနဲ့ အသာပှတျသပျကိုငျလိုကျပွီးနို့သီးခေါငျးညိုညိုလေးကို ငုံ့ကာစို့လိုကျတော့ အငျးခနဲ အသံနဲ့အတူရငျဘတျက ကော့လာသညျ။ဥမ်မာခငျမကျြလုံကမဖှငျ့ပေ။သူနို့တှကေိုစို့ရငျး လကျက ပေါငျတှကေို ပှတျသပျနလေိုကျသညျ။ဂငျြးဘောငျးဘီတိုကို ဖိနပျကိုမခြှတျတော့ပဲ ခြှတျလိုကျသညျ။ပငျတီမရမျးရောငျလေးပဲကနျြတော့သညျ။ဖွူဝငျးတဲ့အသားအရညျနဲ့ လိုကျဖကျလှသညျ။ပငျတီပျေါကနေ လကျနဲ့ထကျအောကျပှတျဆှဲခလြိုကျသညျ။ပငျတီကိုခြှတျလိုကျတော့ အမှေးတှကေ ဆေးနဲ့ခြှတျထားသညျထငျသညျ။ပါးပါးစုစုလေး။သူပေါငျနှဈဖကျကို ကားလိုကျပွီး လကျခလယျနဲ့ အဖုတျထဲကိုထညျ့လိုကျတော့ အဖုတျက အရညျတှနေဲ့။အတှငျးထဲကို ဝငျသှားတော့ သူလဲ ကလိပေးလိုကျသညျ။ဂြီစပေါ့နရောကို မှနျးကာ ခပျဆကျဆကျကလိလိုကျတော့ ဥမ်မာခငျ ဖငျက ကွှကွှတကျလာပွီး ပါးစပျက မတိုးမကယျြအသံနဲ့ ညညျးနသေညျ။
သူလဲ ခွထေောကျနှဈဖကျကို အသာမကာ ကုတငျပျေါထောကျထားတဲ့ လကျနှဈဖကျနဲ့ခြိတျလိုကျပွီးကိုယျကိုငိုကျလိုကျတော့ ဖငျကကွှလာသညျ။သူလဲ ဥမ်မာခငျအဖုတျထဲကို ထညျ့လိုကျရာ ”ဗဈြ ဗဈြ ” ”အ ဟ ဟ အာ့ ဟငျ ကို ငွိမျးခမျြး” အဖုတျထဲသို့ လီးက ကွပျပွီးဝငျသှားရာ ဥမ်မာခငျ ညညျးသံနဲ့အတူ မကျြလုံးပှငျ့သှားပွီးကွညျ့လိုကျရာ ငွိမျးခမျြးကို တှလေို့ကျရတော့ အလနျ့တကွားဖွဈသှားသညျ။အစက သူမ မူးမူးနဲ့ကိုကိုက လုပျပေးနတောလို့ထငျယောငျထငျမှားဖွဈနပွေီးအဖုတျထဲကို လီးကွီးပွီးဝငျလာတော့ နာသှားလို့ ယောငျယမျးမကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျရာမှ ငွိမျးခမျြးကို တှတေ့ော့ အတငျး ရုနျးတော့ ငွိမျးခမျြးက သူမကို ဖိထားပွီးလီးကို အဆုံးထိထညျ့လိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျခမြာ အဖုတျထဲမှာ ပွညျ့သိပျစှာလီးကဝငျသှားပွီး နာသှားရသညျ။ ”ဖယျ ကိုငွိမျးခမျြး မယုတျမာနဲ့နျော။ရှငျ့သူငယျခငျြး မိနျးမကို ဒီလိုလုပျစရာလား ဖယျနျော ကြှနျမအျောလိုကျမှာ” ”မထူးပါဘူး ဥမ်မာရယျ။ကိုယျ့လီးတခြောငျးလုံး မငျးအဖုတျထဲကိုဝငျနပွေီဟာကို။အျောတော့လဲ ဘာထူးမှာလဲ။
ဘယျသူကကွားမှာမို့လဲ ငွိမျငွိမျသာ လိုးတာခံလိုကျစမျးပါ” ”ရှငျ လူယုတျမာ။အောကျတနျးစား။ထောငျထှကျပီပီ ခှေးကငျြးခှေးကွံ ကွံတယျ ခှေးကွီး ဟငျ့ ဟငျ့ ” ”ငို ငို ကွိုကျသလောကျသာငိုစမျး ဟဲဟဲ ကောငျးလိုကျတာကှာ။မငျးအဖုတျက ကလေးတယောကျအမဆေိုပမေယျ့ ကွပျနတောပဲ။လိုးလို့ကောငျးတာ ဟား” ငွိမျးခမျြးကွမျးပွီ။အစက ဒီလောကျထိကွမျးဖို့မရှိပေ။ဥမ်မာခငျက သူ့အရှိုကျထိစမေယျ့ စကားကို နဈနဈနာနာပွောတာကွောငျ့ အရငျကတညျးက နာနတေဲ့အခံရှိတော့ စိတျက လှတျသှားသညျ။ဥမ်မာခငျ ရုနျးရငျးကနျရငျးနဲ့ တဖွညျးဖွညျးမောလာသညျ။လူကမူးလဲမူးနတောမို့ အားမပါ။ငွိမျးခမျြးလဲ လီးကို မဆောငျ့သေးပဲ အဆုံးထိထညျ့ထားရငျးနဲ့ ဥမ်မာခငျရိုကျပုတျနတောတှကေို လကျနဲ့လိုကျဆှဲရငျး ပါးစပျက ပွောခငျြရာတှပွေောနသေညျ။တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ဥမ်မာခငျအားပြော့လာတော့ နို့တှကေို လကျနဲ့ပယျပယျနယျနယျကိုငျရငျး ”အား ကောငျးလိုကျတာကှာ။နို့တှကေ အိတငျးနတောပဲ။
ကောငျမ ဆေးတှသေုံးပွီးယောကျကြားကို ဆှဲဆောငျထားတာမဟုတျလားဟားဟားဟား” ”ကိုငွိမျးခမျြးရယျ တျောပါတော့ ဥမ်မာကို သနားပါ။လှတျပါတော့ အဟငျ့ဟငျ့ အိ အိ” ဥမ်မာခငျ မရုနျးနိုငျတော့ လပြေော့နဲ့တောငျးပနျသညျ။ငွိမျးခမျြးခုခြိနျမှတော့မရတော့။လူကလဲ မူနပွေီမို့ စိတျရိုငျးက ဝငျနပွေီ။နောငျခါလာနောငျခါဈေးလို့ သဘောထားကာ ရှဆေ့ကျတှနျးနသေညျ။နို့တှကေို ကိုငျလိုကျ ညှဈလိုကျနဲ့ ပါးစပျကလဲ ညဈညဈညမျးညမျးတှပွေောနသေညျ။ဥမ်မာခငျ ဘဝမှာ ဒီလိုတဈတဈခှခှပွောတာတခါမှ မကွားဖူးသလို အပွောလဲမခံရဘူး။ခုလို တစိမျးတဦးရဲ့ ပယျပယျနယျနယျ ကိုငျခွငျးခံရတာ ပထမဦးဆုံးအကွိမျပငျ။သူမယောကျကြားတောငျ ခုလို တခါမှမကိုငျဖူး။ငွိမျးခမျြးက တဈတဈခှခှပွောသလို နရောအစုံကို လိုကျပွီးကိုငျနတောမို့ စိတျကအရမျးကို ဝမျးနညျးလာပွီး ကိုကို့ကို အရမျးသတိရမိသညျ။ကိုကို့ကို သူမသစ်စာဖောကျသလို ဖွဈသှားပွီလို့တှေးမိပွီး မကျြရညျက ကလြာပွနျသညျ။
ဒါကိုငွိမျးခမျြးက တှတေ့ော့ တဟားဟားနဲ့ ရယျပွီး နို့နှဈလုံးကို ညှဈကိုငျကာ ခါးအားနဲ့ လီးကိုဆှဲထုတျလိုကျပွီးခပျဆကျဆကျဆောငျ့ခလြိုကျတော့ ”အ့ ကြှတျကြှတျ နာတယျ ဖယျပါတော့ တျောပါတော့ အီးဟီးဟီး ” ”ကောငျးလိုကျတဲ့ အဖုတျ။ကွပျနတောပဲ လိုးရတာ။စောကျကောငျမ အရမျးလိုးလို့ကောငျးတယျကှာ”ပွောပွောဆိုဆို ငွိမျးခမျြးတယောကျ ကွမျးပွီ။ဥမ်မာခငျတယောကျ ဝမျးနညျးပကျလကျနဲ့ ငိုနပေမေယျ့ တဖွညျးဖွညျး အဖုတျထဲက လီးကို မသိမသာ လကျခံလာသညျ။အရညျတှကေ ထှကျလာကာ လီးက အဝငျအထှကျခြောလာသညျ။ငွိမျးခမျြးရဲ့ဆောငျ့အားက အားနဲ့မာနျနဲ့ဆောငျ့နတောမို့ တခကျြဆောငျ့တိုငျး အငျ့ခနဲ အငျ့ခနဲ ဖွဈဖွဈသှားကာ သားအိမျဝက ပူခနဲ ပူခနဲဖွဈသှားသညျ။ အသိစိတျနဲ့ လူက ငွငျးဆနျနပေမေယျ့ ကိုယျခန်ဓာအစိတျအပိုငျးတှကေ တဖွညျးဖွညျးလကျခံလာသညျ။ပွညျ့ဝတဲ့အရသာက တကိုယျလုံးကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပြံ့နှံ့လာသညျ။
ငွိမျးခမျြးက ဥမ်မာခငျးနားကိုကပျကာ တဈတဈခှခှတှပွေောပွီးဆောငျ့နဆေဲပငျ။ ”အဟငျ့ ဟငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ တျောပွီ တျောပွီ ဟငျ့ ဟငျ့”နှုတျခမျးက ငွငျးနပေမေယျ့ သူမယောကျကြားနဲ့ ကှာခွားစှာ ကာမအရသာကို ပွညျ့ဝစှာပေးနတောကို စိတျက တဖွညျးဖွညျးပါလာသညျ။သူမ ငွငျးဆနျခငျြသညျ။မဟုတျဘူး ဒါငါမဟုတျဘူး။ငါ့ကို တခွားလူတယောကျက မုဒိနျးကငျြ့နတော ။ငါလကျသငျ့မခံဘူး တှေးနပေမေယျ့ မူးကလဲမူး ဆောငျ့ခကျြတိုငျးက သူမအရငျက ဘာလိုအပျမှနျးမသိတာ ကိုယျ့ဟာကိုယျမေးမိတဲ့အရာက ဒါပါလားဆိုတာသိသှားပွီး စိတျကနှဈခှဖွဈနသေညျ။
ငွိမျးခမျြးလဲ ဥမ်မာခငျရဲ့ အပွောငျးအလဲ ကိုသတိထားမိတာကွောငျ့ ဥမ်မာခငျနားကိုကပျကာ စိတျကွှစရေနျ ထပျပွီးတဈတဈခှခှပွောလိုကျကာ လိးကိုတဆုံးထုတျ တဆုံးထညျ့ မှနျမှနျဆောငျ့နသေညျ။အဖုတျက အရညျတှနေဲ့ လီးဝငျတိုငျး တဗွှတျဗွှတျ တဗဈြဗဈြနဲ့ အသားခွငျးရိုကျတဲ့အသံကလဲ အခနျးထဲမှာဆူညံနသေညျ။ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို လကျနဲ့ခြိတျကာ ကိုယျက ရှကေို့ငိုကျထားတာမို့ ဖငျကွီးက ကွှတကျနကော လီးတခကျြဆောငျ့လိုကျတိုငျး အတှငျးထဲကိုနကျနကျဝငျသှားကာ ဖိလိုကျတိုငျး မှရေ့ာကအတှငျးဖကျဝငျသှားပွီးပွနျကနျလာပွနျတာမို့ တခကျြဆောငျ့လိုကျတိုငျး ပွနျပွနျကနျကနျတကျလာတာမို့ ဆောငျ့ခကျြတိုငျးက ဥမ်မာခငျ့အတှကျ ရူးသှပျမှုဖွဈစသေညျ။
မရတော့ပေ။ဥမ်မခငျ ဆန်ဒကို အသိနဲ့ ဘယျလိုမှထိနျးခြုပျလို့မရတော့။အထိအတှနေ့ောကျကို ကောကျကောကျပါအောငျလိုကျသှားပွီ။မိနျးမကိစ်စကို ကြှမျးကငျြဆရာကတြဲ့ ငွိမျးခမျြးရဲ့အောကျမှာ ကရြှုံးသှားပွီ။ ”အ ဟ ဟ အငျ့ အငျ့” ”ကောငျးလား ဥမ်မာကောငျးလား”မဖွေ။ ဒါကွောငျ့ သူ နို့သီးခေါငျးတှကေို ညှဈလိုကျရငျး ”ကောငျမ မေးနတေယျ ငါလိုးတာကောငျးလားလို့ ခံလို့ကောငျးလား ဖွစေမျး” ”အား ကြှတျကြှတျ ကောငျးတယျ အ ဟငျ့ ဟငျ့ နာတယျ” ငွိမျးခမျြးပွုံးလိုကျသညျ။သူတခကျြခငျြးဆောငျ့လိုကျပွီးနို့တှကေိုငုံ့ကာစို့လိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျ စိတျကအရမျးကို ကွှလာသညျ။ပွီးခငျြလာသညျ။အရမျးအရမျးကို ကောငျးလာကာ ”အ အငျ့ အငျ့ ဆောငျ့ ဆောငျ့ မရပျနဲ့ ခပျနာနာလေးဆောငျ့ပေး ကောငျးတယျ ဟား ကောငျးတယျ အား အား ပွီးပွီ အဈ အဈ ပွီးပွီ အ အ ဟားးးး”ဥမ်မာခငျ ပွီးသှားပွီသူ့ကိုအတငျးဖကျကာဖငျကိုအတငျးကော့ကာ ကပျထားပွီးတဆကျဆကျနဲ့ ဖွဈနသေညျ။ခွတှေကေ ကုပျကှေးတကျကာ ပါးစပျက ဘယျလိုအသံတှမှေနျးမသိ။
သူ ဥမ်မာခငျကို ပွနျဖကျပွီး နှုတျခမျးကို နမျးလိုကျရာ ဥမ်မာခငျလဲ မှတျသိပျစှာပွနျနမျးလသေညျ။ ”ဥမ်မာ ကိုယျမပွီးသေးဖူး လိုးခငျြသေးတယျ” ”အဟငျ့ ဒီလောကျအကွာကွီးကို မပွီးသေးဘူးလား။စိတျညဈပါတယျ”မူနသေညျ။ ”ကုနျးပေးစမျးပါ” ”သူ့စိတျကွီးပဲ လူကိုအရုပျလေးကနြတောပဲ။ဖယျဦးလေ သူကဖိထားမှတော့ ဘယျလိုလုပျရမလဲလို့” ငွိမျးခမျြးလဲ ထလိုကျရာဗလှတျဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ အဖုတျထဲမှ အရညျတှေ လြှံ့ကလြာသညျ။ဥမ်မခငျလဲ ရငျထဲ ဟာခနဲ ဖွဈသှားသညျ။အနားက ပငျတီကိုအမွနျယူကာ အဖုတျကိုအုပျကာသုတျလိုကျပွီးငွိမျးခမျြးလီးကိုကွညျ့မိလိုကျတော့ ရငျထဲဖိုသှားသညျ။ဟယျအကွီးကွီးပဲ။ကုတငျအစှနျးမှာပဲ ကုနျးပေးလိုကျသညျ။ငွိမျးခမျြးလဲ ဥမ်မာခငျရဲ့ တငျပါးတှကေို ညှဈလိုကျပွီး ဖနျြးခနဲရိုကျကာ ”တောကျ လှလိုကျတဲ့ဖငျကှာ ” ”အ နာတယျ ဘာလို့ရိုကျတာလဲ” ”လှလို့ရိုကျတာ မငျးဖငျက လုံးနတောပဲ”ပွောရငျတဖတျဖတျနဲ့ရိုကျနသေညျ။ဖွူဖှေးတဲ့တငျပါးတှကေ လကျရာတှနေဲ့ နီရဲလာသညျ။
ဥမ်မာခငျမှာ သိတကျစအရှယျကတညျးက ခုခြိနျထိ သူဌေးသမီးတဈဦးလဲဖွဈတာမို့ ဒီလိုကွမျးကွမျးတမျးတမျးမဆကျဆံခံရဖူးပေ။ယောကျကြားရတော့လဲ ယောကျကြားက နုနုညံ့ညံ့သာ ဆကျဆံသညျ။လငျမယားခငျြးလုပျရငျလဲ ကွမျးကွမျးတမျးတမျးမလုပျ။ဒါကွောငျ့ခုလို ဆကျဆံခံရတာပထမဆုံးမို့ စိတျထဲမှာ အထူးအဆနျးဖွဈကာ သဘောကလြာသလိုလို။ငွိမျးခမျြးက တငျပါးတှကေိုရိုကျရငျး ဖငျနှဈခွမျးကို ဖွဲလိုကျရာ နီရဲရဲ ခရပှေငျ့လေးကိုတှလေို့ကျရတော့ အဖှငျ့မခံရသေးမှနျးသိလိုကျတာမို့ တရကျတော့ ခရခွှေပေဈမယျလို့စိတျကကွိမျးရငျး စအိုကို လကျမနဲ့ကုတျခွဈကာ ”တောကျ ခရပှေငျ့လေးက ခဈြစရာလေးကှာ ” ဥမ်မာခငျ ဖငျဝယားသှားပွီး ရှုံသှားသညျ။ ”ဟငျ့ လုပျစရာရှိတာမလုပျဘူး ယားတယျ ဘာတှလြှေောကျလုပျနတောလဲ အို အဟငျ့ ယားပါတယျဆို” ငွိမျးခမျြးရဲ့အပွောအဆို အကိုငျအတှယျတှကွေောငျ့ ဥမ်မာခငျ စိတျက တကျကွှလာရပွနျသညျ။
ငွိမျးခမျြးလဲ ကုနျးတဲ့ပုံစံကို ပွငျပွီးနောကျကနေ ဥမ်မာခငျ့အဖုတျဝကိုတကေ့ာ လီးနဲ့ထညျ့လိုကျရာ ”ဗွိ ဗွဈ ဗွဈ ဗွဈ” ”ဟ အ အ ဖွေးဖွေး နာတယျ အာ့ ရှီး ”လီးကတဆုံဝငျသှားပွီး သားအိမျဝကို ဒုတျခနဲဆောငျ့လိုကျရာ ဥမ်မာခငျအောငျ့ခနဲ ဖွဈသှားပွီး ငွိမျးခမျြးလဲ ကငျြခနဲ ဖွဈသှားသညျ။ ”အ ဖွေးဖွေး အောငျ့တယျ”ငွိမျးခမျြးလဲ တငျပါးနှဈဖကျကို ညှဈကိုငျပွီး လီးကိုဖွေးဖွေးခငျြးတဝကျလောကျဆှဲထုတျကာ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပွနျထညျ့လိုကျတော့ ဥမ်မာခငျ ရှီးခနဲ ဖွဈသှားပွီး အရသာခံနသေညျ။သူလဲ ဖွညျးဖွညျးခငျြးတခကျြခငျြးဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။အခကျြပေါငျးသုံးဆယျလောကျကြ ဥမ်မာခငျ ခံနိုငျလာကာ ဆောငျ့စခေငျြလာသညျ။တအငျ့အငျ့နဲ့ နောကျကို ပွနျပွနျဆောငျ့ပေးနသေညျ။သူလဲ ခပျသှကျသှကျဆောငျ့ပေးလိုကျရာ ကောငျးသှားသညျ။ဆောငျ့ခကျြတိုငျး ဖငျကတုနျတုနျသှားသလို ပခုံးကြျောကြျောဆံပငျ နီညိုရောငျကလဲ ဝဲခနဲ ဝဲခနဲခါသှားသညျကို ကွညျ့ရငျး သူသဘောကမြိသညျ။
ခပျသှကျသှကျဆောငျ့ရငျးနဲ့ ခါးကို ကိုငျကာခပျကွမျးကွမျးလိုးလိုကျတော့ ”အား ကြှတျကြှတျ ကောငျးလိုကျတာ ဟ ဟ အငျးဆောငျ့ ဆောငျ့ အိ အိ အိ” သူမေးစရာမလိုတော့။သူ့အလိုလို ဖွဈလာပွီ။သူခပျကွမျးကွမျးဆောငျ့ ရငျး ပွီးခငျြလာပွီ။ဒါကွောငျ့သူ ”ဥမ်မာခငျ ငါအထဲမှာပွီးလိုကျရမလား” ”အငျး ပွီးလိုကျ ရတယျ ဆောငျ့ဆောငျ့ ဥမ်မာလဲ ပွီးတော့မယျ ဟား အ အ” သူလဲ ဆကျတိုကျမရပျမနားဆောငျ့ခလြိုကျသညျ။လီးတဈခုလုံး ကငျြတကျလာကာ လီးကိုအဆုံးထိဆောငျ့ထညျ့လိုကျပွီး အရညျတှကေို ပနျးထညျ့လိုကျခြိနျပဲ ဥမ်မာခငျလဲ ပွီးသှားကာ သူ့လီးကို တခကျြတခကျြညှဈနသေညျ။နှဈယောကျသာ ကုတငျပျေါသို့ ဘေးတိုကျလှဲခကြာ အနားယူလိုကျကွသညျ။ဥမ်မာခငျ နို့လုံးကဈြကဈြကို ဆုပျကိုငျထားလိုကျသညျ။တျောတျောလေးကွာတော့မှ ဥမ်မာခငျက ရခြေိုးခနျးထဲဝငျသှားသညျ။သူလဲ တဈရှူးထယူကာ သုတျလိုကျပွီး အမှိုကျခွငျးထဲထညျ့ကာ အတှငျးခံဝတျပွီး ကုတငျပျေါမှာ အနားယူလိုကျသညျ။
ဥမ်မာခငျပွနျထှကျလာတော့ တပတျကို ပတျထားသညျ။ကုတငျနားရောကျတော့ ”ဟငျ့ ဘာလုပျနတောလဲ ပွနျတော့လေ” ”မပွနျပါဘူး မငျးကို လိုးလို့မှမဝသေးတာ” ”ဟငျ့ စကားကလဲ ကွမျးလိုကျတာ”သူမကို ဆှဲခလြိုကျကာ နှုတျခမျးကိုနမျးလိုကျသညျ။ပွီးတော့ စောငျခွုံ ပွီး နှဈယောကျသားဖကျရငျးနဲ့အိပျပြျောသှားသညျ။မနကျခွောကျနာရီလောကျကြ သူနိုးလာတော့ ဥမ်မာခငျကသူ့ဘေးနားမှာ မနိုးသေး။သူလဲ ဥမ်မာခငျပတျထားတဲ့တပတျကိုခြှတျလိုကျကာ နို့တှကေိုကိုငျလိုကျတော့ ”အငျ ဟာကှာ သူမြားအိပျခငျြနသေေးတဲ့ဟာကို။ညတုနျးကလဲ သူနှိပျစကျထားပွီးပွီ။ခုအိပျခငျြသေးတယျကှာ” ”အိပျလေ။ကိုယျဟာကိုကိုငျတာကို” ဥမ်မာခငျဆကျပွီးအိပျနတေော့ သူနို့တှကေို ကုနျးစို့လိုကျပွီးလကျတဖကျကနျြတဲ့နို့ကို ရှရှလေးပှတျခကြေစားနလေိုကျသညျ။နို့သီးခေါငျးတှကေိုကလိလိုကျခလြေိုကျနဲ့လုပျနရော ဥမ်မာခငျ လဲ အသကျရှူသံပွငျးလာကာ သူ့ခေါငျးကို ထိုးဖှနပွေီး ရငျကကော့ကော့တကျလာသညျ။နို့တှစေို့နရေငျးနဲ့ လကျကတဖွညျးဖွညျးခငျြးအောကျဖကျကိုဆငျးကာ ပေါငျတှကေိုပှတျပေးလိုကျသညျ။
ဥမ်မာခငျလဲ တရှရှဖွဈလာပွီး ပေါငျကကားလိုကျစုလိုကျဖွဈနသေညျ။သူလဲနို့တှကေိုစို့ရငျးတဖွညျးဖွညျးနဲ့ အောကျကိုဆငျးကာဗိုကျတှကေိုလိုကျစုပျလိုကျကာနို့တှကေိုလကျနဲ့ခနြေလေိုကျသညျ။တဖွညျးဖွညျးခငျြးအောကျကိုဆငျးလိုကျတော့ ”အို့ မလုပျနဲ့လေ။ငရဲတှကွေီးကုနျတော့မယျ အို မလုပျနဲ့ အ အ ရှီး ဘယျလိုလုပျနတောလဲကှာ” သူလဲပေါငျနှဈဖကျကိုဖွဲကာအစကေို့ လြှာနဲ့ကလျောလိုကျရာကော့တကျသှားသညျ။အစကေို့ ဆကျတိုကျ လြှာနဲ့ကလိလိုကျရာ ထှနျ့ထှနျ့လူးသှားပွီး မှရေ့ာခငျးတှကေို လကျနဲ့ဆုတျခကြော ကိုယျကကွှတကျလာလိုကျပွုတျကသြှားလိုကျနဲ့။အဖုတျထဲက အရညျတှကေ ထှကျလာသညျ။သူအဖုတျနှုတျခမျးသားတှကေို စုပျလိုကျရာ အ ခနဲအသံနဲ့အတူ လူကတဆကျဆကျတုနျနသေညျ။
အဖုတျအတှငျးထဲကို လြှာနဲ့ဝငျနိုငျသလောကျထညျ့ကာ ကလိလိုကျတော့ ဥမ်မာခငျတယောကျ အသံတှကေမရပျတော့။ဖငျဝကို လြှာနဲ့ကလိလိုကျပွနျရာ ဆကျခနဲတုနျသှားရပွနျသညျ။လကျမနဲ့ အစကေို့ခပြွေီး အဖုတျထဲကို လကျနဲ့ကလိ ခရကေိုဝလုံးရေးနတေော့ ဥမ်မာခငျ ဘယျလိုမှမခံနိုငျတော့။လူကတဆကျဆကျတုနျလာကာ အုခနဲ မပီမသအသံနဲ့အတူ ခွခြေောငျးတှကှေေးတကျသှားပွီး ပွီးသှားသညျ။ ”ကိုရယျ ဘယျလို လုပျတာလဲကှာ။ဥမ်မာ့ကို ငရဲပေးနတောလား” ”မကောငျးဘူးလား” ”ကောငျးတယျ”ရှကျသံနဲ့ဖွသေညျ။ ”ဒီလို တခါမှမခံဖူးဖူးလား” ”ဟငျ့အငျး မခံဖူးဘူး” ”ကဲ ဒီတခါ ကိုယျ့အလှညျ့ လီးစုပျပေး” ပွောပွီးဥမ်မာခငျပါးစပျနားလီးကိုထိုးပေးလိုကျသညျ။ ဥမ်မာခငျတယောကျ ငွိမျးခမျြးကို စှဲသှားသညျ။ငွိမျးခမျြးနဲ့မှ သူမ မရဖူးတာရခဲ့ရတာပငျ။ခုလောလောဆယျမှာသူမယောကျကြားနဲ့သမီးကိုမထေ့ားလိုကျသညျ။
ငွိမျးခမျြးရဲ့ လီးကို စိတျပါလကျပါစုပျပေးနသေညျ။ငွိမျးခမျြးက အပွောအဆို သူမအပျေါဆကျဆံတာက သူမကို တနျဖိုးမထားမှနျးသိပမေယျ့ သူမ နှဈသကျနမေိသညျ။ဒါလဲ အထကျတနျးလှာထဲက ပေါကျဖှားလာတဲ့သူမရဲ့ စိတ်တဇလားပငျ။သူမကို ခပျကွမျးကွမျးဆကျဆံတာ ပွောဆိုတာ နှဈသကျသဘောကမြိကာ သာယာနသေညျ။ငွိမျးခမျြးရဲ့ ပွုစုမှုတှကေို တနျးတနျးစှဲမိနသေညျ။ငွိမျးခမျြးက သူမ ပါးစပျထဲမှာပငျပွီးသှားတာမို့ ညှီစို့စို့အရညျတှပေိုမွိုခမြိပမေယျ့ မထှေးထုတျမိ။အနျခငျြသလိုလိုဖွဈသှားပမေယျ့ သဘောကမြိသညျ။
နှဈယောကျသား ရအေတူတူခြိုးလိုကျကွသညျ။ငွိမျးခမျြးက ဆကျဆံတဲ့အခြိနျသာ သူမကို ဖာသာသာသဘောထားဆကျဆံပမေယျ့ ကနျြတဲ့အခြိနျမှာ သူမယောကျကြားထကျ ယုယကာ အပွောကောငျးတာတှကွေောငျ့ သူမ သဘောကရြပွနျသညျ။ရခြေိုးအဝတျလဲ ပွီး မနကျစာစားကာ လယောဉျလတျမှတျသှားဝယျလိုကျသညျ။သူမယောကျကြားဖုနျးဆကျတော့ မနကျဖွနျပွနျမယျလို့ပွောသညျ။ငွိမျးခမျြးနဲ့ တှတေ့ယျပွောတော့ ငွိမျးခမျြးနဲ့စကားပွောခငျြတယျဆိုလိုသူတို့နှဈယောကျပွောနကွေသညျ။ဂရုစိုကျပေးဖို့ ဘာညာမှာနတောနမေညျ။နှဈယောကျသား ငွိမျးခမျြးတညျးတဲ့ဟိုတယျကိုသှားကာ အဝတျအစားတှအေိတျတှယေူကာ သူမဆီကိုပွောငျးလာခဲ့သညျ။သူမကလဲ ငွိမျးခမျြးကို ရနျကုနျပွနျရောကျတာနဲ့ ဒီကကိစ်စတှကေိုမပေ့ဈလိုကျပွီး အရငျလို ပဲဆကျနကွေမယျပွောတော့ ငွိမျးခမျြးကလဲ လကျခံသညျ။ပွနျရောကျရောကျခငျြးပဲ သူတို့ လုပျကွပွနျသညျ။
ငွိမျးခမျြးက ဥမ်မာခငျကို ကွမျးကွမျးတမြိုး နုနုညံ့ညံ့တသှယျ မနုမကွမျးတဖုံးဆကျဆံသညျ။သူမ အစှဲကွီးစှဲမိသှားသညျ။တရကျနဲ့တညလုံး ပုံစံမြိုးစုံ သူမကို လုပျသညျ။ဇာတျကားတှကွေညျ့ကာ ဇာတျကားထဲကပုံစံအတိုငျးလုပျသညျ။ငွိမျးခမျြးကို သူမအံ့သွမိတာက ဘယျလောကျလုပျလုပျ လီးက အခြိနျတနျပွနျမတျလာတာပငျ။တကယျလုပျနိုငျသညျပငျ။သူမလဲ ငွိမျးခမျြးနဲ့တှမှေ့ လုပျတယျဆိုတာဒါပါလားလို့ပွောရမလိုပငျ။ နောကျရကျရနျကုနျရောကျတော့ သူမက ငွိမျးခမျြးကို အခှငျ့အရေးရရငျလဲ ပွနျတှခေ့ငျြတယျလို့ပွောသညျ။ ငွိမျးခမျြးလဲ ဥမ်မာခငျကို လုပျလိုကျရလို့ကနြေပျနသေညျ။သူမကို ဖာသာသာဆကျဆံလိုကျ ကွငျကွငျနာနာဆကျဆံလိုကျနဲ့ လုပျပေးလိုကျသညျ။သူပွနျရောကျတော့ ကှနျပြူတာနဲ့ သူခိုးရိုကျခဲ့တဲ့ သူနဲ့ဥမ်မာခငျလိုးတာကို ပွနျကွညျ့ဖွဈတော့ ဥမ်မာခငျကို လိုးခငျြသေးသညျ။
တရကျရကျတော့ နောကျပေါကျကိုဖှငျ့မညျလို့လဲ တေးထားလိုကျသညျ။ဒီဗီဒီယိုဖိုငျသာ ဝယေံထကျဆီပို့လိုကျရငျ သှေးတကျသမေလား သူ့ကိုလာသတျမလားတခုခုပငျ။ဒါပမေယျ့ သူမလုပျ။အဲလောကျထိ လုပျဖို့စိတျကူးမရှိပေ။ဒါကွောငျ့ သူလဲ အလှယျတကူရှာလို့မရနိုငျတဲ့ နရောမှာသခြောသိမျးထားလိုကျသညျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့အနညျးဆုံးတော့တလတခါဆုံဖွဈသညျ။မဆုံဆုံအောငျလဲ သူလိုကျခြိတျသညျ။ဆုံတိုငျး သူ့ကိုအိမျထောငျပွုဖို့ပွောကွသညျ။အားလုံးထဲ သူတယောကျသာကနျြတော့တာကိုး။သူငယျခငျြးမိနျးကလေးတှထေဲက အပြိုတှနေဲ့ခြိတျပေးမယျ့သူနဲ့။သူကတော့တကယျမခဈြတဲ့သူကိုမယူခငျြသေး။
ပွီးတော့ သူ့အားနညျးခကျြကွောငျ့ တျောရုံမိနျးကလေးပွနျမကွိုကျမှာကို သူစိုးရိမျသညျ။တရကျမှာ သူ့ဘဝအတှကျအရေးပါလာမယျ့ကောငျမလေးတယောကျကို သူအမှတျမထငျဆုံတှလေို့ကျသညျ။တှတေ့ာကလဲ တကယျ့အမှတျမထငျ။ပလာဇာမှာသူဈေးဝယျပွီးအပွနျ ကားရပျထားရာနရောရောကျတော့ သူ့ကာနဲ့ပုံစံတူအရောငျတူ ကားတဈစီးကသူ့ကားဘေးရပျထားတာမို့ သူလဲ သခြောကွညျ့လိုကျမိသညျ။အမြိုးအစား အရောငျ အစတူပွီးနံပါတျကသာနညျးနညျးကှဲတာ။သူလဲ ဖုနျးလာတာနဲ့ ကားပျေါမတကျသေးပဲ ကားနားမှာဖုနျးပွောနသေညျ။ဖုနျးပွောနရေငျး ကောငျမလေးတယောကျလာတာကိုတှလေို့ကျသညျ။လကျကလဲ အိတျတှနေဲ့ ဖုနျးပွောလာသညျကိုတှလေို့ကျသညျ။ပုံစံလေးက ခုခတျေမျောဒယျတှလေိုပငျ။
ရုပျကိုမွငျလိုကျရတော့ သူရငျတှအေရမျးခုနျသှားသလိုပငျ။ကြျောလယျလောကျဆံပငျက လမျးလြှောကျတိုငျးလှငျ့နသေညျ။အပွာဝမျးဆကျလေးနဲ့လှမျးလာပုံက သူ့ရငျထဲမှာ အရမျးကို စှဲမိသှားသညျ။သူဖုနျးခလြိုကျပွီးသူမကိုဆကျပွီးငေးနတေော့ သူငေးနတောကို မကျြစောငျးတခကျြထိုးပွီးဖုနျးဆကျပွောနသေညျ။ကားသော့ကိုထုတျကာ ရမုဒျနဲ့ဖှငျ့လိုကျပွီးဖုနျးကိုဆကျပွောနသေညျ။သူ့ဘေးနာရပျထားတဲ့ကားက ဒီကောငျမလေးကားကိုး။
သူတိုကျဆိုငျစှာ သူ့ကားနဲ့ပုံစံတူအရောငျတူဆိုတော့ ရငျတောငျခုနျသှားမိသညျ။သူမက ဖုနျးပွောနရေငျး ဘာတှရှေုပျမှနျးမသိရှုပျနတေဲ့လကျတှနေဲ့ သူ့ကားကိုဖှငျ့လိုကျတော့ သူရီခငျြသှားမိလို့ ပွုံးလိုကျမိတော့ သူ့ကို မကျြစောငျးတခကျြဒိုငျးဆိုထိုးလိုကျပွီးကားတံခါးပိတျလိုကျပွီးကားစကျနှိုးနပေုံရသညျ။သူလဲကားမှနျတံခါးကို ခေါကျလိုကျတော့ သူ့ကို လာကွောငျမနနေဲ့ပုံစံနဲ့ကွညျ့သညျ။သူကလဲ ဒီကားကသူ့ကားလို့အမူအရာနဲ့ပွပမေယျ့ဂရုမစိုကျပဲဖုနျးခလြိုကျကာ ကားစကျနှိုးနပေုံရသညျ။သူလဲ ထပျပွီးမှနျကိုခေါကျလိုကျတော့ ဆကျခနဲတံခါးဖှငျ့ကာထှကျလာပွီးသူ့ကို ရနျတှသေ့ညျ။ ”ဘာလို့ တံခါးမှနျလာလာခေါကျနတောလဲ။အူုကွောငျကွောငျလာမလုပျနဲ့။လုံခွုံးရေးချေါပွီးဖမျးခိုငျးလိုကျမယျ ဘာမှတျနလေဲ။ဟငျး ”ရနျတှနေ့တေဲ့ပုံက တကယျ့ အသညျးယားစရာလေး။သူတခကျြရီလိုကျပွီး ”ကားစကျနှိုးလို့ရလား” ”မရဘူး။ဘာလဲ ရှငျလုပျထားတာလား။ဟယျတကယျပဲ ကွညျ့စမျး အဲ့လိုလုပျစားနတောလား။ပုံစံနဲမလိုကျ။အေးလေ ခုခတျေကွီးက ဒီလိုပုံစံတှနေဲ့လုပျစားနတောအမြားကွီးပဲကိုး။
ကဲ ရှငျဘယျလိုလုပျထားတာလဲ ပိုကျဆံလိုခငျြရငျဘယျလောကျလဲပွော ကြှနျမသှားစရာရှိသေးတယျရှငျ့” ”အျော ကလေးမရယျ ပွောခငျြရာစှတျပွောနတေော့တာပဲ။ကိုယျ့ကားလဲကိုယျသခြောကွညျ့ပါဦး” ”ဒီမှာ ကြှနျမက ကလေးမ မဟုတျဘူး။လူနာတှကေိုကုနတေဲ့ဆရာဝနျတဈဦးရှငျ့။ပွောခငျြရာစှတျပွောနတောမဟုတျဘူး။ဟုတျတာကိုပွောနတော။ကားကို ဘာကွညျ့စရာလိုလဲ ကိုယျ့ကားကိုသိပွီးသား” ”အမလေးဗြာ ဒီစိတျနဲ့ လူနာကုတယျဆိုတော့ စှာတာနဲ့တငျ လူနာအသကျတိုမယျ” ”ဘာပွောတယျ။ရှငျ ရှငျနျော။စိတျတိုလာပွီ။လူနာဆိုရငျ ဒီလိုမဆကျဆံဖူးသဘောပေါကျ။ကဲ ရှငျကားနှိုးလို့ရအောငျ လုပျပေးမှာလာမလုပျပေးရငျ ရဲချေါလိုကျမယျ” ”ဟားဟားဟား ရဲချေါရငျ မငျးသာ အဖမျးခံရမှာသိလား။
ခု မငျးဝငျထိုငျပွီး စကျနှိုးတာ ကိုယျ့ကား မငျးလေးရဲ့ကားက ဟိုဖကျမှာ” ”ဘာ ရှငျ ”သူမဆကျပွောမယျလုပျပွီးမှ ကားတံခါးကိုငုံ့ကွညျ့လိုကျ ဟိုဖကျကားကို ကွညျ့လိုကျနဲ့ပွီးမှ မကျြနှာကွီးနီရဲသှားကာ ”ဒါဆိုစောစောက ပွောပါလားလို့” ”ပွောမလို့လေ သူပဲ စှတျကောနပွေီး” ”ဘာလို့ကြှနျမတံခါးဖှငျ့တော့ရတာလဲ” ”ရမှာပေါ့ မငျးကတံခါးဖှငျ့ပွီးကိုယျ့ဟာကိုဘာတှရှေုပျနမှေနျးမသိဘူး။သခြောမှမကွညျ့တာ။ကိုယျကတံခါးဖှငျ့ပွီး ဖုနျးလာလို့ဖုနျးပွောနတော။မငျးကခပျတညျတညျနဲ့ ဝငျထိုငျပွီး စကျနှိုးနတောလေ” ”အာ မသိဘူး မသိဘူး”ပွောပွောဆိုဆို ရှကျရမျးရမျးပွီးသူမကားဆီပွေးသှားပွီး ကားစကျနှိုးကာ ထှကျသှားသညျ။သူလဲ ”ဟိတျ ဟိတျ မငျးပစ်စညျးတှကေနျြခဲ့ပွီဟေ့”မကွားတော့ သူလဲ လိုကျပွီးပေးဖို့ ကားပျေါတကျတော့ အလုပျထဲက အမျဒီကဖုနျးချေါတာနဲ့ ဖုနျးပွောနတောနဲ့ မမှီတော့။သူလဲ အိတျတှကေိုကွညျ့လိုကျမိသညျ။တခုခုတှလေို့တှငွေ့ား။
မိနျးကလေးအသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှေ၊အဝတျတှနေဲ့ အတှငျးခံတှေ။သူမ ဝယျလာတာတှေ ကိုကွညျ့ရငျး သူ့ရငျထဲမှာတဒိတျဒိတျနဲ့ နှေးနှေးလေးခုနျမသေညျ။အခဈြဆိုတာဒါလား။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဆုံတော့ ပွောပွတယေ့ ရီလိုကျကွတာ။ဒါမငျးဖူးစာနမေယျ။ပစ်စညျးတှကေိုတော့ ခိုးခိုးမနမျးနဲ့နျောဆိုပွီးစကွသညျ။သူ့စိတျထဲမှာတော့ ကောငျမလေးရေ ဖူးစာမှနျရငျ ပွနျဆုံပါရစလေို့။ ဥမ်မာခငျလဲ ငွိမျးခမျြးနဲ့ တှပွေီ့းနောကျ သူမယောကျကြားနဲ့လုပျတိုငျး တခုခုလိုနသေလိုလို။သူမယောကျကြားက ငွိမျးခမျြးလောကျမကွီး လုပျလဲမလုပျနိုငျ။ပွီးတော့ လူက ဗိုကျကရှဲကာ ဝနတောမို့ အရမျးကွီးအကွမျးမလုပျနိုငျ။သူမကိုခဈြလို့လဲပါမညျ။အစက သူမ ဒါကိုသဘောကပြမေယျ့ ငွိမျးခမျြးက သူမကိုပကျပကျစကျစကျကွမျးသှားတော့ တခါတလခေပျကွမျးကွမျးလေးလုပျခံခငျြမိသညျ။
သူမယောကျကြားက လီးကိုသာစုပျခိုငျးပွီး သူမကိုတခါမှ မယကျပေးဖူး။ယကျပေးဖို့ပွောရမှာလဲ ရှကျသညျ။တခါတလခေံခငျြမိသညျ။ငွိမျးခမျြးကို တခါတလေ သတိရမိသညျ။သူမလိုအပျခကျြတှမေပွညျ့တိုငျးပငျ။ဒါကွောငျ့သူမယောကျကြားနိုငျငံခွားသှားတော့ ငွိမျးခမျြးကို ဖုနျးဆကျကာမရှကျနိုငျ ခြိနျးမိသညျ။ငွိမျးခမျြးက သူ့တိုကျခနျးလာဖို့ခြိနျးတာမို့ သူမသမီးကို ကြောငျးပို့ပွီးကားကိုအိမျမှာထားကာ အငှါးကားနဲ့ ငွိမျးခမျြးခြိနျးတဲ့နရောကိုလာလိုကျပွီး ငွိမျးခမျြးနဲ့ လိုးဖွဈသညျ။
သူမ စိတျတှတေငျးကွပျနတောတှေ ငွိမျးခမျြးနဲ့တှမှေ့ ပေါကျခှဲပဈလိုကျသညျ။ ”အား လုပျ လုပျ အားရပါးရလုပျ ကို မညှာနဲ့ ဥမ်မာ့ ဖငျတှကေို ရိုကျပွီးဆောငျ့ပေးပါ အား အား” ငွိမျးခမျြးလဲ ဖငျတှကေို တဖနျြးဖနျြးနဲ့ရိုကျကာအားရပါးရဆောငျ့လိုကျရငျး ”ကောငျမ ကောငျးလား ငါလိုးတာကောငျးလား” ”အား ကောငျးတယျ ကို လိုးတာအရမျးကောငျးတယျ အရမျးကွိုကျတယျ အာ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့”နှဈယောကျသားအခနျးထဲမှာ အသံတှနေဲ့ဆူညံနသေညျ။ဥမ်မာခငျက တကိုယျရညျသနျ့ရှငျးမှုက အမွဲဂရုတစိုကျလုပျတာမို့ သနျ့ရှငျးကာ လုပျရတာကောငျးသညျ။တသကျလုံး ဒီလိုအဆကျဆံမခံဖူးတော့ ခုလိုလုပျရပွောရတာကို သဘောကကြာ သူပွောသလိုလုပျပေးသညျ။နှဈယောကျသား ပွီးသှားတော့ အနားယူနရေငျးစကားပွောနလေိုကျသညျ။စိတျထလာတော့ ပွနျလုပျကွပွနျသညျ။ညနသေုံးနာရီကြျောတော့ အိမျကိုပွနျသှားသညျ။နောကျရကျကလြဲ လာပွနျသညျ။
သူ့မယောကျကြားပွနျမလာမခငျြးသူ့ဆီလာလာကုနျးသညျ။ဥမ်မာခငျက ငွိမျးခမျြးလုပျတာကိုစှဲလနျးနတောပငျ။ငွိမျးခမျြးက ပွသာနာမတကျအောငျတော့ရှောငျရသညျ။ဥမ်မာခိုငျကလဲ အလိုရမကျတခုအတှကျသာ ငွိမျးခမျြးနဲ့ငွိနပေမေယျ့ အိမျထောငျရေးနဲ့ မိသားစုဂုဏျသိက်ခာမကဆြငျးစရေနျတော့ရှောငျရသညျ။ ”ကိုခမျြး ဒါက မီ့သူငယျခငျြးဒေါကျတာနနျးစံခမျးတဲ့ နနျး ဒါက တို့တှရေဲ့ဆရာ ကိုငွိမျးခမျြးတဲ့” ”တှရေ့တာဝမျးတာပါတယျဗြာ။ကားကိုသခြောပါကငျထိုးခဲ့ရဲ့လား မှားနမှောစိုးလို့” ”ရှငျနျော” ”ကိုခမျြးတို့က သိနကွေတာလား” ”မီမီကလဲ ငါဟိုတခါနငျတို့ကိုပွောတာ သူနဲ့မှားတာလေ” ”ဟယျ ဟုတျလားချချချ” ”ကဲ နနျး နနျးရဲ့ ပစ်စညျးတှေ ကိုယျ့ဆီမှာပါလာတယျ။ခု လဲ ကားထဲမှာပါတယျ ပွနျကရြငျယူသှားနျော” ”ဟုတျ ဟိုတခါက နနျးလဲ လောနတောနဲ့ကားမှားသှားတာ။နနျးအမှားအတှကျ တောငျးပနျပါတယျ” ”ရပါတယျဗြာ။
ကားမှားတာထားပါ။ကားထဲက အပွငျအဆငျက မတူပါဘူးဗြာ မသိဘုးလား” ”ကားထဲမှာ ပွငျထားတာက အခငျးပဲကှဲတာ ကနျြတာက တူနတေော့ မှားသှားတာ အဟီး” ”အဲ့လို ကိုခမျြးရေ နနျးက လုပျလိုကျရငျအရာရာနဲ့အကွောငျးကွောငျးခညျြးပဲ” ”နငျနျော ”သူတို့နှဈယောကျရငျးနှီးသှားကွသညျ။နောကျပိုငျးမှာလဲ နနျးနဲ့သူနှဈယောကျတညျးတှသေ့ညျအထိသူ ရငျနှီးအောငျကွိုးစားခဲ့သညျ။နနျးနဲ့မိတျဆကျပေးခဲ့တဲ့ သူတိူ့ရုံးက ကောငျမလေး သူ့တပညျ့ရဲ့ရညျးစား မီမီခြိုကိုအရမျးကြေးဇူးတငျမိသညျ။သူနဲ့နနျးက အရငျကတညျးကသူငယျခငျြးတှေ။တဈလမျးထဲနတော။တက်ကသိုလျကှဲသှားပမေယျ့ အတှဲကမပကျြခဲ့။မီမီခြို့ဆီက သတငျးအခကျြအလကျရသညျ။နနျးမှာ ရညျရှယျထားတဲ့သူမရှိသေး။သူအရမျးကိုအားတကျသှားမိသညျ။သူနနျးရဲ့အခဈြကိုရဖို့အတှကျ ခဈြရေးဆိုတော့ နနျးကလဲ စဉျးစားပေးမညျတဲ့။သူလဲ နနျးနဲ့တှပွေီ့းကတညျးက ဥမ်မာခငျကို နညျးနညျးခငျြးရှောငျလာသညျ။ဥမ်မာခငျက ဝယေံထကျမရှိတာနဲ့ သူ့ကိုခြိနျးသညျ။သူကလဲ သုံးခါခြိနျးရငျ တဈခါလောကျသာတှသေ့ညျ။
တှသေ့ညျ့အခါတိုငျးမှာတော့ ဥမ်မာခငျကို ပကျပကျစကျစကျလုပျဖွဈသညျ။ပွောရမယျဆိုရငျ ဥမ်မာခငျက သူနဲ့ကမြှ ဗလဘိုငျလိုကျရသညျလို့ပွောရမညျ။ခုခြိနျထိတော့ ဥမ်မာခငျကိုနောကျပေါကျမဖှငျ့ဖွဈသေး။ခရခြှေမေယျတောငျးတော့ ကွောကျနတောနဲ့မခြှဖွေဈ။ တဈရကျမှာတော့ သူ့ဘဝ အမှောငျဖုံးတဲ့ရကျကိုရောကျလာခဲ့သညျ။ဘယျလိုမှရှောငျလို့မရနိုငျခဲ့။နနျးကို သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲမိတျဆကျပေးတော့ ဝယေံထကျက သူမကို ”နငျက နနျးမာလာရဲ့. ညီမမဟုတျလား” ”ဟုတျ အကိုက ဝယေံ” ”ဝယေံထကျပါ ” ”ဒါဆို သူ သူက ” သူသဘောပေါကျလိုကျသညျ။သူတို့ ဆိုငျကယျနဲ့တိုကျမိတဲ့ ကောငျမလေးရဲ့ ညီမ။
အာကာတို့ ဇှဲနိုငျတို့က မှတျမိသညျ။တရားရုံးမှာ ပါလာတာကိုတှဖေူ့းသညျကိုး။သူတို့ကိုလဲ တှဖေူ့းသညျမို့ ခကျြခငျြးမှတျမိသညျ။နနျးစံခမျးသူ့ကို စစေ့ကွေ့ညျ့ပွီး ”ရှငျက ကြှနျမ အမ ဘဝကို သအေောငျသတျခဲ့ပွီးတာအားမရလို့ ကြှနျမကိုပါ ကွံခငျြသေးတာလား ဟငျ” ”မဟုတျပါဘူးနနျးရယျ ကို တကယျမသိခဲ့ပါဘူး” ”ရှငျ့ကို သတေဲ့အထိကြှနျမ နာကညျြးမုနျးတီးနတော။ကြှနျမအခဈြဆုံးအမကိုသတျခဲ့တဲ့ရှငျ့ကို သတေဲ့အထိ ခှငျ့မလှတျဘူး ကြှနျမနဲ့ ရှငျ့ရဲ့ ပတျသတျမှုက ဒီမြှပါပဲ။ရှကျတကျရငျနောကျဘယျတော့မှ မပတျသတျပါနဲ့” ပွောပွီး သူမထှကျသှားသညျ။သူ အရှငျလတျလတျ မွမွေိုသှားသလိုပငျ။ဟာလာဟငျးလငျးကွီးဖွဈသှားသညျ။သူငယျခငျြးတှကေ သူ့ကိုအားပေးပမေယျ့ သူမကွားတော့။ဝယေံထကျက သူ့ကိုတောငျးပနျပမေယျ့ သူနားမထောငျနိုငျတော့။သူ့ဘဝမှာ ဘာမှအဓိပ်ပါယျမရှိတော့။သူသုံးရကျတိတိ အခနျးထဲကမထှကျ။ဖုနျးလဲပိတျထားသညျ။
သူငယျခငျြးတှေ အိမျကို လာရှာတာသိပမေယျ့ သူဖှငျ့မပေး။သူရုံးကို သှားကာ ထှကျခှငျ့ပေးရငျပေး မပေးရငျလဲ ဒီနရောနဲ့ဝေးရာကိုပို့ပေးဖို့တောငျးဆိုတော့ သူ့ဆရာက မေးရာ အကွောငျးစုံပွောပွလိုကျသညျ။သူ့ဆရာလဲ သူ့ကို စင်ျကာပူမှာသှားနဖေို့တာဝနျပေးတာနဲ့ ဘယျသူ့ကိုမှနှုတျမဆကျပဲ စင်ျကာပူကိုသူထှကျလာခဲ့လိုကျသညျ။စင်ျကာပူရောကျတော့ သူအလုပျထဲမှာပဲ အာရုံနှဈထားလိုကျကာ ကနျြတာအားလုံးကိုမထေ့ားလိုကျသညျ။ရောကျပွီးနှဈလလောကျနမှေ သူငယျခငျြးတှကေို ဆကျသှယျသညျ။ဥမ်မာခငျက သူ့ကို မကျဆခြေျ့ပို့ထားတာမနညျးပေ။သူစင်ျကာပူရောကျတော့ သူ့ယောကျကြားနဲ့အလညျလာရငျးလဈရငျလာတှသေ့ညျ။
သူလဲ မထိနျးတော့။သူစင်ျကာပူမှာတဈနှဈကြျောကွာသညျ။ဥမ်မာခငျနဲ့နှဈခေါကျသာတှသေ့ညျ။လိုငျးပျေါမှာတော့ ပွောဖွဈကွသညျ။သူလဲ နညျးနညျးအနညျထိုငျစပွုလာပွီ။ပွနျချေါတာနဲ့ သူလဲ ပွနျလာခဲ့သညျ။အာကာတို့က သူ့ကို နနျးဆီသူတို့သှားရှငျးပွထားတဲ့အကွောငျးပွောသညျ။မီမီခြိုတို့ကလဲယူပွီးသှားပွီ။မီမီခြိုက အကွောငျးစုံသိလို့ သူ့ကို နနျးဆီသှားတှပွေီ့းရှငျးပွဖို့တိုကျတှနျးပမေယျ့ သူမသှားရဲ။နနျးက ပဈပဈခါခါပွောလိုကျရငျ ဒီတဈခါသူအသကျရှငျသနျဖို့အတှကျသိပျမလှယျကူနိုငျ။သူမခံစားနိုငျတာကွောငျ့ သတ်တိနညျးနရေသညျ။သူရနျကုနျရောကျပွီး တဈလကြျောလောကျအကွာမှာ ဥမ်မာခငျက သူ့ဆီဖုနျးဆကျသညျ။ဝယေံထကျနိုငျငံခွားမနကျကသှားသညျတဲ့။သူလဲသိသညျ။ဝယေံထကျက စင်ျကာပူ မှာ ဆယျရကျလောကျကွာမညျ။
ဒါကွောငျ့ သူမနကျဖွနျကြ သူတို့အိမျမှာတှဖေို့အဆငျပွမေလားမေးတော့ သမီးကိုကြောငျးပို့ပွီးရငျအားပွီတဲ့။သူလဲ မနကျကြ ဥမ်မာခငျတို့ကှနျဒိုနားမှာစောငျ့နလေိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျထှကျသှားတော့ သူလဲ ဥမ်မာခငျတို့အထပျကိုသှားကာ သော့ကိုထားခဲ့တဲ့နရောကနယေူပွီး တံခါးဖှငျ့ကာပွနျပိတျပွီးစောငျ့နလေိုကျသညျ။နာရီဝကျကြျောလောကျကွာတော့ ဥမ်မာခငျပွနျရောကျလာသညျ။မတှရေတာတဈနှဈနီးပါးရှိပမေယျ့ ဥမ်မာခငျက အရငျအတိုငျးမပွောငျးလဲပေ။လှနဆေဲပဲ။မိုးပွာရောငျအပြော့သားကိုဝမျးဆကျအကွပျဝတျထားသညျ။ခန်ဓာကိုယျနဲ့ကပျနတောမို့ကောကျကွောငျးအလှကထငျးသညျ။သူလဲဥမ်မာခငျကို ဒီတခေါကျတှပွေီ့းရငျ နောကျထပျမတှပေဲ့နကွေရအောငျလို့ပွောတော့ ဥမ်မာခငျကလဲ လကျခံသညျ။တကယျလို့ တှရေ့ငျတောငျမှ ခုလိုအမွဲမတှဖေို့ပွောသညျ။ဒီတခေါကျတော့ သူဥမ်မာခငျရဲ့ခရကေို ရအောငျခြှတေော့မညျ။ပွောလဲပွောထားသညျ။
ဥမ်မာခငျတို့အိပျခနျးထဲရောကျတော့ သူတို့လငျမယားအိပျခနျးက ခနျးနားထညျဝါသညျ။ရခေဲသတ်ေတာ တီဗှီ အဲကှနျးအစုံရှိသလို အိပျရာကလဲ အကောငျးစား။ကုတငျပျေါမှာထိုငျရငျး စကားပွောကာ ဥမ်မာခငျရဲ့ ဖငျကို သူညှဈလိုကျ ပငျတီကွိုးကို ဆှဲလိုကျ ရိုကျလိုကျလုပျနသေညျ။ဥမ်မာခငျရဲ့ နှုတျခမျးကိုစုပျကာနမျးလိုကျပွီး ”ဒီပါးစပျက ခုပဲနမျးရမှာတအောငျ့နကွေအားမှာမဟုတျတော့ဘူး” ”အမယျ ဘာလို့လဲ” ”ကို့လီးကို စုပျပေးရမှာမို့” ”သှား ဒါမြိုးတော့တကျတယျ”ပွောပွီးသူ့ကို နမျးသညျ။အတျောကွာနမျးပွီးတော့ ဥမ်မာခငျကိုထခိုငျးလိုကျပွီး သူလဲမတျတပျရပျကာ လီးကိုစုပျခိုငျးလိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျလဲ သူ့အကငြ်္ီ ဘောငျးဘီတှကေိုခြှတျလိုကျတော့ အောကျက ကောငျက မာထနျနသေညျ။ ”ခဈချစ သူ့ဟာကွီးက အမွဲတမျးရယျဒီပဲ”ပွောပွီး စုပျပေးသညျ။လီးထိပျကို လြှာနဲ့ကလိလိုကျ စုပျလိုကျ ဘောတှကေို စုပျလိုကျနဲ့ကောငျးကောငျးလုပျပေးနသေညျ။
သူလဲ ကောငျးလာတာမို့ ဥမ်မာခငျဆံပငျတှကေိုဆှဲကာ ပါးစပျကို ဆောငျ့လိုးလိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျကို ကုတငျစောငျးပျေါခေါငျးတငျပွီး ပါးစပျကို လိုးလိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျလဲ ပုလှကြှေမျးနပွေီမို့ အလိုကျသငျ့နပေေးသညျ။သူလဲ ကောငျးလှနျးလာကာ ပါးစပျထဲကိုပနျးလိုကျပွီးအပွငျထုတျကာ ဥမ်မာခငျမကျြနှာပျေါပနျးလိုကျသညျ။ ”ဟငျ့ ညဈပတျတယျ သူမြားမကျြနှာတှေ ပကေုနျပွီ”သူလဲ တဈရှူးယူကာသုတျပေးလိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျရဘေူးထုတျကာ ပလုပျကငျြးလိုကျပွီးသူ့ကိုလာဖကျသညျ။သူလဲ ဥမ်မာခငျကိုအဝတျတှခြှေတျခိုငျးလိုကျသညျ။အဝတျတှခြှေတျလိုကျတော့ အတှငျးခံ ပနျးရောငျလေးသာကနျြတော့ သူလဲ ခြှတျလိုကျရငျး ”ဥမ်မာက ကိုယျ့လီးနဲ့လိုးတယျလို့သဘောထားပွီးကိုယျ့ဟာကို ကလိ ကိုယျက နို့တှကေိုငျပေးမယျ”ပွောပွီးဥမ်မာခငျကို နောကျကနဖေကျကာ နို့တှကေိုညှဈလိုကျ ကလိလိုကျလုပျနသေညျ။
ဥမ်မာခငျလဲ အစကေို့ကလိလိုကျ အဖုတျထဲ ကလိလိုကျနဲ့ တဖွညျးဖွညျးအရှိနျတကျလာသညျ။ပါးစပျကလဲ ကိျု့ လီးနဲ့ဆိုအရမျးကောငျးမှာပဲပွောကာ ကလိနသေညျ။သူလဲနို့တှခေတြောကိုရပျပွီးဥမ်မာခငျကိုနောကျကနေ ခေါငျးအုံးခုကာမှီခိုငျးပွီးရှကေ့နေ ဥမ်မာခငျ့နို့နှဈလုံးကွားကိုလီးနဲ့လုပျနလေိုကျသညျ။တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ဥမ်မာခငျလဲ အရှိနျတကျလာကာ လကျနဲ့တခြီပွီးသှားသညျ။နှဈယောကျသားအမောဖွနေလေိုကျကွသညျ။တျောတျောလေးကွာတော့ ဥမ်မာခငျကို သူ့အပျေါခှလိုငျးကာ နှဈယောကျသားခွောကျကိုးပုံစံလုပျကွသညျ။ဥမ်မာခငျက သူ့လီးကိုစုပျပေးသညျ။သူလဲ အစကေို့စုပျလိုကျအဖုတျကိုကလိလိုကျလုပျရငျး ဖငျထဲကိုလဲ ကလိနသေညျ။ဖငျထဲကို လကျနှဈခြောငျးပူးကာကလိနရေငျးအသားကလြာတာနဲ့ ဖငျဝကိုလြှာနဲ့ကလိလိုကျပွီးအဖုတျကအရညျတှယေူကာ လကျသုံးခြောငျးပူးကာထညျ့လိုကျပွနျသညျ။ဖငျက ယမျးခါလာတာမို့ အစကေို့ စုပျပေးလိုကျရငျးထညျ့လိုကျသညျ။
တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ဖငျက လကျသုံးခြောငျးကို ခံနိုငျလာသညျ။ဥမ်မာခငျ က ”ကို ဥမ်မာ့ကို လိုးပေးပါတော့ အရမျးခံခငျြနပွေီ ကို့ရဲ့လီးနဲ့ ဥမ်မထဲကိုထညျ့ပွီး လိုးပေးပါ” သူလဲကလိနတောတှရေပျကာ ဥမ်မာခငျကို သူ့အပျေါကနဆေောငျ့ခိုငျးလိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျလဲ သူ့အပျေါကနေ အားနဲ့မာနျနဲ့ဆောငျ့နသေညျ။မှေ့ရာက သူမဆောငျ့တိုငျးအောကျကိုနဈနဈဝငျသှားသညျအထိ ဆောငျ့သညျ။ပါးစပျကလဲ တအငျးအငျးနဲ့ အရမျးကိုမာနျတကျနသေညျ။တျောတျောလေးကွာတော့ သူလဲဥမ်မာခငျကို ပကျလကျလှနျကာခွထေောကျတှကေိုကိုငျခိုငျးထားပွီးအပျေါကနေ တရစပျဆောငျ့လိုကျသညျ။အခနျးထဲမှာ တဖှတျဖှတျတဗြှတျဗြှတျ တအားအားနဲ့ ဆူညံနသေညျ။ဒီလိုအနအေထားသာ ဝယေံထကျတှလေို့ကတော့ သှေးတကျသနေိုငျသညျ။သူ့ရဲ့ခဈြဇနီးလေးကို သူတို့နှဈယောကျအိပျတဲ့အိပျရာပျေါမှာ ပိုးစိုးပကျစကျ လိုးနတောကိုး။သူ့ဆောငျ့ခကျြတှကွောလာတာနဲ့အမြှ ဥမ်မာခငျလဲ ပွီးသှားရသညျ။
အရမျးကိုကောငျးတာမို့ သူမ ငွိမျးခမျြးကို တငျးတငျးကွီးဖကျထားလိုကျသညျ။အတျောလေးကွာမှ ငွိမျးခမျြးက ဖငျခတြော့မယျဆိုကာမှ သူမလဲ ကုနျးပေးလိုကျသညျ။ကိုယျကို မှရေ့ာပျေါမှာဝပျထားလိုကျပွီးဖငျကိုထောငျပေးလိုကျသညျ။ငွိမျးခမျြးက ဖငျကိုဖွဲကာလကျနဲ့ကလိလိုကျပွနျသညျ။ပွီးတော့ ဖငျကိုဖနျြးခနဲရိုကျကာ ”တောကျ ကောငျးလိုကျတဲ့ဖငျ ဒီဖငျကိုဘယျသူအရငျစလိုးဖူးတာလဲကောငျမ”ဖနျြးခနဲရိုကျလိုကျပွနျသညျ။ ”အ ဥမ်မာရဲ့ ဖငျကို ကို ပထမဆုံးလိုးဖူးတာပါ” ”မငျးရဲ့ဖငျပါကငျကို ဘယျမှာအဖှငျ့ခံမှာလဲ” ”ဥမ်မာရဲ့ ဘယျသူမှမလိုးဖူးသေးတဲ့ဖငျကို ဥမ်မာတို့ လငျမယားနှဈယောကျအိပျတဲ့ ကုတငျပျေါမှာ ကို ပထမဆုံးလိုးတာလို့ အဟငျ့ လုပျပေးတော့ကှာ ဥမ်မာဖငျက တအားယားလာပွီ”
”မလိုးခငျ လီးကိုစုပျပေးဦး” ဥမ်မာခငျလဲ ကုနျးထားရာမှ ကုတငျအောကျဆငျးကာ ငွိမျးခမျြးရှေ့ ဒူးထောကျပွီး လီးကိုအငမျးမရစုပျပေးလသေညျ။ငွိမျးခမျြးလဲ ဥမ်မာခငျလိုမိနျးကလေးမြိုး ထပျပွီးလဲမတှနေို့ငျတော့သလို ဒီလို တဏှာကွီးတဲ့သူမြိုးလဲ ထပျမတှနေို့ငျ။ပွီးတော့ မကနြေပျခကျြနဲ့လုပျခဲ့တာမို့ ညှာတာဖို့စိတျမကူး။ဥမ်မာခငျခေါငျးကိုကိုငျကာ ပါးစပျထဲကိုလေးငါးခွောကျခကျြဆောငျ့ထညျ့လိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျလဲ လီးက အာခေါငျကိုမထောကျမိအောငျကွိုးစားပွီးစုပျလိုကျရသညျ။သူမကိုပွနျကုနျးခိုငျးလိုကျပွီး ”ကဲ ဖငျကိုဖွဲပေးစမျး” ”ဟငျ့ သူပဲအမြိုးမြိုး အနိုငျကငျြ့တယျ”ပွောပွီးဖွူသှယျတဲ့လကျနှဈဖကျနဲ့ နောကျပွနျဖငျသားနှဈခွမျးကိုဖွဲပေးလိုကျတော့ စအိုဝရဲရဲကထငျးခနဲပျေါလာသညျ။ခရပှေငျ့ပျေါကို တံတှေးထှေးခလြိုကျပွီးမကျြလုံးကစားလိုကျရာ မှနျတငျခုံပျေါမှာ ခေါငျးလိမျးဆီဘူးတှတေ့ာနဲ့လှမျးယူလိုကျပွီးအဖုံးဖှငျ့တော့ ”အဲ့ဒါ ကိုကို့ရဲ့ ခေါငျးလိမျးဆီဗူး။
သူအရမျးကွိုကျလို့ သိပျတောငျမလိမျးဘူးချချ ”သူလဲဖငျဝကိုလောငျးခကြာ လီးကိုလဲ လိမျးလိုကျပွီး ”စောကျကောငျမ ဖငျကိုမရှုံထားနဲ့ ဖှငျ့ထား။ရှုံ့ထားရငျ နာလိမျ့မယျ”ပွောပွီးခရဝေကို လီးထောကျလိုကျကာ ဖိထညျ့လိုကျရာ ”ဗွဈ ဗြိ ဗြိ” ”ဟ အ အ အငျး” နာသှားကာ ဖငျဝရှုံ့လိုကျမိပမေယျ့ သတိရလို့ ပွနျဖှငျ့ပေးထားလိုကျသညျ။ကွီးမားတဲ့ လီးက ကဉျြးကွပျတဲ့စအိုဝကိုထိုးခှဲကာ ဝငျလာတာမို့ ဖငျဝတခုလုံးမီးစနဲ့ထိုးခံရသလိုပူခနဲဖွဈသှားပွီးနာကငျြမှုက ဖငျဝမှတဆငျ့ တကိုယျလုံးကို ပြံ့သှားသညျ။ငွိမျးခမျြးလဲ ခေါငျးလိမျးဆီကိုအနညျးငယျလောငျးခလြိုကျပွီး နညျးနညျးထညျ့လိုကျပွနျသညျ။နာကငျြလှနျးလို့ ဖငျဖွဲထားတဲ့ လကျတှကေ တဆကျဆကျတုနျနသေညျ။သူလဲ အစကေို့ လှမျးပွီးကလိလိုကျပွီး ထပျထညျ့လိုကျသညျ။
လီးကတဈဝကျလောကျဝငျသှားတော့ဆကျမသှငျးတော့ပဲ အစကေို့ကလိလိုကျပွနျသညျ။ဥမ်မာခငျတယောကျ နာလို့တအအ အျောနပေမေယျ့ ငွငျးတာတော့မငွငျး။သူလဲလီးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြး ပွနျဆှဲထုတျလိုကျတော့ ကြှံဝငျနတေဲ့စအိုဝက ပွနျကပျပါလာသညျ။ဒူးကိုအားပွု ပွီး လုပျနတောမို့ တကိုယျလုံးရဲ့ဝိတျကိုဒူးပျေါထောကျထားတဲ့လကျမှာ အားပွုထားရသညျ။လီးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးပွနျထညျ့လိုကျပွနျသညျ။အစကေို့ ကလိတာကွောငျ့ရော ဖငျဝက နာကငျြမှုက အကငျြ့ရသှားတာကွောငျ့နာတာဖွညျးဖွညျးခငျြးသကျသာလာကာ အဲ့ဒီနာကငျြမှုရဲ့အရသာကို ဥမ်မာခငျတယောကျ ခံစားလာရသညျ။တဖွညျးဖွညျးနဲ့ခံနိုငျလာကာ ဖငျခံရတာကို ကွိုကျစပွုလာသညျ။ငွိမျးခမျြးရဲ့လီးကိုတဆုံးထညျ့စခေငျြတာမို့ ”ကို ဥမ်မာ့ဖငျထဲကို လီးအကုနျထညျ့ခငျြထညျ့လေ။ခံနိုငျပွီ” သူလဲလီးကိုပွနျထုတျပွီးတဆုံးထိ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ထညျ့လိုကျသညျ။ ”ဗွဈ ဗွဈ ဗွဈ” ”အ ရှီး ကြှတျကြှတျ ရတယျ ခံနိုငျတယျ အာ့ ဟာ့ အီး”နာကငျြမှုတှနေဲ့အတူ ခံစားမှုတမြိုးက သူမတကိုယျလုံးကို ဆူပှကျသှားသလို အရမျးကို ဟော့လာသညျ။ပွငျးပွတဲ့ဆန်ဒတခုကို တောငျ့တမိလိုကျသညျ။
ဖငျကို ညှဈပေးလိုကျ ဖှငျ့ပေးလိုကျလုပျလိုကျသညျ။ငွိမျးခမျြးလဲ လီးတဝကျလောကျထုတျပွီးတဆုံးထညျ့လိုကျလုပျပေးနရေငျး ဖငျကညှဈတဲ့ဒဏျကွောငျ့ အရမျးကိုကောငျးနသေညျ။ ”အား ရှီးကောငျးလိုကျတာကှာ။ကောငျမ ဖငျကကပျြထုတျနတောပဲ။ကွိုကျလား ဖငျခံရတာကို” ”ကွိုကျတယျ အား အရမျးမိုကျတယျ။ဖငျခံရတာကွိုကျတယျ အ အ ဆောငျ့ဆောငျ”သူလဲ ဒူးအားကိုသုံးကာ ခပျဆကျဆကျဖိလိုးလိုကျသညျ။တအိုးအိုးနဲ့ရမကျသံပွငျးစှာညညျးနသေညျ။ကဉျြးကွပျတဲ့စအိုကိုလုပျရတာမို့ သူ့လီးကို တငျးကွပျစှာညှဈထားမှုကွောငျ့ ပွီးခငျြလာတာမို့ သူလီးကို ဖငျပေါကျထဲက ထုတျလိုကျပွီး ”ညောငျးပွီ။နောကျနဲနဲဆုတျ”ပွောပွီး ကုတငျစှနျးဖကျကိုဆှဲကာနရောခပြေးလိုကျသညျ။ဖငျကိုတံတှေးထှေးခလြိုကျပွီးလီးကိုခေါငျးလိမျးဆီကိုသုတျကာ ”ဖငျခံလို့ကောငျးလား စောကျကောငျမ” ”ဖနျြး” ”အား ကောငျးတယျ ကိုရယျ ဖငျခံလို့အရမျးကောငျးတယျ လုပျလေ ”ဖငျကိုတဖနျြးဖနျြးရိုကျရငျး ဥမ်မာခငျစိတျကိုပိုကွှအောငျလုပျပေးလိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျလဲ အရမျးကိုဟော့နပွေီ။
ဖငျကိုပွနျဖွဲခိုငျးကာ လီးကိုတဆုံးထညျ့လိုကျပွနျသညျ။ဥမ်မာခငျလဲ ခံနိုငျလာပွီမို့ သူမညှာတော့ လကျကိုဖယျခိုငျးကာ အစကေို့ ခခြေိုငျးပွီးဖငျသားနှဈခွမျးကိုခပျတငျးတငျးဆုပျကိုငျဖွဲကာတရစပျဆောငျ့လိုကျသညျ။အခနျးထဲမှာ လူနှဈဦးရဲ့ကနြေပျအားရတဲ့ညညျးညူသံက လှမျးနသေညျ။ဖငျကိုရိုကျလိုကျ လိုးလိုကျနဲ့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ပွီးခငျြလာသညျ။သူလဲ ဥမ်မာခငျရဲ့ဆံပငျတှကေိုဆှဲလိုကျတော့ ရမကျတှထေနျနတေဲ့မကျြနှာကိုနမျးလိုကျပွီးနောကျကနဆေောငျ့လိုးလိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျရဲ့ လိုးပါလိုးပါဆိုတဲ့အသံက ကွားရတဲ့သူအဖို့ ပိုပွီးအားတကျစသေညျ။သူလဲမညှာမတာဆောငျ့လိုကျရငျး လီးတဈခုလုံး ကဉျြတကျလာကာ ဖငျကကွှကျသားတှကေလဲ အရမျးကိုညှဈလာတာမို့ သုတျရညျတှမေထိနျးနိုငျတော့ပဲ ပနျးထုတျလိုကျရသညျ။
ဥမ်မာခငျလဲ အရမျးကိုဟော့ကာ ပွီးသှားပွီး ငွိမျးခမျြးရဲ့လီးတဈလုံးကို ဆှဲညှဈထားလိုကျသညျ။ နှဈယောကျသား ထပျရကျသား ကုတငျပျေါမှာ လဲကသြှားသညျ။နှဈယောကျလုံးခြှေးတှနေဲ့ရှဲနသေညျ။မောဟိုကျနတောမို့ အမောဖွနေကွေသညျ။မကျြနှာတှကေ ကနြေပျအားရတဲ့မကျြနှာတှေ။အတျောလေးကွာမှ ဥမ်မာခငျက သူ့ကို ဖယျခိုငျးကာ ရခြေိုးခနျးထဲဝငျသှားတော့ သူလဲနောကျကနလေိုကျဝငျသှားသညျ။ရခြေိုးခနျးထဲရောကျတော့ သူ့လီးကိုဥမ်မာခငျက ဆေးပေးသလို သူကလဲ ဥမ်မာခငျကို ဆေးပေးလိုကျသညျ။ပွနျထှကျလာတော့ ဥမ်မာခငျက ဘီရိုထဲကအဝတျထုတျကာဝတျလိုကျပွီး သူ့ကိုလဲ သူမယောကျကြားပုဆိုးထုတျပေးလို့ဝတျလိုကျပွီးကုတငျပျေါတကျကာ တယောကျကို တယောကျဖကျထားရငျး စကားတှပွေောနကွေသညျ။အတျောကွာတော့ မကျြခုံးကစငျးလာတာမြု့ မှေးလိုကျကွသညျ။ပွနျနိုးလာတော့ နောကျတခါထပျလုပျကွပွနျသညျ။
ဒီတခါတော့ ဖငျက နညျးနညျးနာနသေေးတာမို့ အဖုတျကိုပဲ လုပျဖွဈသညျ။ခဏနားပွီးပွနျစိတျပါလာတော့ ဖငျကိုပဲလုပျလိုကျသညျ။ဥမ်မာခငျ ဖငျခံရတိာကုကွိုကျသှားသညျ။လေးနာရီထိုးခါနီးတော့ ဥမ်မာခငျက ရခြေိုးအလှပွငျအဝတျလဲကာ သူ့သမီးကိုကြောငျးသှားကွိုသညျ။သူလဲ ယူစရာရှိတာတှယေူ အဝတျလဲကာ ပွနျလာလိုကျသညျ။ညကြ ဥမ်မာခငျနဲ့ လိုငျးပျေါမှာစကားပွောဖွဈကွသညျ။နောကျရကျလဲ ဥမ်မာခငျ့အိမျကိုသှားပွီး လုပျသညျ။ဒီတခါတော့ ဖငျကိုပဲလုပျလိုကျသညျ။ညနကြေ လမျးလြှောကျတာတောငျနညျးနညျး ကှတတ ဖွဈနသေညျ။ငွိမျးခမျြးလဲ ဝယေံထကျပွနျမလာခငျခြိနျထိ ဥမ်မာခငျနဲ့လုပျဖွဈသညျ။ပွနျလာခါနီးတဈရကျအလိုမှာတော့ နားလိုကျသညျ။မနားလို့လဲမဖွဈ။သူလုပျထားတာနဲ့ ဥမ်မာခငျလဲ ဘလဗိုငျလိုကျနပွေီ။သူတို့နှဈယောကျ ရှရှေ့ောကျ အတကျနိုငျဆုံးမတှတေ့ော့ဖို့ တိုငျပငျဖွဈသညျ။ သူလဲ အလုပျကိုအာရုံစိုကျပွီးစိတျနှဈကာ လုပျနလေိုကျသညျ။သူငယျခငျြးတှနေဲ့တော့ အမွဲတမျးနီးပါးဆုံဖွဈသညျ။သူငယျခကျြးတှကေ နနျးစံခမျးကိုသှားတှဖေို့ပွောပမေယျ့ သူမထေ့ားပဲကောငျးပါတယျဆိုပွီး နလေိုကျသညျ။
တဈရကျမှာတော့ မီမီခြိုကသူ့ကို ဖုနျးဆကျပွီးအားရငျ ခဏလာခဲ့ပါဆိုလို့သှားတော့ မီမီခြိုတို့နဲ့အတူ နနျးကိုပါတှလေို့ကျရသညျ။ ”နနျး နကေောငျးတယျနျော” ”ကောငျးလို့ ခုလိုတှရေ့တာပေါ့” ”နနျးနငျဟာလေ စကားကောငျးကောငျးပွောလေ” ”ပွောတာပဲ သူမေးတာက ဟုတျမှမဟုတျတာ” ”ကဲပါ ကိုခမျြး မီတို့ ဟိုဖကျသှားလိုကျဦးမယျ။စကားအေးဆေးပွောကွဦး။စိတျခမြယျနျော ”ပွောပွီးသူ့မကျြစတေ့ဖကျမှိတျပွကာ ထှကျသှားကွသညျ။ ”နနျး ကိုယျ့ကို ခှငျ့လှတျပေးဖို့မတောငျးဆိုခငျြပါဘူး။ဒါပမေယျ့ မရညျရှယျပဲ ဖွဈသှားတာကိုတော့ ကို ဘယျလိုရှငျးပွရမှနျးမသိတော့ဘူး” ”ဘာမှလာရှငျးပွမနနေဲ့။ယောကျကြားကွီးဖွဈပွီး သတ်တိကလဲမရှိဘူး။ထိပျတိုကျရငျဆိုငျဖို့မကွိုးစားဖူး။ထှကျပွေးဖို့ပဲဟငျး မပွောခငျြဘူး” ”နနျးရဲ့ အမုနျးကိုဘယျလိုမှမခံစားနိုငျလို့ပါ။ကိုယျ့ဘဝမှာ တဈဦးတညျးသောတဈခုတညျးသောမြှျောလငျ့ခကျြက နနျးပါ။
နနျးကသာ ကို့ကို ထပျပွီးနာကညျြးမုနျးတီးပွီးပွောရငျ ကိုယျ ဘယျလိုမှမခံစားနိုငျလို့ပါ” ”ခုကြ ခံနိုငျပွီပေါ့ အဲ့လိုလား” ”ခုလဲ မခံနိုငျဘူး။ကြေးဇူးပွုပွီး ကို့ကို မုနျးမသှားပါနဲ့လို့တောငျးပနျပါတယျကှာ။ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ အဖွဈဆိုးကို ကိုယျလဲ ဘယျလိုမှမမေ့ရခဲ့ပါဘူး။ကိုယျ နနျး သိအောငျဘယျလိုရှငျးပွရမလဲမသိတော့ဘူး” ”ဘာမှ ရှငျးပွမနနေဲ့။ကိုအာကာတို့ ကိုဝယေံတို့ ရှငျးပွပွီးပွီ။အိမျကိုလဲ လာပွီးဖဖေတေို့မမေတေို့ကို တောငျးပနျပွီးလို့ ဖဖေတေို့က ဖွဈပွီးခဲ့တာတှကေို ပွနျပွီး အပွဈမယူတော့ဘူးတဲ့။အဲ့တုနျးကလဲ နောကျပိုငျးမှ သိရတာ ရှငျကွီးက ဟီးရိုးကွီးလုပျပွီး အပွဈခံသှားတာကို လှနျမှသိလိုကျရလို့ စိတျမကောငျးဖွဈမိရတယျတဲ့။အဲ့ကလေးကိုတှရေ့ငျလဲ အိမျကိုလာလညျပါ။
အပွဈမရှိပဲနဲ့အပွဈခံသှားတဲ့အတှကျလဲ စိတျမကောငျးပါဘူးလို့ပွောပေးပါတဲ့” ”ဟငျ ဟိုကောငျတှကေိုယျ့ကို ဘာမှမပွောဘူး” ”နနျးကို တှဖေို့ကောမပွောဘူးလား” ”ပွောတော့ပွောတယျ။ကိုယျကမှမတှရေဲ့တာကို” ”မုနျးဖို့ကောငျးတာ။ဒီက ခှငျ့လှတျလို့ ဘယျနမြေ့ားလာမလဲစောငျ့နတော သူကယောကျကြားဖွဈပွီး သတ်တိမရှိလို့ မီတို့ကို အကူအညီတောငျးပွီး ခုလိုတှဖေို့လုပျလိုကျရတာ သိပွီလား” ”ဟား တကယျကွီးလား အားပြျောလိုကျတာကှာ ကိုယျတကယျမသိလို့ပါ” ”ဟငျး မပွောခငျြဘူး ဒီမှာမိနျးကလေးဖွဈပွီး သူ့ကို” ဒီလိုနဲ့ တဈနှဈနီးပါအကွာ တခုသောတနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ”တိမျပွာပွာနတေ့နေ့ Sunday မှာကှယျ မင်ျဂဆောငျပှဲလေး ကငျြးပနပေါတယျ။ သူမြားကို အားကမြိတယျ ခဈြလေးရယျ” သတို့သား ငွိမျးခမျြးနဲ့ သတို့သမီး နနျးစံခမျးတို့ရဲ့မင်ျဂလာဆောငျလေးတခု။
သတို့သားမကျြနှာက မှိုရတဲ့မကျြနှာနဲ့။သူငယျခငျြးတှကေ မငျးပါစပျ နာရှကျတကျခြိတျနပွေီဆိုပွီး နှိပျကှပျနကွေသညျ။သတို့သမီးကတော့ ပွုံးနပွေီး မကျြလုံးအိမျထဲမှာ သတို့သားကိုခဈြတဲ့စိတျအပွညျ့နဲ့။ မင်ျဂလာဦးအိပျခနျးထဲမှာ နနျးစံခမျးတယောကျတညျး။မင်ျဂလာကုတငျကို သူ့စိတျကွိုကျပွငျဆငျထားတာ။ခုတော့ကုတငျပျေါထိုငျပွီး စိတျလှုပျရှားနသေညျ။လငျယောကျကြား ပွနျလာနပွေီ။သူငယျခငျြးတှကေ ခုနကမှပွနျသှားကာ အမြိုးမြိုးစသှားကွသညျ။သူမဘဝမှာ ထိနျးသိမျးခဲ့ရတဲ့အပြိုစငျဘဝကို ဒီည ခဈြရတဲ့သူကို ပေးရတော့မညျ။အတှအေ့ကွုံက စာတှသေ့ာရှိပွီး ကိုယျ့တှမေ့ရှိခဲ့။ခဈြသူဘဝမှာ ကိုကိုကလဲ အခှငျ့အရေးမယူ။
မင်ျဂလာဦးညမှ အပြိုဘဝကိုစှနျ့လှတျမယျလို့လဲပွောထားတာကွောငျ့။သူစိတျလှုပျရှားစှာ တောငျတှမွေောကျတှေး။ တံခါးဖှငျ့ဝငျလိုကျတော့ ခဈြရတဲ့ဇနီးနနျး။ကုတငျပျေါမှာထိုငျနသေညျ။သူဝငျလာတော့တုနျသှားတာကိုတှတေ့ော့ သူရီခငျြသှားသညျ။သူလဲ အဝတျအစားခြှတျပွီးရခြေိုးလိုကျဦးမယျပွောကာ ရဝေငျခြိုးလိုကျသညျ။ရခြေိုးခနျးကထှကျလာတော့ တပတျလာပေးပွီး အဝတျထုတျပေးထားသညျ။သူလဲ ရသေုတျနရေငျး ညအိပျဂါဝနျပနျးရောငျလေးနဲ့ လှနတေဲ့ခဈြသူကိုကွညျ့ရငျး သူတကယျကွီး မိသားစုဘဝကို ပိုငျဆိုငျရပွီလို့ တှေးမိလိုကျသညျ။သူအဝတျဝတျပွီးတော့ ”နနျး အိပျကွစို့လေ ပငျပနျးနတေဲ့ဟာ” ”အငျ မအိပျခငျြသေးဘူး။အိပျခငျြ အိပျနှငျ့ နနျး တီဗှီကွညျ့မလို့” ”အာ မကွညျ့နဲ့တော့လေ အိပျရအောငျ” ”မအိပျသေးပါဘူးဆို။ဘာလဲ ရပွီဆိုပွီး ခြုပျခယျြခငျြတာလား ဟငျးဟငျး ဒါမြိုးမရဘူးနျော”
”ကဲ ဒီလောကျ မှရှိလှတာ လာလေ့”ပွောပွီးနနျးကိုပှခြေီ့လိုကျတော့ ”အမေ့ ဘာလုပျတာလဲ မအိပျသေးဘူးနျော လှတျ လှတျ” ကုတငျပျေါတငျပွီး နနျးရဲ့မကျြနှာခြောခြောလေးကို အနမျးမိုးရှာခလြိုကျရာ အသံတိတျသှားသလို နှုတျခမျးကိုနမျးလိုကျတော့ မကျြလုံးက မှစေ့ငျးသှားသညျ။ နနျးတယောကျ ခဈြရတဲ့ကိုကို့ရဲ့ အနမျးတှအေောကျမှာ လှငျ့မြောသှားသညျ။ကိုကို့ရဲ့ ကွငျနာယုယမှုတှအေောကျမှာ အပျေါတကျသှားလိုကျ အောကျကိုကလြာလိုကျဖွဈနရေသညျ။ ”ကိုကို နာတယျဖွေးဖွေး” ”အစမို့နျော နနျး စိတျကိုလြှော့ထား” နနျးကိုသတိပေးရငျး နနျးရဲ့အဖုတျလေးထဲလီးကို ဖွညျးဖွညျးခငျြးထညျ့လိုကျထုတျလိုကျ လုပျပေးနရေငျး အရညျတှနေဲ့ခြောလာတာကွောငျ့ ဆကျခနဲ ထိုးခကြာအဆုံးထိဝငျသှားသညျ။
”အား ရှီး နာတယျ ကိုကိုရယျ အဟငျ့ဟငျ့” ငွိမျးခမျြးလဲ နို့တှကေိုတလှညျ့စီစုပျရငျး ခဏရပျကာထားလိုကျသညျ။တကိုယျလုံးကိုပှတျသပျပွီး ဖွညျးဖွညျးခငျြးဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။နနျးလဲ ခံနိုငျလာခဲ့ရသညျ။ကိုကို့ရဲ့ ဆောငျ့ခကျြတှအေောကျမှာ နနျး အရမျးကို ကောငျးခဲ့ရသညျ။မင်ျဂလာဦးညမှာ ကိုကိုက နနျးကို ပညာတျောတျောမြားမြားသငျပေးခဲ့သညျ။အိမျထောငျသကျ နညျးနညျးကွာလာတာနဲ့အမြှ နနျးလဲ ကိုကို့ရဲ့သငျပွပေးမှုကွောငျ့ ပညာတျောတျောမြားမြားတကျလာရသညျ။ကိုကိုနဲ့ အတှဲညီညီအိပျရာထဲမှာ ဆကျဆံတကျလာပွီ။ကိုကို့က သူ့အပျေါ အရမျးကိုခဈြပွီး အစစအရာရာ ကောငျးတာကွောငျ့ နနျးလဲ ကိုကို့အပျေါမှာ မိနျးမကောငျးအဖွဈနပေေးသညျ။နနျးက လှတျလှတျလပျလပျနခေငျြသေးပမေယျ့ ကိုကိုက ကလေးယူခငျြတာကွောငျ့ အိမျထောငျကပြွီးတဈနှဈကြျောမှာ ကိုကို့အတှကျ ရငျသှေးလှယျထားရတော့ ကိုကိုအရမျးပြျောသှားတဲ့မကျြနှာက သူမခဈြလို့မဝ။
ငွိမျးခမျြးဘဝခုမှ တကယျငွိမျးခမျြးသှားရတာပငျ။ပြျောရှငျစရာမိသားစုလေးတခုကို ဖနျတီးထားနိုငျပွီ။ခဈြရတဲ့ဇနီးရယျ ခဈြရတဲ့သမီးရယျအပွငျ ခုနောကျထပျကိုယျဝနျကို နနျးကလှယျထားသညျ။သူ့အတှကျအရာရာပွီးပွညျ့စုံပွီ။ဒီမိသားစုဘဝလေးကို ဘယျလိုမှအပကျြစီးမခံနိုငျ။သူအိမျထောငျကပြွီးကတညျးက မိနျးမရှုပျခွငျးကိုလုံးဝရှောငျလိုကျသလို ဥမ်မာခငျနဲ့လဲ လုံးဝမှမပတျသတျတော့။သူမယူခငျနှဈပတျလောကျအလိုမှာ ဥမ်မာခငျနဲ့ ငါးရကျအတူနပေေးလိုကျသညျ။နောကျနောငျဘယျတော့မှထပျမတှကွေ့တော့နဲ့လို့ပွောခဲ့လိုကျသညျ။တခါတခါမှာတော့ဥမ်မာခငျတို့လငျမယားအိပျတဲ့ကုတငျမှာ သူနဲ့ ဥမ်မာခငျတို့ လုပျတာကို ဗီဒီယိုခိုးရိုကျထားတာကို ပွနျကွညျ့ပွီး သတိတော့ရမိသား။ဒါပမေယျ့ ထပျတော့မဆုံလိုတော့။
ဒီဗှီဒီယိုဖိုငျတှကေိုတော့ဖကျြပဈရမှာနှမွောတာမို့ မကျြနှာတှကေိုတော့ editလုပျကာဖကျြထားပွီး မူရငျးကိုတော့အပွီးတိုငျဖကျြပဈလိုကျသညျ။ခုခြိနျမှာတော့ သူစိတျထဲမှာ ဝယေံထကျနဲ့ ဥမ်မာခငျတို့အပျေါ ထားတဲ့ အမုနျးတှကေ ပွသှေားလပွေီ။ရှဆေ့ကျ သူ့ဘဝကို သာယာအောငျလုပျမယျလို့တှေးပွီး အိပျမောကနြတေဲ့ သမီးကို အသာလေးနမျးလိုကျပွီး နနျးရဲ့ပါးလေးကိုနမျးလိုကျတော့ ”ကိုကို ခုထိမအိပျသေးဘူးလား” ”အငျးအိပျမလို နနျးရဲ့” သူ့ဖကျလှညျ့ကာရငျခှငျထဲဝငျလာတော့သူနနျးကိုဖကျထားလိုကျသညျ။ ”ကိုကို စိတျလာနတောလား မာနတေယျ”ပွောပွီးနနျးက သူ့လကျကလေးနဲ့ အသာထုပေးနသေညျ။သူလဲအလိုကျသိတဲ့နနျးကိုခပျဖှဖှလေးနမျးပွီး ကနြေပျစှာပွုံးလိုကျမိလသေညျ။
သူငယ်ချင်း ငါတော်တော်အခက်အခဲ ဖြစ်နေလို့ပါကွာ။ကူညီပေးပါလား ခက်တယ်ကွာ။မင်းကလဲ ဇွတ်ကြီးပဲ။အေး ရရင် ငါပြောမယ်။မင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းပေးခဲ့” ”အေးအေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ” ငြိမ်းချမ်း တယောက် မငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးပါ။သူထောင်ကလွတ်လာတာမကြာသေး။သူထောင်ကျရတာလဲ ခုသူမျက်နှာအောက်ကျပြီးအကူအညီတောင်းနေရတဲ့ ဝေယံဟိန်းရဲ့ အပြစ်လဲမကင်းပေ။သူတို့တွေက တောင်ကြီးနည်းပညာတက္ကသိုလ်က ပထမနှစ်ကတည်းက တဆောင်တည်းနေခဲ့ခင်ခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ။မေဂျာတွေမတူကြပေမယ့် ဆိုးဖော်ဆိုးဖက်ငတ်ဖော်ငတ်ဖက်တွေမို့ ညီအကိုတွေထက်ချစ်ကြသည်။သူက မိဘမရှိ။ဦးလေးဖြစ်သူက ကြည့်ရှူ့စောင့်ရှောက်ထားတာ။
ညီအကိုသားချင်းမရှိတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို အရမ်းမင်သည်။ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သတ်လာရင် အစစအရာရာ အနစ်နာခံသည်မို့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေပေါသည်။နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲဖြေပြီးညမှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ခွဲရတော့မယ်ဆိုပြီး သောက်ကြစားကြသည်။ပြီးတော့ လျှောက်လည်ကြတော့ သူက မသွားချင်။မူးနေလို့ တခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့တားသေးသည်။ဝေယံထက်က မရ။အတင်းကိုသွားချင်နေသည်။သူကတော်တော်မူးနေသည်။ဆိုင်ကယ်သူစီးမယ်ဆိုတော့လဲ ပေးမစီး။သူ့နောက်ကဘယ်သူ့မှမလိုက်ရဲ။သူကလိုက်ပြီး ထိန်းရသည်။လျှောက်လည်ကြရင်း လုံခြုံရေးရဲတွေနဲ့ ငြိကာ ပြသာနာတက်ကြသည်။သူက အတန်တန်တားတဲ့ ကြားက ဝေယံထက်က တားမရ။ရဲတွေကစက်နဲ့ လူခေါ်တော့ ရောက်လာတဲ့အခါ ထွက်ပြေးကြရင်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုဖြတ်ကျုံးလိုက်သည်။သူတို့လဲ ဆေးရုံရောက်သွားသည်။
ဝေယံထက်တိုက်လိုက်တဲ့ဆိုင်ကယ်က မောင်းတဲ့ကောင်မလေး နေရာမှာပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားလို့ ကောင်မလေးရဲ့မိဘတွေက အမှုဖွင့်ထားသည်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောသည်။ဝေယံထက်ကြောက်နေသည်။သူ့မိဘတွေချက်ချင်းလိုက်လာပြီး အမှုပိတ်ပေးဖို့ လုပ်ပေမယ့်မရ။ထောင်ကသေချာပေါက်ကျမည့်မို့ ဝေယံထက် အဖမ်းမခံပဲ ထွက်ပြေးမယ်လုပ်သည်။သူငယ်ချင်းတွေက အတင်းတားရသည်။နောက်ဆုံး သူက သူ့မှာ ဘာမှမရှိ။
သူ့ဦးလေးကလဲ သူ့ဟာနဲ့သူ။သူထောင်ကျလို့ ဝမ်းနည်းမယ့်သူမရှိ။ဝေယံထက်က မိဘအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ သူ့ကောင်မလေးကလဲ တငိုငိုတရီရီ။နောက်ဆုံး သူဘယ်သူ့ကိုမှမတိုင်ပင်ပဲ ဆိုင်ကယ်ကိုသူမောင်းတာပါလို့ ဝန်ခံလိုက်သည်။သူငယ်ချင်းအားလုံးအံ့သြကုန်ကြသလို သူတို့ကိစ္စကို သိတဲ့ရဲတယောက်ကတောင်သူ့ကို မင်းထောင်ကျမှာနော်လို့ သတိပေးသည်။နောက်ဆုံး သူထောင်ကျသွားတော့ ဝေယံထက်က ထောင်ကထွက်လာရင် ဘာပဲအကူအညီလိုလို သူ့ဆီလာခဲ့ပါ သူပြန်ပြီးကျေးဇူးဆပ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောသည်။သူထောင်ကျတော့ အင်းစိန်ထောင်ကျသည်။ထောင်ဝင်စာလာတွေ့မယ့်သူမရှိ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က သူ့သူငယ်ချင်း ဇွဲနိုင်က လာတွေ့သည်။သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအကြောင်းပြောပြသည်။
ဝေယံထက်က အိမ်ထောင်ကျနေပြီ။သူ့ကောင်မလေးနဲ့မဟုတ်။သူဌေးသမီးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးသူဌေးဖြစ်နေပြီ။ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်သူကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောသည်။နောက်ပိုင်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်လာတွေ့ကြသည်။ဝေယံထက်တော့မပါ။သူထောင်ကလွတ်တော့ သွားစရာမရှိ။ဦးလေးက ဆုံးသွားတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီ။တကောင်ကြွက်တစ်မျက်နှာ။နေစရာမရှိ။စားစရာမရှိ။ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကပ်နေပြီးအလုပ်ရှာပေမယ့် ထောင်ထွက်တစ်ဦးမို့အလုပ်ကမခန့်ချင်။သူ့သူငယ်ချင်းတွေက နိုင်ငံခြားမှာရောက်တဲ့သူနဲ့ နယ်မှာရောက်တဲ့သူနဲ့။
နောက်ဆုံး ဝေယံထက်ဆီသွားပြီအကူအညီတောင်းတော့ ရှောင်ဖယ်ဖယ်။ ”တောက် ဒီခွေးသား ကျေးဇူးရှိလို့ ကျေးဇူးဆပ်တာပေါ့ကွာ” ”ထားလိုက်ပါကွာ။ငါလဲအရမ်းကိုအခက်အခဲ ဖြစ်နေလို့။အေးလေ သူလဲ ငါလိုထောင်ထွက်တစ်ဦးကို ဘယ်လိုအလုပ်ပေးချင်မလဲ။သူကခုဆို ကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူ။ပြီးတော့ သူဌေးအငယ်စားလေ” ”ဘာဆိုင်လဲကွာ သူအစား မင်းထောင်ကျခံတာလေ။
အားလုံးသိတာပဲ” ”နေပါစေကွာ” ”ချမ်းကြီး မင်းနည်းနည်းတော့ သည်းခံပေးကွာ။ငါအမြန်ဆုံး အလုပ်ရှာပေးမယ်။ငါလဲ အလုပ်တွေမပြတ်သေးလို့။သူငယ်ချင်းစိတ်ချ။မင်းကိုမှမယုံရင်ဘယ်သူ့ကိုမှယုံစရာမရှိဘူး။မင်းရဲ့ အကြောင်းကို ငါတို့အသိဆုံးပဲ။ရော့သူငယ်ချင်း မင်းအသုံးလိုနေမှာစိုးလို့။ဒီတိုင်းပေးရင်မင်းကယူမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းအဆင်ပြေတဲ့တနေ့ကျ ပြန်ဆပ် ဟုတ်ပြီလား” ”အေးကျေးဇူးကွာငါမင်းဆီက ယူနေရတာများလှပြီ” ”မလိုဘူးဟျောင့်။နောကတခါဆို လက်သီ ဟားဟားဟား” ဒီလိုနဲ့ ဆယ့်ငါးရက်လောက်ကြာတော့ ဇွဲနိုင်ကအပေါင်းအသင်းတွေကို ပြောလိုက်သည်ထင်သည်။
ဝေယံထက် သူ့ကို သူ့အိမ်မှာ ခြံစောင့် အလုပ်ကိုပေးသည်။သူလဲ ဝမ်းသာသွားသည်။အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းသလို သူ့မိန်းမ ဥမ္မာခင်က သူ့ကို ကြည့်ပြီး ကိုကိုက ဘယ်လိုလူနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်တာလဲမသိဘူး ဒီလိုထောင်ထွက်တစ်ဦးကို အရေးအရာလုပ်ပြီး အလုပ်ပေးသေး လို့သူ့ကိုအထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ကာ ပြောတော့ သူ့ဘဝမှာ တခါမှဒီလို အထင်အမြင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်ကာ ပြောတာမခံခဲ့ရဘူးပေ။ထောင်ကျတော့လဲ ထောင်ထဲမှာအလိုက်သိမှုအနစ်နာခံမှုတွေကြောင့် လူခင်များရသလို ထောင်ကထွက်တော့လဲ ထောင်ထွက်မှန်းမသိကြ။သိတော့လဲ သူ့ရဲ့အပြောအဆို အပြုအမူနေပုံထိုင်ပုံတွေကြောင့် အထင်သေးမခံရ။အလုပ်လိုချင်သော်လည်း ထောင်ထွက်တစ်ဦးမို့ မခန့်ချင်တာကို နားလည်သည်။
ခုလို ရှေ့မှာ ပေါ်တင်ပြောပြီးအထင်သေးတဲ့အကြည့်မျိုးနှိမ့်ချတဲ့အမူအရာမျိုးကိုခံလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုဒေါသထွက်သွားရပေမယ့် မျက်နှာမပျက်မိအောင်ထိန်းလိုက်ရသည်။ရုပ်လေးလှသလောက် အထင်သေးအမြင်သေးရှိတဲ့ဥမ္မာခင်ပါလား။ သူဝေယံထက်တို့အိမ်မှာနေစဉ်အတွင်း ဝေယံထက်ကတစ်မျိုး ဥမ္မာခင်ကတမျိုး နှိမ်ကာ ဆက်ဆံတက်သည်။ဝေယံထက်က သူငယ်ချင်းကောင်းမပီသ။သူ့ကို သူငယ်ချင်းများက ဆက်သွယ်လို့အဆင်ပြေစေရန် သူထောင်ကထွက်လာချင်း ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပေးထားသည်။
အဆင်ပြေလားမေးတော့ အဆင်ပြေတယ်လို့သာပြောရသည်။သူငယ်ချင်းတွေဆုံတဲ့အခါမျိုးတွင် ဝေယံထက်က ဘယ်တော့မှမခေါ်။နောက်မှသူငယ်ချင်းတွေမေးမှ သိရသည်။ဆုံမည်ကိုသူမသိဘူးပြောတော့ သူငယ်ချင်းတွေက မင်းမလိုက်ချင်ဘူးလိုဝေယံထက်ကပြောတယ်လို့ပြန်ပြောကြသည်။သူတခါတလေတော့ ဝေယံထက်တို့လင်မယားအကြောင်းပြောမိသည်။သူ့ကို သူငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့မဆက်ဆံချင်တောင်မှ အိမ်စေတယောက်လိုမဆက်ဆံသင့်ဘူးလို့မြင်မိသည်။ထမင်းဟင်းစားရတာတောင် ခွဲခြားမှုရှိသည်။စိတ်ထဲမှာ တော်တော်ကို စိတ်နာမိသည်။သူတို့မှာသမီးလေးတယောက်ရှိသည်။နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီးချစ်စရာအတော်ကောင်းသည်။ကလေးက သူ့ကိုခင်ပေမယ့် သူတို့တွေက မဆက်ဆံခိုင်း။တစ်နှစ်နီးပါလုပ်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်း သက်ဦးရဲ့အကူအညီနဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ရသည်။အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးလဲဖြစ်တာမို့ လစာကမဆိုးပေ။
သူ့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့ အနစ်နာခံမှု ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ သြစတြေးလျကိုသွားဖို့ တာဝန်ပေးခံရသည်။သုံးနှစ်လောက်ကြာတော့သူပြန်လာတော့ ပိုက်ဆံအတော်များများစုမိတာမို့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ ကားတစ်စီးဝယ်ကာ ပိုတဲ့ငွေတွေကို ဘဏ်မှာစုထားနိုင်သည်။အပိုသုံးစရာလဲမရှိတာမို့ သူ့အတွက် လစာက ပိုရုံမက စုပင်စုနိုင်သည်။ချစ်ရမယ့်သူလဲမတွေ့သေးတာကြောင့် ကြေးစားတွေနဲ့ တွေ့လိုက် ကကတွေနဲ့တွေ့လိုက်နဲ့ ဘဝကိုပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်သန်းနေသည်။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံတော့ ဝေယံထက်နဲ့ပါတွေ့သည်။သူကတော့မျက်နှာပြောင်ပြောင်ပင်။သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ်မကျေနပ်ပေမယ့် ဘာမှတော့မပြောတော့။ဝေယံထက်တို့က အိမ်ကို ငှါးကာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းမှာ ပြောင်းနေသည်တဲ့။
သူသွားလည်တော့ ဥမ္မာခင်ကပါ အပြောအဆိုပြောင်းလဲလာသည်။သူက ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်နေသည့်အပြင် အနေအထားကလဲ ပြောင်းလဲလာသည်ကိုး။သြော် လူတွေ လူတွေ ပိုက်ဆံမရှိရင် သူငယ်ချင်းကအစ ပြောင်းလဲ လာပါလားလို့တွေးမိလိုက်သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူဝေယံထက်တို့ လင်မယားနဲ့မကြာခဏဆုံဖြစ်သည်။ဘန်ကောက်တို့ စင်ကာပူတို့သွားရင်လဲ တူတူသွားဖြစ်သည်။ဝေယံထက်တို့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့ သူတို့ကုမ္ပဏီက အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ကိုး။သူတို့ဆီက ယန္တယားတွေကို ငှါးရမ်းအသုံးပြုတာမို့ အမြဲဆက်ဆံမှုရှိနေသည်။သူလဲခုဆို ကုမ္ပဏီက အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာရယူနိုင်ခဲ့သည်။သူ့ရဲ့ ရိုးသားမှု ကြိုးစားမှုကြောင့် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်လို့ သူထင်မိသည်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ သူ ဘန်ကောက်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားရသည်။သုံးရက်လောက်နေပြီး အလုပ်ပြီးတော့ အပြန်အတွက်လက်ဆောင်ဝယ်ဖို့အသွားမှာ ဥမ္မာခင်နဲ့ဆုံသည်။ ”ဟယ် ကိုငြိမ်းချမ်း ဒီရောက်နေတာလား” ”ဟုတ်တယ်။ ဥမ္မာတို့လဲရောက်နေတာလား။တယောက်တည်းလား။သမီးရော” ”သမီးကမပါဘူး။ကျောင်းတက်ရတာမို့ သူ့အဘွားတွေနဲ့နေခဲ့တယ်။ကိုကိုက အလုပ်ကိစ္စနဲ့ စင်္ကာပူကိုမနေ့ကသွားတယ်။ဒီနေ့ပြန်ရောက်မယ်ပြောတာပဲ” ”အော် ဟုတ်လားဒါဆိုတယောက်တည်းပေါ့။မနေ့ကရောက်တာလား” ”ဟုတ်တယ် ကိုကိုကတစ်လလောက်ရှိပြီ။လှမ်းခေါ်လို့လာတော့မှ အရေးပေါ်ကုမ္ပဏီကခိုင်းလို့သွားရတာ” သူတို့နှစ်ယောက် ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်ရင်းပြောနေကြသည်။တော်တော်လေးကြာတော့ ဥမ္မာခင်လဲ ပြန်သွားသည်။သူလဲဥမ္မာခင်ရဲ့ နောက်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့မှ အင်း ဒီဆော်ကမဆိုးပါဘူး။ကိုယ်လုံးကငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့။အသားကလဲဖြူ။သူဌေးသမီးဆိုတော့ တစ်သင်လုံးအလုပ်ကြမ်းလဲမလုပ်ဖူးတော့ အသားအရည်ကအစတော်တော်လှတာပဲ။စိတ်ဓာတ်လေးကသာမကောင်းတာ။ဝေယံတော့ ဘယ်လိုစားလဲတော့မသိဘူး။
သူသာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေမျိုးတွေးနေမိလိုက်သည်။ကိုယ်လုံးကတော့ သူ့အကြိုက်ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေးပင်။ဥမ္မခင်ကို အရင်ကအကြောင်းတွေပြန်တွေးမိရင်း ဒီဆော်ကို ဖြုတ်ရလို့ကတော့ အရှက်ဆိုတာဘာမှန်းမသိအောင်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ရိုင်းတွေဝင်မိသည်။သူဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ဥမ္မခင်ဆီဖုန်းဆက်ကာပြန်ရောက်ပြီလားမေးတော့ ရောက်ပြီဆိုပြီးပြောသည်။နာရီဝက်လောက်စကားပြောဖြစ်ကြသည်။ညနေခြောက်နာရီခွဲကျော်တော့ ဥမ္မာခင်က သူ့ဆီဖုန်းဆက်သည်။ဝေယံထက်က ပြန်မလာဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။သူ့ဟာသူပြန်ဖို့ပြောတာမို့ ဘယ်နေ့ပြန်မှာလဲမေးတော့ သူကလဲ ဥမ္မာခင်ဘယ်နေ့ပြန်မလဲမေးလိုက်သည်။မနက်ဖြန်လေယာဉ်လက်မှတ်မရနိုင်တာမို့သဘက်ခါမှပြန်မယ်ပြောတာနဲ့ သူလဲ တူတူပြန်ကြတာပေါ့ပြောလိုက်သည်။ညနေစာတူတူစားကြမလားမေးလိုက်တော့ ဥမ္မာခင်ကလဲ စားမယ်လို့ပြောသည်။
သူလဲ ရေချိုးအဝတ်လဲကာ ဥမ္မာခင် တည်းတဲ့ဟိုတယ်ဆီထွက်လာလိုက်ပြီးခေါ်တော့ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာမှ ထွက်လာသည်။ဇီးရိုးကွာတားဂျင်းဘောင်းဘီအကြပ်လေးနဲ့ ချိုင်းပြတ်အနက်လေးကိုဝတ်ထားသည်။ဖြူတဲ့အသားနဲ့လိုက်ဖက်သလို ခြေအိတ်အဖြူဝေါ့ကင်းရူးအနက်ကိုဝတ်ထားတာမို့ တကယ့်လူငယ်စတိုင်လ်အပြည့်ပင်။ သူတိူ့ဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ဆိုင်မှာ ဝင်ပြီးညနေစာစားလိုက်ကြသည်။သူ့ကို သောက်ချင်သောက်လေလို့ပြောတာနဲ့ သူလဲ ဘီယာလောက်သာမှာပြီးသောက်သည်၊ဥမ္မာခင်ကလဲ သူလဲသောက်မယ်ဆိုပြီးယူသောက်သည်။နှစ်ခွက်လောပ်သောက်ပြီးတော့ဥမ္မာခင်မူးနေပြီ။သူ့ယောက်ကျားကိုမကျေနပ်တာရင်ဖွင့်သည်။စီးပွားရေးကိုပဲ မဲလုပ်ပြီးသူနဲ့သမီးကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ကြောင်း၊ ဒီလိုတွေသွားလာရတာ သူကအတင်းလိုက်နေလို့သာသွားနေရကြောင်း။မိသားစုကိုအချိန်မပေးကြောင်းပြောသည်။
သူလဲ အလိုက်သင့်နားထောင်ရင်း ဘီယာကိုထည့်ပေးနေသည်။ခုလဲ သူမကို သူစိမ်းနယ်မှာတယောက်တည်းထားခဲ့ကြောင်း ပြီးတော့ပြန်မလာနိုင်တော့ပဲ တယောက်တည်းပြန်ခိုင်းကြောင်းမကျေနပ်ချက်တွေကို ရင်ဖွင့်နေသည်။တော်တော်လေးလဲ မူးနေတာမို့ ပြန်မယ်ပြောတော့ မပြန်ချင်သေးဘူး ကချင်သေးတယ်လုပ်နေသည်။သူလဲ ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်တာမို့ ပြန်တာပဲကောင်းတယ်ပြောပေမယ့်မရ။ဒါကြောင့်သူလဲ တက္ကစီတစ်စီးတားကာ ကလပ်တခုကိုသွားခိုင်းလိုက်သည်။ကလပ်ရောက်တော့ ဥမ္မာခင် ကနေလေသည်။သူလဲ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့သာကြည့်နေတော့သည်။ခဏကြာတော့ သူ့ကို အတင်းလာဆွဲခေါ်ကာ တွဲကဖို့ခေါ်တာနဲ့ သူလဲ အလိုက်သင့် ကလိုက်သည်။ကနေရင်းနဲ့ သူမရဲ ရင်တွေတင်တွေကို မကြာခဏထိမိသည်။
သူမကတော့ မသိ။မောလာတော့ ဘီယာထပ်သောက်ပြန်သည်။ဒီလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲချင်တာကြာပြီတဲ့။ကဲချင်လို့ သမီးကိုထားခဲ့ပြီးလာတာ ယောက်ကျားကမရှိလို့ မကဲရဘူးဆိုပြီးစိတ်ပျက်နေတာ သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနေသည်။ကလပ်ကနေပြန်လာတော့ သူမတော်တော်မူးနေပြီ။သူလဲ သူမဟိုတယ်ထိလိုက်ပို့ပြီး အခန်းထိလိုက်ပို့ပေးရသည်။ဓာတ်လှေကားစီးတော့ သူမ မဟန်နိုင်။သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ။သူလဲ ဖက်ထားရင်းနဲ့ နို့တွေကိုမကြာခဏထိမိရသည်။သောက်လဲ သောက်ထားတာမို့ စိတ်ကလဲ စိတ်ရိုင်းဝင်မိသည်။အခန်းထဲရောက်တော့ တံခါးပိတ်ပြီးသူမကို ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ်ပက်လက်တင်လိုက်သည်။သူမကတော့ မူးနေပြီမို့ မသိတော့။သူဘေးနားမှာထိုင်ရင်း အင်္ကျီလတ်ပြတ်အကြပ်အောက်ကနေ အသက်ရှူတိုင်းမို့မို့တက်လာတဲ့ ရင်သားတွေကြည့်ရင်း စိတ်က ထလာသည်။ဥမ္မာခင်ကိုအရင်ကမကျေနပ်တာတွေကို တွေးမိပြီး ဥမ္မာခင်ရဲ့ နို့တွေကိုလက်ကလှမ်းလိုက်ပြီး ကိုင်လိုက်သည်။
အင်္ကျိကိုအောက်ကနေမပြီးချွတ်လိုက်သည်။အတွင်းခံကိုပါတခါတည်းချွတ်လိုက်သည်။နို့တွေကိုလက်နဲ့ အသာပွတ်သပ်ကိုင်လိုက်ပြီးနို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးကို ငုံ့ကာစို့လိုက်တော့ အင်းခနဲ အသံနဲ့အတူရင်ဘတ်က ကော့လာသည်။ဥမ္မာခင်မျက်လုံကမဖွင့်ပေ။သူနို့တွေကိုစို့ရင်း လက်က ပေါင်တွေကို ပွတ်သပ်နေလိုက်သည်။ဂျင်းဘောင်းဘီတိုကို ဖိနပ်ကိုမချွတ်တော့ပဲ ချွတ်လိုက်သည်။ပင်တီမရမ်းရောင်လေးပဲကျန်တော့သည်။ဖြူဝင်းတဲ့အသားအရည်နဲ့ လိုက်ဖက်လှသည်။ပင်တီပေါ်ကနေ လက်နဲ့ထက်အောက်ပွတ်ဆွဲချလိုက်သည်။ပင်တီကိုချွတ်လိုက်တော့ အမွှေးတွေက ဆေးနဲ့ချွတ်ထားသည်ထင်သည်။ပါးပါးစုစုလေး။သူပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားလိုက်ပြီး လက်ခလယ်နဲ့ အဖုတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တော့ အဖုတ်က အရည်တွေနဲ့။အတွင်းထဲကို ဝင်သွားတော့ သူလဲ ကလိပေးလိုက်သည်။ဂျီစပေါ့နေရာကို မှန်းကာ ခပ်ဆက်ဆက်ကလိလိုက်တော့ ဥမ္မာခင် ဖင်က ကြွကြွတက်လာပြီး ပါးစပ်က မတိုးမကျယ်အသံနဲ့ ညည်းနေသည်။
သူလဲ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို အသာမကာ ကုတင်ပေါ်ထောက်ထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးကိုယ်ကိုငိုက်လိုက်တော့ ဖင်ကကြွလာသည်။သူလဲ ဥမ္မာခင်အဖုတ်ထဲကို ထည့်လိုက်ရာ ”ဗျစ် ဗျစ် ” ”အ ဟ ဟ အာ့ ဟင် ကို ငြိမ်းချမ်း” အဖုတ်ထဲသို့ လီးက ကြပ်ပြီးဝင်သွားရာ ဥမ္မာခင် ညည်းသံနဲ့အတူ မျက်လုံးပွင့်သွားပြီးကြည့်လိုက်ရာ ငြိမ်းချမ်းကို တွေ့လိုက်ရတော့ အလန့်တကြားဖြစ်သွားသည်။အစက သူမ မူးမူးနဲ့ကိုကိုက လုပ်ပေးနေတာလို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေပြီးအဖုတ်ထဲကို လီးကြီးပြီးဝင်လာတော့ နာသွားလို့ ယောင်ယမ်းမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာမှ ငြိမ်းချမ်းကို တွေ့တော့ အတင်း ရုန်းတော့ ငြိမ်းချမ်းက သူမကို ဖိထားပြီးလီးကို အဆုံးထိထည့်လိုက်သည်။ဥမ္မာခင်ခမျာ အဖုတ်ထဲမှာ ပြည့်သိပ်စွာလီးကဝင်သွားပြီး နာသွားရသည်။ ”ဖယ် ကိုငြိမ်းချမ်း မယုတ်မာနဲ့နော်။ရှင့်သူငယ်ချင်း မိန်းမကို ဒီလိုလုပ်စရာလား ဖယ်နော် ကျွန်မအော်လိုက်မှာ” ”မထူးပါဘူး ဥမ္မာရယ်။ကိုယ့်လီးတချောင်းလုံး မင်းအဖုတ်ထဲကိုဝင်နေပြီဟာကို။အော်တော့လဲ ဘာထူးမှာလဲ။
ဘယ်သူကကြားမှာမို့လဲ ငြိမ်ငြိမ်သာ လိုးတာခံလိုက်စမ်းပါ” ”ရှင် လူယုတ်မာ။အောက်တန်းစား။ထောင်ထွက်ပီပီ ခွေးကျင်းခွေးကြံ ကြံတယ် ခွေးကြီး ဟင့် ဟင့် ” ”ငို ငို ကြိုက်သလောက်သာငိုစမ်း ဟဲဟဲ ကောင်းလိုက်တာကွာ။မင်းအဖုတ်က ကလေးတယောက်အမေဆိုပေမယ့် ကြပ်နေတာပဲ။လိုးလို့ကောင်းတာ ဟား” ငြိမ်းချမ်းကြမ်းပြီ။အစက ဒီလောက်ထိကြမ်းဖို့မရှိပေ။ဥမ္မာခင်က သူ့အရှိုက်ထိစေမယ့် စကားကို နစ်နစ်နာနာပြောတာကြောင့် အရင်ကတည်းက နာနေတဲ့အခံရှိတော့ စိတ်က လွတ်သွားသည်။ဥမ္မာခင် ရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းမောလာသည်။လူကမူးလဲမူးနေတာမို့ အားမပါ။ငြိမ်းချမ်းလဲ လီးကို မဆောင့်သေးပဲ အဆုံးထိထည့်ထားရင်းနဲ့ ဥမ္မာခင်ရိုက်ပုတ်နေတာတွေကို လက်နဲ့လိုက်ဆွဲရင်း ပါးစပ်က ပြောချင်ရာတွေပြောနေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဥမ္မာခင်အားပျော့လာတော့ နို့တွေကို လက်နဲ့ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်ရင်း ”အား ကောင်းလိုက်တာကွာ။နို့တွေက အိတင်းနေတာပဲ။
ကောင်မ ဆေးတွေသုံးပြီးယောက်ကျားကို ဆွဲဆောင်ထားတာမဟုတ်လားဟားဟားဟား” ”ကိုငြိမ်းချမ်းရယ် တော်ပါတော့ ဥမ္မာကို သနားပါ။လွှတ်ပါတော့ အဟင့်ဟင့် အိ အိ” ဥမ္မာခင် မရုန်းနိုင်တော့ လေပျော့နဲ့တောင်းပန်သည်။ငြိမ်းချမ်းခုချိန်မှတော့မရတော့။လူကလဲ မူနေပြီမို့ စိတ်ရိုင်းက ဝင်နေပြီ။နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးလို့ သဘောထားကာ ရှေ့ဆက်တွန်းနေသည်။နို့တွေကို ကိုင်လိုက် ညှစ်လိုက်နဲ့ ပါးစပ်ကလဲ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတွေပြောနေသည်။ဥမ္မာခင် ဘဝမှာ ဒီလိုတစ်တစ်ခွခွပြောတာတခါမှ မကြားဖူးသလို အပြောလဲမခံရဘူး။ခုလို တစိမ်းတဦးရဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်ခြင်းခံရတာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပင်။သူမယောက်ကျားတောင် ခုလို တခါမှမကိုင်ဖူး။ငြိမ်းချမ်းက တစ်တစ်ခွခွပြောသလို နေရာအစုံကို လိုက်ပြီးကိုင်နေတာမို့ စိတ်ကအရမ်းကို ဝမ်းနည်းလာပြီး ကိုကို့ကို အရမ်းသတိရမိသည်။ကိုကို့ကို သူမသစ္စာဖောက်သလို ဖြစ်သွားပြီလို့တွေးမိပြီး မျက်ရည်က ကျလာပြန်သည်။
ဒါကိုငြိမ်းချမ်းက တွေ့တော့ တဟားဟားနဲ့ ရယ်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ညှစ်ကိုင်ကာ ခါးအားနဲ့ လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးခပ်ဆက်ဆက်ဆောင့်ချလိုက်တော့ ”အ့ ကျွတ်ကျွတ် နာတယ် ဖယ်ပါတော့ တော်ပါတော့ အီးဟီးဟီး ” ”ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖုတ်။ကြပ်နေတာပဲ လိုးရတာ။စောက်ကောင်မ အရမ်းလိုးလို့ကောင်းတယ်ကွာ”ပြောပြောဆိုဆို ငြိမ်းချမ်းတယောက် ကြမ်းပြီ။ဥမ္မာခင်တယောက် ဝမ်းနည်းပက်လက်နဲ့ ငိုနေပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း အဖုတ်ထဲက လီးကို မသိမသာ လက်ခံလာသည်။အရည်တွေက ထွက်လာကာ လီးက အဝင်အထွက်ချောလာသည်။ငြိမ်းချမ်းရဲ့ဆောင့်အားက အားနဲ့မာန်နဲ့ဆောင့်နေတာမို့ တချက်ဆောင့်တိုင်း အင့်ခနဲ အင့်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားကာ သားအိမ်ဝက ပူခနဲ ပူခနဲဖြစ်သွားသည်။ အသိစိတ်နဲ့ လူက ငြင်းဆန်နေပေမယ့် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေက တဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာသည်။ပြည့်ဝတဲ့အရသာက တကိုယ်လုံးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပျံ့နှံ့လာသည်။
ငြိမ်းချမ်းက ဥမ္မာခင်းနားကိုကပ်ကာ တစ်တစ်ခွခွတွေပြောပြီးဆောင့်နေဆဲပင်။ ”အဟင့် ဟင့် အင့် အင့် အင့် တော်ပြီ တော်ပြီ ဟင့် ဟင့်”နှုတ်ခမ်းက ငြင်းနေပေမယ့် သူမယောက်ကျားနဲ့ ကွာခြားစွာ ကာမအရသာကို ပြည့်ဝစွာပေးနေတာကို စိတ်က တဖြည်းဖြည်းပါလာသည်။သူမ ငြင်းဆန်ချင်သည်။မဟုတ်ဘူး ဒါငါမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကို တခြားလူတယောက်က မုဒိန်းကျင့်နေတာ ။ငါလက်သင့်မခံဘူး တွေးနေပေမယ့် မူးကလဲမူး ဆောင့်ချက်တိုင်းက သူမအရင်က ဘာလိုအပ်မှန်းမသိတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးမိတဲ့အရာက ဒါပါလားဆိုတာသိသွားပြီး စိတ်ကနှစ်ခွဖြစ်နေသည်။
ငြိမ်းချမ်းလဲ ဥမ္မာခင်ရဲ့ အပြောင်းအလဲ ကိုသတိထားမိတာကြောင့် ဥမ္မာခင်နားကိုကပ်ကာ စိတ်ကြွစေရန် ထပ်ပြီးတစ်တစ်ခွခွပြောလိုက်ကာ လိးကိုတဆုံးထုတ် တဆုံးထည့် မှန်မှန်ဆောင့်နေသည်။အဖုတ်က အရည်တွေနဲ့ လီးဝင်တိုင်း တဗြွတ်ဗြွတ် တဗျစ်ဗျစ်နဲ့ အသားခြင်းရိုက်တဲ့အသံကလဲ အခန်းထဲမှာဆူညံနေသည်။ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို လက်နဲ့ချိတ်ကာ ကိုယ်က ရှေ့ကိုငိုက်ထားတာမို့ ဖင်ကြီးက ကြွတက်နေကာ လီးတချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း အတွင်းထဲကိုနက်နက်ဝင်သွားကာ ဖိလိုက်တိုင်း မွေ့ရာကအတွင်းဖက်ဝင်သွားပြီးပြန်ကန်လာပြန်တာမို့ တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ပြန်ပြန်ကန်ကန်တက်လာတာမို့ ဆောင့်ချက်တိုင်းက ဥမ္မာခင့်အတွက် ရူးသွပ်မှုဖြစ်စေသည်။
မရတော့ပေ။ဥမ္မခင် ဆန္ဒကို အသိနဲ့ ဘယ်လိုမှထိန်းချုပ်လို့မရတော့။အထိအတွေ့နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပြီ။မိန်းမကိစ္စကို ကျွမ်းကျင်ဆရာကျတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရဲ့အောက်မှာ ကျရှုံးသွားပြီ။ ”အ ဟ ဟ အင့် အင့်” ”ကောင်းလား ဥမ္မာကောင်းလား”မဖြေ။ ဒါကြောင့် သူ နို့သီးခေါင်းတွေကို ညှစ်လိုက်ရင်း ”ကောင်မ မေးနေတယ် ငါလိုးတာကောင်းလားလို့ ခံလို့ကောင်းလား ဖြေစမ်း” ”အား ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းတယ် အ ဟင့် ဟင့် နာတယ်” ငြိမ်းချမ်းပြုံးလိုက်သည်။သူတချက်ချင်းဆောင့်လိုက်ပြီးနို့တွေကိုငုံ့ကာစို့လိုက်သည်။ဥမ္မာခင် စိတ်ကအရမ်းကို ကြွလာသည်။ပြီးချင်လာသည်။အရမ်းအရမ်းကို ကောင်းလာကာ ”အ အင့် အင့် ဆောင့် ဆောင့် မရပ်နဲ့ ခပ်နာနာလေးဆောင့်ပေး ကောင်းတယ် ဟား ကောင်းတယ် အား အား ပြီးပြီ အစ် အစ် ပြီးပြီ အ အ ဟားးးး”ဥမ္မာခင် ပြီးသွားပြီသူ့ကိုအတင်းဖက်ကာဖင်ကိုအတင်းကော့ကာ ကပ်ထားပြီးတဆက်ဆက်နဲ့ ဖြစ်နေသည်။ခြေတွေက ကုပ်ကွေးတက်ကာ ပါးစပ်က ဘယ်လိုအသံတွေမှန်းမသိ။
သူ ဥမ္မာခင်ကို ပြန်ဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်ရာ ဥမ္မာခင်လဲ မွတ်သိပ်စွာပြန်နမ်းလေသည်။ ”ဥမ္မာ ကိုယ်မပြီးသေးဖူး လိုးချင်သေးတယ်” ”အဟင့် ဒီလောက်အကြာကြီးကို မပြီးသေးဘူးလား။စိတ်ညစ်ပါတယ်”မူနေသည်။ ”ကုန်းပေးစမ်းပါ” ”သူ့စိတ်ကြီးပဲ လူကိုအရုပ်လေးကျနေတာပဲ။ဖယ်ဦးလေ သူကဖိထားမှတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့” ငြိမ်းချမ်းလဲ ထလိုက်ရာဗလွတ်ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ အဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေ လျှံ့ကျလာသည်။ဥမ္မခင်လဲ ရင်ထဲ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားသည်။အနားက ပင်တီကိုအမြန်ယူကာ အဖုတ်ကိုအုပ်ကာသုတ်လိုက်ပြီးငြိမ်းချမ်းလီးကိုကြည့်မိလိုက်တော့ ရင်ထဲဖိုသွားသည်။ဟယ်အကြီးကြီးပဲ။ကုတင်အစွန်းမှာပဲ ကုန်းပေးလိုက်သည်။ငြိမ်းချမ်းလဲ ဥမ္မာခင်ရဲ့ တင်ပါးတွေကို ညှစ်လိုက်ပြီး ဖျန်းခနဲရိုက်ကာ ”တောက် လှလိုက်တဲ့ဖင်ကွာ ” ”အ နာတယ် ဘာလို့ရိုက်တာလဲ” ”လှလို့ရိုက်တာ မင်းဖင်က လုံးနေတာပဲ”ပြောရင်တဖတ်ဖတ်နဲ့ရိုက်နေသည်။ဖြူဖွေးတဲ့တင်ပါးတွေက လက်ရာတွေနဲ့ နီရဲလာသည်။
ဥမ္မာခင်မှာ သိတက်စအရွယ်ကတည်းက ခုချိန်ထိ သူဌေးသမီးတစ်ဦးလဲဖြစ်တာမို့ ဒီလိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမဆက်ဆံခံရဖူးပေ။ယောက်ကျားရတော့လဲ ယောက်ကျားက နုနုညံ့ညံ့သာ ဆက်ဆံသည်။လင်မယားချင်းလုပ်ရင်လဲ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမလုပ်။ဒါကြောင့်ခုလို ဆက်ဆံခံရတာပထမဆုံးမို့ စိတ်ထဲမှာ အထူးအဆန်းဖြစ်ကာ သဘောကျလာသလိုလို။ငြိမ်းချမ်းက တင်ပါးတွေကိုရိုက်ရင်း ဖင်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲလိုက်ရာ နီရဲရဲ ခရေပွင့်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ အဖွင့်မခံရသေးမှန်းသိလိုက်တာမို့ တရက်တော့ ခရေခြွေပစ်မယ်လို့စိတ်ကကြိမ်းရင်း စအိုကို လက်မနဲ့ကုတ်ခြစ်ကာ ”တောက် ခရေပွင့်လေးက ချစ်စရာလေးကွာ ” ဥမ္မာခင် ဖင်ဝယားသွားပြီး ရှုံသွားသည်။ ”ဟင့် လုပ်စရာရှိတာမလုပ်ဘူး ယားတယ် ဘာတွေလျှောက်လုပ်နေတာလဲ အို အဟင့် ယားပါတယ်ဆို” ငြိမ်းချမ်းရဲ့အပြောအဆို အကိုင်အတွယ်တွေကြောင့် ဥမ္မာခင် စိတ်က တက်ကြွလာရပြန်သည်။
ငြိမ်းချမ်းလဲ ကုန်းတဲ့ပုံစံကို ပြင်ပြီးနောက်ကနေ ဥမ္မာခင့်အဖုတ်ဝကိုတေ့ကာ လီးနဲ့ထည့်လိုက်ရာ ”ဗြိ ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ်” ”ဟ အ အ ဖြေးဖြေး နာတယ် အာ့ ရှီး ”လီးကတဆုံဝင်သွားပြီး သားအိမ်ဝကို ဒုတ်ခနဲဆောင့်လိုက်ရာ ဥမ္မာခင်အောင့်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး ငြိမ်းချမ်းလဲ ကျင်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ ”အ ဖြေးဖြေး အောင့်တယ်”ငြိမ်းချမ်းလဲ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ညှစ်ကိုင်ပြီး လီးကိုဖြေးဖြေးချင်းတဝက်လောက်ဆွဲထုတ်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ထည့်လိုက်တော့ ဥမ္မာခင် ရှီးခနဲ ဖြစ်သွားပြီး အရသာခံနေသည်။သူလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းတချက်ချင်းဆောင့်ပေးလိုက်သည်။အချက်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက်ကျ ဥမ္မာခင် ခံနိုင်လာကာ ဆောင့်စေချင်လာသည်။တအင့်အင့်နဲ့ နောက်ကို ပြန်ပြန်ဆောင့်ပေးနေသည်။သူလဲ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ ကောင်းသွားသည်။ဆောင့်ချက်တိုင်း ဖင်ကတုန်တုန်သွားသလို ပခုံးကျော်ကျော်ဆံပင် နီညိုရောင်ကလဲ ဝဲခနဲ ဝဲခနဲခါသွားသည်ကို ကြည့်ရင်း သူသဘောကျမိသည်။
ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ရင်းနဲ့ ခါးကို ကိုင်ကာခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးလိုက်တော့ ”အား ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းလိုက်တာ ဟ ဟ အင်းဆောင့် ဆောင့် အိ အိ အိ” သူမေးစရာမလိုတော့။သူ့အလိုလို ဖြစ်လာပြီ။သူခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့် ရင်း ပြီးချင်လာပြီ။ဒါကြောင့်သူ ”ဥမ္မာခင် ငါအထဲမှာပြီးလိုက်ရမလား” ”အင်း ပြီးလိုက် ရတယ် ဆောင့်ဆောင့် ဥမ္မာလဲ ပြီးတော့မယ် ဟား အ အ” သူလဲ ဆက်တိုက်မရပ်မနားဆောင့်ချလိုက်သည်။လီးတစ်ခုလုံး ကျင်တက်လာကာ လီးကိုအဆုံးထိဆောင့်ထည့်လိုက်ပြီး အရည်တွေကို ပန်းထည့်လိုက်ချိန်ပဲ ဥမ္မာခင်လဲ ပြီးသွားကာ သူ့လီးကို တချက်တချက်ညှစ်နေသည်။နှစ်ယောက်သာ ကုတင်ပေါ်သို့ ဘေးတိုက်လှဲချကာ အနားယူလိုက်ကြသည်။ဥမ္မာခင် နို့လုံးကျစ်ကျစ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်။တော်တော်လေးကြာတော့မှ ဥမ္မာခင်က ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည်။သူလဲ တစ်ရှူးထယူကာ သုတ်လိုက်ပြီး အမှိုက်ခြင်းထဲထည့်ကာ အတွင်းခံဝတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ အနားယူလိုက်သည်။
ဥမ္မာခင်ပြန်ထွက်လာတော့ တပတ်ကို ပတ်ထားသည်။ကုတင်နားရောက်တော့ ”ဟင့် ဘာလုပ်နေတာလဲ ပြန်တော့လေ” ”မပြန်ပါဘူး မင်းကို လိုးလို့မှမဝသေးတာ” ”ဟင့် စကားကလဲ ကြမ်းလိုက်တာ”သူမကို ဆွဲချလိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်သည်။ပြီးတော့ စောင်ခြုံ ပြီး နှစ်ယောက်သားဖက်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားသည်။မနက်ခြောက်နာရီလောက်ကျ သူနိုးလာတော့ ဥမ္မာခင်ကသူ့ဘေးနားမှာ မနိုးသေး။သူလဲ ဥမ္မာခင်ပတ်ထားတဲ့တပတ်ကိုချွတ်လိုက်ကာ နို့တွေကိုကိုင်လိုက်တော့ ”အင် ဟာကွာ သူများအိပ်ချင်နေသေးတဲ့ဟာကို။ညတုန်းကလဲ သူနှိပ်စက်ထားပြီးပြီ။ခုအိပ်ချင်သေးတယ်ကွာ” ”အိပ်လေ။ကိုယ်ဟာကိုကိုင်တာကို” ဥမ္မာခင်ဆက်ပြီးအိပ်နေတော့ သူနို့တွေကို ကုန်းစို့လိုက်ပြီးလက်တဖက်ကျန်တဲ့နို့ကို ရွရွလေးပွတ်ချေကစားနေလိုက်သည်။နို့သီးခေါင်းတွေကိုကလိလိုက်ချေလိုက်နဲ့လုပ်နေရာ ဥမ္မာခင် လဲ အသက်ရှူသံပြင်းလာကာ သူ့ခေါင်းကို ထိုးဖွနေပြီး ရင်ကကော့ကော့တက်လာသည်။နို့တွေစို့နေရင်းနဲ့ လက်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ဖက်ကိုဆင်းကာ ပေါင်တွေကိုပွတ်ပေးလိုက်သည်။
ဥမ္မာခင်လဲ တရွရွဖြစ်လာပြီး ပေါင်ကကားလိုက်စုလိုက်ဖြစ်နေသည်။သူလဲနို့တွေကိုစို့ရင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ အောက်ကိုဆင်းကာဗိုက်တွေကိုလိုက်စုပ်လိုက်ကာနို့တွေကိုလက်နဲ့ချေနေလိုက်သည်။တဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုဆင်းလိုက်တော့ ”အို့ မလုပ်နဲ့လေ။ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မယ် အို မလုပ်နဲ့ အ အ ရှီး ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကွာ” သူလဲပေါင်နှစ်ဖက်ကိုဖြဲကာအစေ့ကို လျှာနဲ့ကလော်လိုက်ရာကော့တက်သွားသည်။အစေ့ကို ဆက်တိုက် လျှာနဲ့ကလိလိုက်ရာ ထွန့်ထွန့်လူးသွားပြီး မွေ့ရာခင်းတွေကို လက်နဲ့ဆုတ်ချေကာ ကိုယ်ကကြွတက်လာလိုက်ပြုတ်ကျသွားလိုက်နဲ့။အဖုတ်ထဲက အရည်တွေက ထွက်လာသည်။သူအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို စုပ်လိုက်ရာ အ ခနဲအသံနဲ့အတူ လူကတဆက်ဆက်တုန်နေသည်။
အဖုတ်အတွင်းထဲကို လျှာနဲ့ဝင်နိုင်သလောက်ထည့်ကာ ကလိလိုက်တော့ ဥမ္မာခင်တယောက် အသံတွေကမရပ်တော့။ဖင်ဝကို လျှာနဲ့ကလိလိုက်ပြန်ရာ ဆက်ခနဲတုန်သွားရပြန်သည်။လက်မနဲ့ အစေ့ကိုချေပြီး အဖုတ်ထဲကို လက်နဲ့ကလိ ခရေကိုဝလုံးရေးနေတော့ ဥမ္မာခင် ဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့။လူကတဆက်ဆက်တုန်လာကာ အုခနဲ မပီမသအသံနဲ့အတူ ခြေချောင်းတွေကွေးတက်သွားပြီး ပြီးသွားသည်။ ”ကိုရယ် ဘယ်လို လုပ်တာလဲကွာ။ဥမ္မာ့ကို ငရဲပေးနေတာလား” ”မကောင်းဘူးလား” ”ကောင်းတယ်”ရှက်သံနဲ့ဖြေသည်။ ”ဒီလို တခါမှမခံဖူးဖူးလား” ”ဟင့်အင်း မခံဖူးဘူး” ”ကဲ ဒီတခါ ကိုယ့်အလှည့် လီးစုပ်ပေး” ပြောပြီးဥမ္မာခင်ပါးစပ်နားလီးကိုထိုးပေးလိုက်သည်။ ဥမ္မာခင်တယောက် ငြိမ်းချမ်းကို စွဲသွားသည်။ငြိမ်းချမ်းနဲ့မှ သူမ မရဖူးတာရခဲ့ရတာပင်။ခုလောလောဆယ်မှာသူမယောက်ကျားနဲ့သမီးကိုမေ့ထားလိုက်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရဲ့ လီးကို စိတ်ပါလက်ပါစုပ်ပေးနေသည်။ငြိမ်းချမ်းက အပြောအဆို သူမအပေါ်ဆက်ဆံတာက သူမကို တန်ဖိုးမထားမှန်းသိပေမယ့် သူမ နှစ်သက်နေမိသည်။ဒါလဲ အထက်တန်းလွှာထဲက ပေါက်ဖွားလာတဲ့သူမရဲ့ စိတ္တဇလားပင်။သူမကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆံတာ ပြောဆိုတာ နှစ်သက်သဘောကျမိကာ သာယာနေသည်။ငြိမ်းချမ်းရဲ့ ပြုစုမှုတွေကို တန်းတန်းစွဲမိနေသည်။ငြိမ်းချမ်းက သူမ ပါးစပ်ထဲမှာပင်ပြီးသွားတာမို့ ညှီစို့စို့အရည်တွေပိုမြိုချမိပေမယ့် မထွေးထုတ်မိ။အန်ချင်သလိုလိုဖြစ်သွားပေမယ့် သဘောကျမိသည်။
နှစ်ယောက်သား ရေအတူတူချိုးလိုက်ကြသည်။ငြိမ်းချမ်းက ဆက်ဆံတဲ့အချိန်သာ သူမကို ဖာသာသာသဘောထားဆက်ဆံပေမယ့် ကျန်တဲ့အချိန်မှာ သူမယောက်ကျားထက် ယုယကာ အပြောကောင်းတာတွေကြောင့် သူမ သဘောကျရပြန်သည်။ရေချိုးအဝတ်လဲ ပြီး မနက်စာစားကာ လေယာဉ်လတ်မှတ်သွားဝယ်လိုက်သည်။သူမယောက်ကျားဖုန်းဆက်တော့ မနက်ဖြန်ပြန်မယ်လို့ပြောသည်။ငြိမ်းချမ်းနဲ့ တွေ့တယ်ပြောတော့ ငြိမ်းချမ်းနဲ့စကားပြောချင်တယ်ဆိုလိုသူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေကြသည်။ဂရုစိုက်ပေးဖို့ ဘာညာမှာနေတာနေမည်။နှစ်ယောက်သား ငြိမ်းချမ်းတည်းတဲ့ဟိုတယ်ကိုသွားကာ အဝတ်အစားတွေအိတ်တွေယူကာ သူမဆီကိုပြောင်းလာခဲ့သည်။သူမကလဲ ငြိမ်းချမ်းကို ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဒီကကိစ္စတွေကိုမေ့ပစ်လိုက်ပြီး အရင်လို ပဲဆက်နေကြမယ်ပြောတော့ ငြိမ်းချမ်းကလဲ လက်ခံသည်။ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ သူတို့ လုပ်ကြပြန်သည်။
ငြိမ်းချမ်းက ဥမ္မာခင်ကို ကြမ်းကြမ်းတမျိုး နုနုညံ့ညံ့တသွယ် မနုမကြမ်းတဖုံးဆက်ဆံသည်။သူမ အစွဲကြီးစွဲမိသွားသည်။တရက်နဲ့တညလုံး ပုံစံမျိုးစုံ သူမကို လုပ်သည်။ဇာတ်ကားတွေကြည့်ကာ ဇာတ်ကားထဲကပုံစံအတိုင်းလုပ်သည်။ငြိမ်းချမ်းကို သူမအံ့သြမိတာက ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် လီးက အချိန်တန်ပြန်မတ်လာတာပင်။တကယ်လုပ်နိုင်သည်ပင်။သူမလဲ ငြိမ်းချမ်းနဲ့တွေ့မှ လုပ်တယ်ဆိုတာဒါပါလားလို့ပြောရမလိုပင်။ နောက်ရက်ရန်ကုန်ရောက်တော့ သူမက ငြိမ်းချမ်းကို အခွင့်အရေးရရင်လဲ ပြန်တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောသည်။ ငြိမ်းချမ်းလဲ ဥမ္မာခင်ကို လုပ်လိုက်ရလို့ကျေနပ်နေသည်။သူမကို ဖာသာသာဆက်ဆံလိုက် ကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံလိုက်နဲ့ လုပ်ပေးလိုက်သည်။သူပြန်ရောက်တော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ သူခိုးရိုက်ခဲ့တဲ့ သူနဲ့ဥမ္မာခင်လိုးတာကို ပြန်ကြည့်ဖြစ်တော့ ဥမ္မာခင်ကို လိုးချင်သေးသည်။
တရက်ရက်တော့ နောက်ပေါက်ကိုဖွင့်မည်လို့လဲ တေးထားလိုက်သည်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်သာ ဝေယံထက်ဆီပို့လိုက်ရင် သွေးတက်သေမလား သူ့ကိုလာသတ်မလားတခုခုပင်။ဒါပေမယ့် သူမလုပ်။အဲလောက်ထိ လုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပေ။ဒါကြောင့် သူလဲ အလွယ်တကူရှာလို့မရနိုင်တဲ့ နေရာမှာသေချာသိမ်းထားလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံးတော့တလတခါဆုံဖြစ်သည်။မဆုံဆုံအောင်လဲ သူလိုက်ချိတ်သည်။ဆုံတိုင်း သူ့ကိုအိမ်ထောင်ပြုဖို့ပြောကြသည်။အားလုံးထဲ သူတယောက်သာကျန်တော့တာကိုး။သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေထဲက အပျိုတွေနဲ့ချိတ်ပေးမယ့်သူနဲ့။သူကတော့တကယ်မချစ်တဲ့သူကိုမယူချင်သေး။
ပြီးတော့ သူ့အားနည်းချက်ကြောင့် တော်ရုံမိန်းကလေးပြန်မကြိုက်မှာကို သူစိုးရိမ်သည်။တရက်မှာ သူ့ဘဝအတွက်အရေးပါလာမယ့်ကောင်မလေးတယောက်ကို သူအမှတ်မထင်ဆုံတွေ့လိုက်သည်။တွေ့တာကလဲ တကယ့်အမှတ်မထင်။ပလာဇာမှာသူဈေးဝယ်ပြီးအပြန် ကားရပ်ထားရာနေရာရောက်တော့ သူ့ကာနဲ့ပုံစံတူအရောင်တူ ကားတစ်စီးကသူ့ကားဘေးရပ်ထားတာမို့ သူလဲ သေချာကြည့်လိုက်မိသည်။အမျိုးအစား အရောင် အစတူပြီးနံပါတ်ကသာနည်းနည်းကွဲတာ။သူလဲ ဖုန်းလာတာနဲ့ ကားပေါ်မတက်သေးပဲ ကားနားမှာဖုန်းပြောနေသည်။ဖုန်းပြောနေရင်း ကောင်မလေးတယောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်သည်။လက်ကလဲ အိတ်တွေနဲ့ ဖုန်းပြောလာသည်ကိုတွေ့လိုက်သည်။ပုံစံလေးက ခုခေတ်မော်ဒယ်တွေလိုပင်။
ရုပ်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ သူရင်တွေအရမ်းခုန်သွားသလိုပင်။ကျော်လယ်လောက်ဆံပင်က လမ်းလျှောက်တိုင်းလွင့်နေသည်။အပြာဝမ်းဆက်လေးနဲ့လှမ်းလာပုံက သူ့ရင်ထဲမှာ အရမ်းကို စွဲမိသွားသည်။သူဖုန်းချလိုက်ပြီးသူမကိုဆက်ပြီးငေးနေတော့ သူငေးနေတာကို မျက်စောင်းတချက်ထိုးပြီးဖုန်းဆက်ပြောနေသည်။ကားသော့ကိုထုတ်ကာ ရမုဒ်နဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးဖုန်းကိုဆက်ပြောနေသည်။သူ့ဘေးနာရပ်ထားတဲ့ကားက ဒီကောင်မလေးကားကိုး။
သူတိုက်ဆိုင်စွာ သူ့ကားနဲ့ပုံစံတူအရောင်တူဆိုတော့ ရင်တောင်ခုန်သွားမိသည်။သူမက ဖုန်းပြောနေရင်း ဘာတွေရှုပ်မှန်းမသိရှုပ်နေတဲ့လက်တွေနဲ့ သူ့ကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ သူရီချင်သွားမိလို့ ပြုံးလိုက်မိတော့ သူ့ကို မျက်စောင်းတချက်ဒိုင်းဆိုထိုးလိုက်ပြီးကားတံခါးပိတ်လိုက်ပြီးကားစက်နှိုးနေပုံရသည်။သူလဲကားမှန်တံခါးကို ခေါက်လိုက်တော့ သူ့ကို လာကြောင်မနေနဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်သည်။သူကလဲ ဒီကားကသူ့ကားလို့အမူအရာနဲ့ပြပေမယ့်ဂရုမစိုက်ပဲဖုန်းချလိုက်ကာ ကားစက်နှိုးနေပုံရသည်။သူလဲ ထပ်ပြီးမှန်ကိုခေါက်လိုက်တော့ ဆက်ခနဲတံခါးဖွင့်ကာထွက်လာပြီးသူ့ကို ရန်တွေ့သည်။ ”ဘာလို့ တံခါးမှန်လာလာခေါက်နေတာလဲ။အူုကြောင်ကြောင်လာမလုပ်နဲ့။လုံခြုံးရေးခေါ်ပြီးဖမ်းခိုင်းလိုက်မယ် ဘာမှတ်နေလဲ။ဟင်း ”ရန်တွေ့နေတဲ့ပုံက တကယ့် အသည်းယားစရာလေး။သူတချက်ရီလိုက်ပြီး ”ကားစက်နှိုးလို့ရလား” ”မရဘူး။ဘာလဲ ရှင်လုပ်ထားတာလား။ဟယ်တကယ်ပဲ ကြည့်စမ်း အဲ့လိုလုပ်စားနေတာလား။ပုံစံနဲမလိုက်။အေးလေ ခုခေတ်ကြီးက ဒီလိုပုံစံတွေနဲ့လုပ်စားနေတာအများကြီးပဲကိုး။
ကဲ ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲ ပိုက်ဆံလိုချင်ရင်ဘယ်လောက်လဲပြော ကျွန်မသွားစရာရှိသေးတယ်ရှင့်” ”အော် ကလေးမရယ် ပြောချင်ရာစွတ်ပြောနေတော့တာပဲ။ကိုယ့်ကားလဲကိုယ်သေချာကြည့်ပါဦး” ”ဒီမှာ ကျွန်မက ကလေးမ မဟုတ်ဘူး။လူနာတွေကိုကုနေတဲ့ဆရာဝန်တစ်ဦးရှင့်။ပြောချင်ရာစွတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တာကိုပြောနေတာ။ကားကို ဘာကြည့်စရာလိုလဲ ကိုယ့်ကားကိုသိပြီးသား” ”အမလေးဗျာ ဒီစိတ်နဲ့ လူနာကုတယ်ဆိုတော့ စွာတာနဲ့တင် လူနာအသက်တိုမယ်” ”ဘာပြောတယ်။ရှင် ရှင်နော်။စိတ်တိုလာပြီ။လူနာဆိုရင် ဒီလိုမဆက်ဆံဖူးသဘောပေါက်။ကဲ ရှင်ကားနှိုးလို့ရအောင် လုပ်ပေးမှာလာမလုပ်ပေးရင် ရဲခေါ်လိုက်မယ်” ”ဟားဟားဟား ရဲခေါ်ရင် မင်းသာ အဖမ်းခံရမှာသိလား။
ခု မင်းဝင်ထိုင်ပြီး စက်နှိုးတာ ကိုယ့်ကား မင်းလေးရဲ့ကားက ဟိုဖက်မှာ” ”ဘာ ရှင် ”သူမဆက်ပြောမယ်လုပ်ပြီးမှ ကားတံခါးကိုငုံ့ကြည့်လိုက် ဟိုဖက်ကားကို ကြည့်လိုက်နဲ့ပြီးမှ မျက်နှာကြီးနီရဲသွားကာ ”ဒါဆိုစောစောက ပြောပါလားလို့” ”ပြောမလို့လေ သူပဲ စွတ်ကောနေပြီး” ”ဘာလို့ကျွန်မတံခါးဖွင့်တော့ရတာလဲ” ”ရမှာပေါ့ မင်းကတံခါးဖွင့်ပြီးကိုယ့်ဟာကိုဘာတွေရှုပ်နေမှန်းမသိဘူး။သေချာမှမကြည့်တာ။ကိုယ်ကတံခါးဖွင့်ပြီး ဖုန်းလာလို့ဖုန်းပြောနေတာ။မင်းကခပ်တည်တည်နဲ့ ဝင်ထိုင်ပြီး စက်နှိုးနေတာလေ” ”အာ မသိဘူး မသိဘူး”ပြောပြောဆိုဆို ရှက်ရမ်းရမ်းပြီးသူမကားဆီပြေးသွားပြီး ကားစက်နှိုးကာ ထွက်သွားသည်။သူလဲ ”ဟိတ် ဟိတ် မင်းပစ္စည်းတွေကျန်ခဲ့ပြီဟေ့”မကြားတော့ သူလဲ လိုက်ပြီးပေးဖို့ ကားပေါ်တက်တော့ အလုပ်ထဲက အမ်ဒီကဖုန်းခေါ်တာနဲ့ ဖုန်းပြောနေတာနဲ့ မမှီတော့။သူလဲ အိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်မိသည်။တခုခုတွေ့လို့တွေ့ငြား။
မိန်းကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊အဝတ်တွေနဲ့ အတွင်းခံတွေ။သူမ ဝယ်လာတာတွေ ကိုကြည့်ရင်း သူ့ရင်ထဲမှာတဒိတ်ဒိတ်နဲ့ နွေးနွေးလေးခုန်မေသည်။အချစ်ဆိုတာဒါလား။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံတော့ ပြောပြတေယ့ ရီလိုက်ကြတာ။ဒါမင်းဖူးစာနေမယ်။ပစ္စည်းတွေကိုတော့ ခိုးခိုးမနမ်းနဲ့နော်ဆိုပြီးစကြသည်။သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ကောင်မလေးရေ ဖူးစာမှန်ရင် ပြန်ဆုံပါရစေလို့။ ဥမ္မာခင်လဲ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ တွေ့ပြီးနောက် သူမယောက်ကျားနဲ့လုပ်တိုင်း တခုခုလိုနေသလိုလို။သူမယောက်ကျားက ငြိမ်းချမ်းလောက်မကြီး လုပ်လဲမလုပ်နိုင်။ပြီးတော့ လူက ဗိုက်ကရွှဲကာ ဝနေတာမို့ အရမ်းကြီးအကြမ်းမလုပ်နိုင်။သူမကိုချစ်လို့လဲပါမည်။အစက သူမ ဒါကိုသဘောကျပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းက သူမကိုပက်ပက်စက်စက်ကြမ်းသွားတော့ တခါတလေခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးလုပ်ခံချင်မိသည်။
သူမယောက်ကျားက လီးကိုသာစုပ်ခိုင်းပြီး သူမကိုတခါမှ မယက်ပေးဖူး။ယက်ပေးဖို့ပြောရမှာလဲ ရှက်သည်။တခါတလေခံချင်မိသည်။ငြိမ်းချမ်းကို တခါတလေ သတိရမိသည်။သူမလိုအပ်ချက်တွေမပြည့်တိုင်းပင်။ဒါကြောင့်သူမယောက်ကျားနိုင်ငံခြားသွားတော့ ငြိမ်းချမ်းကို ဖုန်းဆက်ကာမရှက်နိုင် ချိန်းမိသည်။ငြိမ်းချမ်းက သူ့တိုက်ခန်းလာဖို့ချိန်းတာမို့ သူမသမီးကို ကျောင်းပို့ပြီးကားကိုအိမ်မှာထားကာ အငှါးကားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းချိန်းတဲ့နေရာကိုလာလိုက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းနဲ့ လိုးဖြစ်သည်။
သူမ စိတ်တွေတင်းကြပ်နေတာတွေ ငြိမ်းချမ်းနဲ့တွေ့မှ ပေါက်ခွဲပစ်လိုက်သည်။ ”အား လုပ် လုပ် အားရပါးရလုပ် ကို မညှာနဲ့ ဥမ္မာ့ ဖင်တွေကို ရိုက်ပြီးဆောင့်ပေးပါ အား အား” ငြိမ်းချမ်းလဲ ဖင်တွေကို တဖျန်းဖျန်းနဲ့ရိုက်ကာအားရပါးရဆောင့်လိုက်ရင်း ”ကောင်မ ကောင်းလား ငါလိုးတာကောင်းလား” ”အား ကောင်းတယ် ကို လိုးတာအရမ်းကောင်းတယ် အရမ်းကြိုက်တယ် အာ့ အင့် အင့် အင့်”နှစ်ယောက်သားအခန်းထဲမှာ အသံတွေနဲ့ဆူညံနေသည်။ဥမ္မာခင်က တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုက အမြဲဂရုတစိုက်လုပ်တာမို့ သန့်ရှင်းကာ လုပ်ရတာကောင်းသည်။တသက်လုံး ဒီလိုအဆက်ဆံမခံဖူးတော့ ခုလိုလုပ်ရပြောရတာကို သဘောကျကာ သူပြောသလိုလုပ်ပေးသည်။နှစ်ယောက်သား ပြီးသွားတော့ အနားယူနေရင်းစကားပြောနေလိုက်သည်။စိတ်ထလာတော့ ပြန်လုပ်ကြပြန်သည်။ညနေသုံးနာရီကျော်တော့ အိမ်ကိုပြန်သွားသည်။နောက်ရက်ကျလဲ လာပြန်သည်။
သူ့မယောက်ကျားပြန်မလာမချင်းသူ့ဆီလာလာကုန်းသည်။ဥမ္မာခင်က ငြိမ်းချမ်းလုပ်တာကိုစွဲလန်းနေတာပင်။ငြိမ်းချမ်းက ပြသာနာမတက်အောင်တော့ရှောင်ရသည်။ဥမ္မာခိုင်ကလဲ အလိုရမက်တခုအတွက်သာ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ငြိနေပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ မိသားစုဂုဏ်သိက္ခာမကျဆင်းစေရန်တော့ရှောင်ရသည်။ ”ကိုချမ်း ဒါက မီ့သူငယ်ချင်းဒေါက်တာနန်းစံခမ်းတဲ့ နန်း ဒါက တို့တွေရဲ့ဆရာ ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့” ”တွေ့ရတာဝမ်းတာပါတယ်ဗျာ။ကားကိုသေချာပါကင်ထိုးခဲ့ရဲ့လား မှားနေမှာစိုးလို့” ”ရှင်နော်” ”ကိုချမ်းတို့က သိနေကြတာလား” ”မီမီကလဲ ငါဟိုတခါနင်တို့ကိုပြောတာ သူနဲ့မှားတာလေ” ”ဟယ် ဟုတ်လားခ်ခ်ခ်” ”ကဲ နန်း နန်းရဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကိုယ့်ဆီမှာပါလာတယ်။ခု လဲ ကားထဲမှာပါတယ် ပြန်ကျရင်ယူသွားနော်” ”ဟုတ် ဟိုတခါက နန်းလဲ လောနေတာနဲ့ကားမှားသွားတာ။နန်းအမှားအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်” ”ရပါတယ်ဗျာ။
ကားမှားတာထားပါ။ကားထဲက အပြင်အဆင်က မတူပါဘူးဗျာ မသိဘုးလား” ”ကားထဲမှာ ပြင်ထားတာက အခင်းပဲကွဲတာ ကျန်တာက တူနေတော့ မှားသွားတာ အဟီး” ”အဲ့လို ကိုချမ်းရေ နန်းက လုပ်လိုက်ရင်အရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းချည်းပဲ” ”နင်နော် ”သူတို့နှစ်ယောက်ရင်းနှီးသွားကြသည်။နောက်ပိုင်းမှာလဲ နန်းနဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းတွေ့သည်အထိသူ ရင်နှီးအောင်ကြိုးစားခဲ့သည်။နန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ သူတိူ့ရုံးက ကောင်မလေး သူ့တပည့်ရဲ့ရည်းစား မီမီချိုကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်မိသည်။သူနဲ့နန်းက အရင်ကတည်းကသူငယ်ချင်းတွေ။တစ်လမ်းထဲနေတာ။တက္ကသိုလ်ကွဲသွားပေမယ့် အတွဲကမပျက်ခဲ့။မီမီချို့ဆီက သတင်းအချက်အလက်ရသည်။နန်းမှာ ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူမရှိသေး။သူအရမ်းကိုအားတက်သွားမိသည်။သူနန်းရဲ့အချစ်ကိုရဖို့အတွက် ချစ်ရေးဆိုတော့ နန်းကလဲ စဉ်းစားပေးမည်တဲ့။သူလဲ နန်းနဲ့တွေ့ပြီးကတည်းက ဥမ္မာခင်ကို နည်းနည်းချင်းရှောင်လာသည်။ဥမ္မာခင်က ဝေယံထက်မရှိတာနဲ့ သူ့ကိုချိန်းသည်။သူကလဲ သုံးခါချိန်းရင် တစ်ခါလောက်သာတွေ့သည်။
တွေ့သည့်အခါတိုင်းမှာတော့ ဥမ္မာခင်ကို ပက်ပက်စက်စက်လုပ်ဖြစ်သည်။ပြောရမယ်ဆိုရင် ဥမ္မာခင်က သူနဲ့ကျမှ ဗလဘိုင်လိုက်ရသည်လို့ပြောရမည်။ခုချိန်ထိတော့ ဥမ္မာခင်ကိုနောက်ပေါက်မဖွင့်ဖြစ်သေး။ခရေချွေမယ်တောင်းတော့ ကြောက်နေတာနဲ့မချွေဖြစ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သူ့ဘဝ အမှောင်ဖုံးတဲ့ရက်ကိုရောက်လာခဲ့သည်။ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရနိုင်ခဲ့။နန်းကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲမိတ်ဆက်ပေးတော့ ဝေယံထက်က သူမကို ”နင်က နန်းမာလာရဲ့. ညီမမဟုတ်လား” ”ဟုတ် အကိုက ဝေယံ” ”ဝေယံထက်ပါ ” ”ဒါဆို သူ သူက ” သူသဘောပေါက်လိုက်သည်။သူတို့ ဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်မိတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ညီမ။
အာကာတို့ ဇွဲနိုင်တို့က မှတ်မိသည်။တရားရုံးမှာ ပါလာတာကိုတွေ့ဖူးသည်ကိုး။သူတို့ကိုလဲ တွေ့ဖူးသည်မို့ ချက်ချင်းမှတ်မိသည်။နန်းစံခမ်းသူ့ကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး ”ရှင်က ကျွန်မ အမ ဘဝကို သေအောင်သတ်ခဲ့ပြီးတာအားမရလို့ ကျွန်မကိုပါ ကြံချင်သေးတာလား ဟင်” ”မဟုတ်ပါဘူးနန်းရယ် ကို တကယ်မသိခဲ့ပါဘူး” ”ရှင့်ကို သေတဲ့အထိကျွန်မ နာကျည်းမုန်းတီးနေတာ။ကျွန်မအချစ်ဆုံးအမကိုသတ်ခဲ့တဲ့ရှင့်ကို သေတဲ့အထိ ခွင့်မလွှတ်ဘူး ကျွန်မနဲ့ ရှင့်ရဲ့ ပတ်သတ်မှုက ဒီမျှပါပဲ။ရှက်တက်ရင်နောက်ဘယ်တော့မှ မပတ်သတ်ပါနဲ့” ပြောပြီး သူမထွက်သွားသည်။သူ အရှင်လတ်လတ် မြေမြိုသွားသလိုပင်။ဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်သွားသည်။သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကိုအားပေးပေမယ့် သူမကြားတော့။ဝေယံထက်က သူ့ကိုတောင်းပန်ပေမယ့် သူနားမထောင်နိုင်တော့။သူ့ဘဝမှာ ဘာမှအဓိပ္ပါယ်မရှိတော့။သူသုံးရက်တိတိ အခန်းထဲကမထွက်။ဖုန်းလဲပိတ်ထားသည်။
သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ကို လာရှာတာသိပေမယ့် သူဖွင့်မပေး။သူရုံးကို သွားကာ ထွက်ခွင့်ပေးရင်ပေး မပေးရင်လဲ ဒီနေရာနဲ့ဝေးရာကိုပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုတော့ သူ့ဆရာက မေးရာ အကြောင်းစုံပြောပြလိုက်သည်။သူ့ဆရာလဲ သူ့ကို စင်္ကာပူမှာသွားနေဖို့တာဝန်ပေးတာနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှနှုတ်မဆက်ပဲ စင်္ကာပူကိုသူထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။စင်္ကာပူရောက်တော့ သူအလုပ်ထဲမှာပဲ အာရုံနှစ်ထားလိုက်ကာ ကျန်တာအားလုံးကိုမေ့ထားလိုက်သည်။ရောက်ပြီးနှစ်လလောက်နေမှ သူငယ်ချင်းတွေကို ဆက်သွယ်သည်။ဥမ္မာခင်က သူ့ကို မက်ဆေ့ခ်ျပို့ထားတာမနည်းပေ။သူစင်္ကာပူရောက်တော့ သူ့ယောက်ကျားနဲ့အလည်လာရင်းလစ်ရင်လာတွေ့သည်။
သူလဲ မထိန်းတော့။သူစင်္ကာပူမှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာသည်။ဥမ္မာခင်နဲ့နှစ်ခေါက်သာတွေ့သည်။လိုင်းပေါ်မှာတော့ ပြောဖြစ်ကြသည်။သူလဲ နည်းနည်းအနည်ထိုင်စပြုလာပြီ။ပြန်ခေါ်တာနဲ့ သူလဲ ပြန်လာခဲ့သည်။အာကာတို့က သူ့ကို နန်းဆီသူတို့သွားရှင်းပြထားတဲ့အကြောင်းပြောသည်။မီမီချိုတို့ကလဲယူပြီးသွားပြီ။မီမီချိုက အကြောင်းစုံသိလို့ သူ့ကို နန်းဆီသွားတွေ့ပြီးရှင်းပြဖို့တိုက်တွန်းပေမယ့် သူမသွားရဲ။နန်းက ပစ်ပစ်ခါခါပြောလိုက်ရင် ဒီတစ်ခါသူအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်သိပ်မလွယ်ကူနိုင်။သူမခံစားနိုင်တာကြောင့် သတ္တိနည်းနေရသည်။သူရန်ကုန်ရောက်ပြီး တစ်လကျော်လောက်အကြာမှာ ဥမ္မာခင်က သူ့ဆီဖုန်းဆက်သည်။ဝေယံထက်နိုင်ငံခြားမနက်ကသွားသည်တဲ့။သူလဲသိသည်။ဝေယံထက်က စင်္ကာပူ မှာ ဆယ်ရက်လောက်ကြာမည်။
ဒါကြောင့် သူမနက်ဖြန်ကျ သူတို့အိမ်မှာတွေ့ဖို့အဆင်ပြေမလားမေးတော့ သမီးကိုကျောင်းပို့ပြီးရင်အားပြီတဲ့။သူလဲ မနက်ကျ ဥမ္မာခင်တို့ကွန်ဒိုနားမှာစောင့်နေလိုက်သည်။ဥမ္မာခင်ထွက်သွားတော့ သူလဲ ဥမ္မာခင်တို့အထပ်ကိုသွားကာ သော့ကိုထားခဲ့တဲ့နေရာကနေယူပြီး တံခါးဖွင့်ကာပြန်ပိတ်ပြီးစောင့်နေလိုက်သည်။နာရီဝက်ကျော်လောက်ကြာတော့ ဥမ္မာခင်ပြန်ရောက်လာသည်။မတွေရတာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပေမယ့် ဥမ္မာခင်က အရင်အတိုင်းမပြောင်းလဲပေ။လှနေဆဲပဲ။မိုးပြာရောင်အပျော့သားကိုဝမ်းဆက်အကြပ်ဝတ်ထားသည်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကပ်နေတာမို့ကောက်ကြောင်းအလှကထင်းသည်။သူလဲဥမ္မာခင်ကို ဒီတခေါက်တွေ့ပြီးရင် နောက်ထပ်မတွေ့ပဲနေကြရအောင်လို့ပြောတော့ ဥမ္မာခင်ကလဲ လက်ခံသည်။တကယ်လို့ တွေ့ရင်တောင်မှ ခုလိုအမြဲမတွေ့ဖို့ပြောသည်။ဒီတခေါက်တော့ သူဥမ္မာခင်ရဲ့ခရေကို ရအောင်ချွေတော့မည်။ပြောလဲပြောထားသည်။
ဥမ္မာခင်တို့အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ သူတို့လင်မယားအိပ်ခန်းက ခန်းနားထည်ဝါသည်။ရေခဲသေတ္တာ တီဗွီ အဲကွန်းအစုံရှိသလို အိပ်ရာကလဲ အကောင်းစား။ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်း စကားပြောကာ ဥမ္မာခင်ရဲ့ ဖင်ကို သူညှစ်လိုက် ပင်တီကြိုးကို ဆွဲလိုက် ရိုက်လိုက်လုပ်နေသည်။ဥမ္မာခင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ကာနမ်းလိုက်ပြီး ”ဒီပါးစပ်က ခုပဲနမ်းရမှာတအောင့်နေကြအားမှာမဟုတ်တော့ဘူး” ”အမယ် ဘာလို့လဲ” ”ကို့လီးကို စုပ်ပေးရမှာမို့” ”သွား ဒါမျိုးတော့တက်တယ်”ပြောပြီးသူ့ကို နမ်းသည်။အတော်ကြာနမ်းပြီးတော့ ဥမ္မာခင်ကိုထခိုင်းလိုက်ပြီး သူလဲမတ်တပ်ရပ်ကာ လီးကိုစုပ်ခိုင်းလိုက်သည်။ဥမ္မာခင်လဲ သူ့အင်္ကျီ ဘောင်းဘီတွေကိုချွတ်လိုက်တော့ အောက်က ကောင်က မာထန်နေသည်။ ”ခစ်ခ်စ သူ့ဟာကြီးက အမြဲတမ်းရယ်ဒီပဲ”ပြောပြီး စုပ်ပေးသည်။လီးထိပ်ကို လျှာနဲ့ကလိလိုက် စုပ်လိုက် ဘောတွေကို စုပ်လိုက်နဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနေသည်။
သူလဲ ကောင်းလာတာမို့ ဥမ္မာခင်ဆံပင်တွေကိုဆွဲကာ ပါးစပ်ကို ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ဥမ္မာခင်ကို ကုတင်စောင်းပေါ်ခေါင်းတင်ပြီး ပါးစပ်ကို လိုးလိုက်သည်။ဥမ္မာခင်လဲ ပုလွေကျွမ်းနေပြီမို့ အလိုက်သင့်နေပေးသည်။သူလဲ ကောင်းလွန်းလာကာ ပါးစပ်ထဲကိုပန်းလိုက်ပြီးအပြင်ထုတ်ကာ ဥမ္မာခင်မျက်နှာပေါ်ပန်းလိုက်သည်။ ”ဟင့် ညစ်ပတ်တယ် သူများမျက်နှာတွေ ပေကုန်ပြီ”သူလဲ တစ်ရှူးယူကာသုတ်ပေးလိုက်သည်။ဥမ္မာခင်ရေဘူးထုတ်ကာ ပလုပ်ကျင်းလိုက်ပြီးသူ့ကိုလာဖက်သည်။သူလဲ ဥမ္မာခင်ကိုအဝတ်တွေချွတ်ခိုင်းလိုက်သည်။အဝတ်တွေချွတ်လိုက်တော့ အတွင်းခံ ပန်းရောင်လေးသာကျန်တော့ သူလဲ ချွတ်လိုက်ရင်း ”ဥမ္မာက ကိုယ့်လီးနဲ့လိုးတယ်လို့သဘောထားပြီးကိုယ့်ဟာကို ကလိ ကိုယ်က နို့တွေကိုင်ပေးမယ်”ပြောပြီးဥမ္မာခင်ကို နောက်ကနေဖက်ကာ နို့တွေကိုညှစ်လိုက် ကလိလိုက်လုပ်နေသည်။
ဥမ္မာခင်လဲ အစေ့ကိုကလိလိုက် အဖုတ်ထဲ ကလိလိုက်နဲ့ တဖြည်းဖြည်းအရှိန်တက်လာသည်။ပါးစပ်ကလဲ ကို့် လီးနဲ့ဆိုအရမ်းကောင်းမှာပဲပြောကာ ကလိနေသည်။သူလဲနို့တွေချေတာကိုရပ်ပြီးဥမ္မာခင်ကိုနောက်ကနေ ခေါင်းအုံးခုကာမှီခိုင်းပြီးရှေ့ကနေ ဥမ္မာခင့်နို့နှစ်လုံးကြားကိုလီးနဲ့လုပ်နေလိုက်သည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဥမ္မာခင်လဲ အရှိန်တက်လာကာ လက်နဲ့တချီပြီးသွားသည်။နှစ်ယောက်သားအမောဖြေနေလိုက်ကြသည်။တော်တော်လေးကြာတော့ ဥမ္မာခင်ကို သူ့အပေါ်ခွလိုင်းကာ နှစ်ယောက်သားခြောက်ကိုးပုံစံလုပ်ကြသည်။ဥမ္မာခင်က သူ့လီးကိုစုပ်ပေးသည်။သူလဲ အစေ့ကိုစုပ်လိုက်အဖုတ်ကိုကလိလိုက်လုပ်ရင်း ဖင်ထဲကိုလဲ ကလိနေသည်။ဖင်ထဲကို လက်နှစ်ချောင်းပူးကာကလိနေရင်းအသားကျလာတာနဲ့ ဖင်ဝကိုလျှာနဲ့ကလိလိုက်ပြီးအဖုတ်ကအရည်တွေယူကာ လက်သုံးချောင်းပူးကာထည့်လိုက်ပြန်သည်။ဖင်က ယမ်းခါလာတာမို့ အစေ့ကို စုပ်ပေးလိုက်ရင်းထည့်လိုက်သည်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖင်က လက်သုံးချောင်းကို ခံနိုင်လာသည်။ဥမ္မာခင် က ”ကို ဥမ္မာ့ကို လိုးပေးပါတော့ အရမ်းခံချင်နေပြီ ကို့ရဲ့လီးနဲ့ ဥမ္မထဲကိုထည့်ပြီး လိုးပေးပါ” သူလဲကလိနေတာတွေရပ်ကာ ဥမ္မာခင်ကို သူ့အပေါ်ကနေဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။ဥမ္မာခင်လဲ သူ့အပေါ်ကနေ အားနဲ့မာန်နဲ့ဆောင့်နေသည်။မွေ့ရာက သူမဆောင့်တိုင်းအောက်ကိုနစ်နစ်ဝင်သွားသည်အထိ ဆောင့်သည်။ပါးစပ်ကလဲ တအင်းအင်းနဲ့ အရမ်းကိုမာန်တက်နေသည်။တော်တော်လေးကြာတော့ သူလဲဥမ္မာခင်ကို ပက်လက်လှန်ကာခြေထောက်တွေကိုကိုင်ခိုင်းထားပြီးအပေါ်ကနေ တရစပ်ဆောင့်လိုက်သည်။အခန်းထဲမှာ တဖွတ်ဖွတ်တဗျွတ်ဗျွတ် တအားအားနဲ့ ဆူညံနေသည်။ဒီလိုအနေအထားသာ ဝေယံထက်တွေ့လို့ကတော့ သွေးတက်သေနိုင်သည်။သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးလေးကို သူတို့နှစ်ယောက်အိပ်တဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာ ပိုးစိုးပက်စက် လိုးနေတာကိုး။သူ့ဆောင့်ချက်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ဥမ္မာခင်လဲ ပြီးသွားရသည်။
အရမ်းကိုကောင်းတာမို့ သူမ ငြိမ်းချမ်းကို တင်းတင်းကြီးဖက်ထားလိုက်သည်။အတော်လေးကြာမှ ငြိမ်းချမ်းက ဖင်ချတော့မယ်ဆိုကာမှ သူမလဲ ကုန်းပေးလိုက်သည်။ကိုယ်ကို မွေ့ရာပေါ်မှာဝပ်ထားလိုက်ပြီးဖင်ကိုထောင်ပေးလိုက်သည်။ငြိမ်းချမ်းက ဖင်ကိုဖြဲကာလက်နဲ့ကလိလိုက်ပြန်သည်။ပြီးတော့ ဖင်ကိုဖျန်းခနဲရိုက်ကာ ”တောက် ကောင်းလိုက်တဲ့ဖင် ဒီဖင်ကိုဘယ်သူအရင်စလိုးဖူးတာလဲကောင်မ”ဖျန်းခနဲရိုက်လိုက်ပြန်သည်။ ”အ ဥမ္မာရဲ့ ဖင်ကို ကို ပထမဆုံးလိုးဖူးတာပါ” ”မင်းရဲ့ဖင်ပါကင်ကို ဘယ်မှာအဖွင့်ခံမှာလဲ” ”ဥမ္မာရဲ့ ဘယ်သူမှမလိုးဖူးသေးတဲ့ဖင်ကို ဥမ္မာတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်အိပ်တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ကို ပထမဆုံးလိုးတာလို့ အဟင့် လုပ်ပေးတော့ကွာ ဥမ္မာဖင်က တအားယားလာပြီ”
”မလိုးခင် လီးကိုစုပ်ပေးဦး” ဥမ္မာခင်လဲ ကုန်းထားရာမှ ကုတင်အောက်ဆင်းကာ ငြိမ်းချမ်းရှေ့ ဒူးထောက်ပြီး လီးကိုအငမ်းမရစုပ်ပေးလေသည်။ငြိမ်းချမ်းလဲ ဥမ္မာခင်လိုမိန်းကလေးမျိုး ထပ်ပြီးလဲမတွေ့နိုင်တော့သလို ဒီလို တဏှာကြီးတဲ့သူမျိုးလဲ ထပ်မတွေ့နိုင်။ပြီးတော့ မကျေနပ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာမို့ ညှာတာဖို့စိတ်မကူး။ဥမ္မာခင်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ ပါးစပ်ထဲကိုလေးငါးခြောက်ချက်ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ဥမ္မာခင်လဲ လီးက အာခေါင်ကိုမထောက်မိအောင်ကြိုးစားပြီးစုပ်လိုက်ရသည်။သူမကိုပြန်ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး ”ကဲ ဖင်ကိုဖြဲပေးစမ်း” ”ဟင့် သူပဲအမျိုးမျိုး အနိုင်ကျင့်တယ်”ပြောပြီးဖြူသွယ်တဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ နောက်ပြန်ဖင်သားနှစ်ခြမ်းကိုဖြဲပေးလိုက်တော့ စအိုဝရဲရဲကထင်းခနဲပေါ်လာသည်။ခရေပွင့်ပေါ်ကို တံတွေးထွေးချလိုက်ပြီးမျက်လုံးကစားလိုက်ရာ မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ ခေါင်းလိမ်းဆီဘူးတွေ့တာနဲ့လှမ်းယူလိုက်ပြီးအဖုံးဖွင့်တော့ ”အဲ့ဒါ ကိုကို့ရဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီဗူး။
သူအရမ်းကြိုက်လို့ သိပ်တောင်မလိမ်းဘူးခ်ခ် ”သူလဲဖင်ဝကိုလောင်းချကာ လီးကိုလဲ လိမ်းလိုက်ပြီး ”စောက်ကောင်မ ဖင်ကိုမရှုံထားနဲ့ ဖွင့်ထား။ရှုံ့ထားရင် နာလိမ့်မယ်”ပြောပြီးခရေဝကို လီးထောက်လိုက်ကာ ဖိထည့်လိုက်ရာ ”ဗြစ် ဗျိ ဗျိ” ”ဟ အ အ အင်း” နာသွားကာ ဖင်ဝရှုံ့လိုက်မိပေမယ့် သတိရလို့ ပြန်ဖွင့်ပေးထားလိုက်သည်။ကြီးမားတဲ့ လီးက ကျဉ်းကြပ်တဲ့စအိုဝကိုထိုးခွဲကာ ဝင်လာတာမို့ ဖင်ဝတခုလုံးမီးစနဲ့ထိုးခံရသလိုပူခနဲဖြစ်သွားပြီးနာကျင်မှုက ဖင်ဝမှတဆင့် တကိုယ်လုံးကို ပျံ့သွားသည်။ငြိမ်းချမ်းလဲ ခေါင်းလိမ်းဆီကိုအနည်းငယ်လောင်းချလိုက်ပြီး နည်းနည်းထည့်လိုက်ပြန်သည်။နာကျင်လွန်းလို့ ဖင်ဖြဲထားတဲ့ လက်တွေက တဆက်ဆက်တုန်နေသည်။သူလဲ အစေ့ကို လှမ်းပြီးကလိလိုက်ပြီး ထပ်ထည့်လိုက်သည်။
လီးကတစ်ဝက်လောက်ဝင်သွားတော့ဆက်မသွင်းတော့ပဲ အစေ့ကိုကလိလိုက်ပြန်သည်။ဥမ္မာခင်တယောက် နာလို့တအအ အော်နေပေမယ့် ငြင်းတာတော့မငြင်း။သူလဲလီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ကျွံဝင်နေတဲ့စအိုဝက ပြန်ကပ်ပါလာသည်။ဒူးကိုအားပြု ပြီး လုပ်နေတာမို့ တကိုယ်လုံးရဲ့ဝိတ်ကိုဒူးပေါ်ထောက်ထားတဲ့လက်မှာ အားပြုထားရသည်။လီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထည့်လိုက်ပြန်သည်။အစေ့ကို ကလိတာကြောင့်ရော ဖင်ဝက နာကျင်မှုက အကျင့်ရသွားတာကြောင့်နာတာဖြည်းဖြည်းချင်းသက်သာလာကာ အဲ့ဒီနာကျင်မှုရဲ့အရသာကို ဥမ္မာခင်တယောက် ခံစားလာရသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံနိုင်လာကာ ဖင်ခံရတာကို ကြိုက်စပြုလာသည်။ငြိမ်းချမ်းရဲ့လီးကိုတဆုံးထည့်စေချင်တာမို့ ”ကို ဥမ္မာ့ဖင်ထဲကို လီးအကုန်ထည့်ချင်ထည့်လေ။ခံနိုင်ပြီ” သူလဲလီးကိုပြန်ထုတ်ပြီးတဆုံးထိ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထည့်လိုက်သည်။ ”ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ်” ”အ ရှီး ကျွတ်ကျွတ် ရတယ် ခံနိုင်တယ် အာ့ ဟာ့ အီး”နာကျင်မှုတွေနဲ့အတူ ခံစားမှုတမျိုးက သူမတကိုယ်လုံးကို ဆူပွက်သွားသလို အရမ်းကို ဟော့လာသည်။ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတခုကို တောင့်တမိလိုက်သည်။
ဖင်ကို ညှစ်ပေးလိုက် ဖွင့်ပေးလိုက်လုပ်လိုက်သည်။ငြိမ်းချမ်းလဲ လီးတဝက်လောက်ထုတ်ပြီးတဆုံးထည့်လိုက်လုပ်ပေးနေရင်း ဖင်ကညှစ်တဲ့ဒဏ်ကြောင့် အရမ်းကိုကောင်းနေသည်။ ”အား ရှီးကောင်းလိုက်တာကွာ။ကောင်မ ဖင်ကကျပ်ထုတ်နေတာပဲ။ကြိုက်လား ဖင်ခံရတာကို” ”ကြိုက်တယ် အား အရမ်းမိုက်တယ်။ဖင်ခံရတာကြိုက်တယ် အ အ ဆောင့်ဆောင်”သူလဲ ဒူးအားကိုသုံးကာ ခပ်ဆက်ဆက်ဖိလိုးလိုက်သည်။တအိုးအိုးနဲ့ရမက်သံပြင်းစွာညည်းနေသည်။ကျဉ်းကြပ်တဲ့စအိုကိုလုပ်ရတာမို့ သူ့လီးကို တင်းကြပ်စွာညှစ်ထားမှုကြောင့် ပြီးချင်လာတာမို့ သူလီးကို ဖင်ပေါက်ထဲက ထုတ်လိုက်ပြီး ”ညောင်းပြီ။နောက်နဲနဲဆုတ်”ပြောပြီး ကုတင်စွန်းဖက်ကိုဆွဲကာနေရာချပေးလိုက်သည်။ဖင်ကိုတံတွေးထွေးချလိုက်ပြီးလီးကိုခေါင်းလိမ်းဆီကိုသုတ်ကာ ”ဖင်ခံလို့ကောင်းလား စောက်ကောင်မ” ”ဖျန်း” ”အား ကောင်းတယ် ကိုရယ် ဖင်ခံလို့အရမ်းကောင်းတယ် လုပ်လေ ”ဖင်ကိုတဖျန်းဖျန်းရိုက်ရင်း ဥမ္မာခင်စိတ်ကိုပိုကြွအောင်လုပ်ပေးလိုက်သည်။ဥမ္မာခင်လဲ အရမ်းကိုဟော့နေပြီ။
ဖင်ကိုပြန်ဖြဲခိုင်းကာ လီးကိုတဆုံးထည့်လိုက်ပြန်သည်။ဥမ္မာခင်လဲ ခံနိုင်လာပြီမို့ သူမညှာတော့ လက်ကိုဖယ်ခိုင်းကာ အစေ့ကို ချေခိုင်းပြီးဖင်သားနှစ်ခြမ်းကိုခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ဖြဲကာတရစပ်ဆောင့်လိုက်သည်။အခန်းထဲမှာ လူနှစ်ဦးရဲ့ကျေနပ်အားရတဲ့ညည်းညူသံက လွှမ်းနေသည်။ဖင်ကိုရိုက်လိုက် လိုးလိုက်နဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြီးချင်လာသည်။သူလဲ ဥမ္မာခင်ရဲ့ဆံပင်တွေကိုဆွဲလိုက်တော့ ရမက်တွေထန်နေတဲ့မျက်နှာကိုနမ်းလိုက်ပြီးနောက်ကနေဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ဥမ္မာခင်ရဲ့ လိုးပါလိုးပါဆိုတဲ့အသံက ကြားရတဲ့သူအဖို့ ပိုပြီးအားတက်စေသည်။သူလဲမညှာမတာဆောင့်လိုက်ရင်း လီးတစ်ခုလုံး ကျဉ်တက်လာကာ ဖင်ကကြွက်သားတွေကလဲ အရမ်းကိုညှစ်လာတာမို့ သုတ်ရည်တွေမထိန်းနိုင်တော့ပဲ ပန်းထုတ်လိုက်ရသည်။
ဥမ္မာခင်လဲ အရမ်းကိုဟော့ကာ ပြီးသွားပြီး ငြိမ်းချမ်းရဲ့လီးတစ်လုံးကို ဆွဲညှစ်ထားလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်သား ထပ်ရက်သား ကုတင်ပေါ်မှာ လဲကျသွားသည်။နှစ်ယောက်လုံးချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေသည်။မောဟိုက်နေတာမို့ အမောဖြေနေကြသည်။မျက်နှာတွေက ကျေနပ်အားရတဲ့မျက်နှာတွေ။အတော်လေးကြာမှ ဥမ္မာခင်က သူ့ကို ဖယ်ခိုင်းကာ ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတော့ သူလဲနောက်ကနေလိုက်ဝင်သွားသည်။ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ သူ့လီးကိုဥမ္မာခင်က ဆေးပေးသလို သူကလဲ ဥမ္မာခင်ကို ဆေးပေးလိုက်သည်။ပြန်ထွက်လာတော့ ဥမ္မာခင်က ဘီရိုထဲကအဝတ်ထုတ်ကာဝတ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုလဲ သူမယောက်ကျားပုဆိုးထုတ်ပေးလို့ဝတ်လိုက်ပြီးကုတင်ပေါ်တက်ကာ တယောက်ကို တယောက်ဖက်ထားရင်း စကားတွေပြောနေကြသည်။အတော်ကြာတော့ မျက်ခုံးကစင်းလာတာမျု့ မှေးလိုက်ကြသည်။ပြန်နိုးလာတော့ နောက်တခါထပ်လုပ်ကြပြန်သည်။
ဒီတခါတော့ ဖင်က နည်းနည်းနာနေသေးတာမို့ အဖုတ်ကိုပဲ လုပ်ဖြစ်သည်။ခဏနားပြီးပြန်စိတ်ပါလာတော့ ဖင်ကိုပဲလုပ်လိုက်သည်။ဥမ္မာခင် ဖင်ခံရတိာကုကြိုက်သွားသည်။လေးနာရီထိုးခါနီးတော့ ဥမ္မာခင်က ရေချိုးအလှပြင်အဝတ်လဲကာ သူ့သမီးကိုကျောင်းသွားကြိုသည်။သူလဲ ယူစရာရှိတာတွေယူ အဝတ်လဲကာ ပြန်လာလိုက်သည်။ညကျ ဥမ္မာခင်နဲ့ လိုင်းပေါ်မှာစကားပြောဖြစ်ကြသည်။နောက်ရက်လဲ ဥမ္မာခင့်အိမ်ကိုသွားပြီး လုပ်သည်။ဒီတခါတော့ ဖင်ကိုပဲလုပ်လိုက်သည်။ညနေကျ လမ်းလျှောက်တာတောင်နည်းနည်း ကွတတ ဖြစ်နေသည်။ငြိမ်းချမ်းလဲ ဝေယံထက်ပြန်မလာခင်ချိန်ထိ ဥမ္မာခင်နဲ့လုပ်ဖြစ်သည်။ပြန်လာခါနီးတစ်ရက်အလိုမှာတော့ နားလိုက်သည်။မနားလို့လဲမဖြစ်။သူလုပ်ထားတာနဲ့ ဥမ္မာခင်လဲ ဘလဗိုင်လိုက်နေပြီ။သူတို့နှစ်ယောက် ရှေ့ရှောက် အတက်နိုင်ဆုံးမတွေ့တော့ဖို့ တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ သူလဲ အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးစိတ်နှစ်ကာ လုပ်နေလိုက်သည်။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့ အမြဲတမ်းနီးပါးဆုံဖြစ်သည်။သူငယ်ချက်းတွေက နန်းစံခမ်းကိုသွားတွေ့ဖို့ပြောပေမယ့် သူမေ့ထားပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး နေလိုက်သည်။
တစ်ရက်မှာတော့ မီမီချိုကသူ့ကို ဖုန်းဆက်ပြီးအားရင် ခဏလာခဲ့ပါဆိုလို့သွားတော့ မီမီချိုတို့နဲ့အတူ နန်းကိုပါတွေ့လိုက်ရသည်။ ”နန်း နေကောင်းတယ်နော်” ”ကောင်းလို့ ခုလိုတွေ့ရတာပေါ့” ”နန်းနင်ဟာလေ စကားကောင်းကောင်းပြောလေ” ”ပြောတာပဲ သူမေးတာက ဟုတ်မှမဟုတ်တာ” ”ကဲပါ ကိုချမ်း မီတို့ ဟိုဖက်သွားလိုက်ဦးမယ်။စကားအေးဆေးပြောကြဦး။စိတ်ချမယ်နော် ”ပြောပြီးသူ့မျက်စေ့တဖက်မှိတ်ပြကာ ထွက်သွားကြသည်။ ”နန်း ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့မတောင်းဆိုချင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် မရည်ရွယ်ပဲ ဖြစ်သွားတာကိုတော့ ကို ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းမသိတော့ဘူး” ”ဘာမှလာရှင်းပြမနေနဲ့။ယောက်ကျားကြီးဖြစ်ပြီး သတ္တိကလဲမရှိဘူး။ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့မကြိုးစားဖူး။ထွက်ပြေးဖို့ပဲဟင်း မပြောချင်ဘူး” ”နန်းရဲ့ အမုန်းကိုဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့ပါ။ကိုယ့်ဘဝမှာ တစ်ဦးတည်းသောတစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်က နန်းပါ။
နန်းကသာ ကို့ကို ထပ်ပြီးနာကျည်းမုန်းတီးပြီးပြောရင် ကိုယ် ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့ပါ” ”ခုကျ ခံနိုင်ပြီပေါ့ အဲ့လိုလား” ”ခုလဲ မခံနိုင်ဘူး။ကျေးဇူးပြုပြီး ကို့ကို မုန်းမသွားပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်ဆိုးကို ကိုယ်လဲ ဘယ်လိုမှမေ့မရခဲ့ပါဘူး။ကိုယ် နန်း သိအောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲမသိတော့ဘူး” ”ဘာမှ ရှင်းပြမနေနဲ့။ကိုအာကာတို့ ကိုဝေယံတို့ ရှင်းပြပြီးပြီ။အိမ်ကိုလဲ လာပြီးဖေဖေတို့မေမေတို့ကို တောင်းပန်ပြီးလို့ ဖေဖေတို့က ဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြီး အပြစ်မယူတော့ဘူးတဲ့။အဲ့တုန်းကလဲ နောက်ပိုင်းမှ သိရတာ ရှင်ကြီးက ဟီးရိုးကြီးလုပ်ပြီး အပြစ်ခံသွားတာကို လွန်မှသိလိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရတယ်တဲ့။အဲ့ကလေးကိုတွေ့ရင်လဲ အိမ်ကိုလာလည်ပါ။
အပြစ်မရှိပဲနဲ့အပြစ်ခံသွားတဲ့အတွက်လဲ စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောပေးပါတဲ့” ”ဟင် ဟိုကောင်တွေကိုယ့်ကို ဘာမှမပြောဘူး” ”နန်းကို တွေ့ဖို့ကောမပြောဘူးလား” ”ပြောတော့ပြောတယ်။ကိုယ်ကမှမတွေ့ရဲတာကို” ”မုန်းဖို့ကောင်းတာ။ဒီက ခွင့်လွှတ်လို့ ဘယ်နေ့များလာမလဲစောင့်နေတာ သူကယောက်ကျားဖြစ်ပြီး သတ္တိမရှိလို့ မီတို့ကို အကူအညီတောင်းပြီး ခုလိုတွေ့ဖို့လုပ်လိုက်ရတာ သိပြီလား” ”ဟား တကယ်ကြီးလား အားပျော်လိုက်တာကွာ ကိုယ်တကယ်မသိလို့ပါ” ”ဟင်း မပြောချင်ဘူး ဒီမှာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီး သူ့ကို” ဒီလိုနဲ့ တစ်နှစ်နီးပါအကြာ တခုသောတနင်္ဂနွေနေ့မှာ ”တိမ်ပြာပြာနေ့တနေ့ Sunday မှာကွယ် မင်္ဂဆောင်ပွဲလေး ကျင်းပနေပါတယ်။ သူများကို အားကျမိတယ် ချစ်လေးရယ်” သတို့သား ငြိမ်းချမ်းနဲ့ သတို့သမီး နန်းစံခမ်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်လေးတခု။
သတို့သားမျက်နှာက မှိုရတဲ့မျက်နှာနဲ့။သူငယ်ချင်းတွေက မင်းပါစပ် နာရွက်တက်ချိတ်နေပြီဆိုပြီး နှိပ်ကွပ်နေကြသည်။သတို့သမီးကတော့ ပြုံးနေပြီး မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာ သတို့သားကိုချစ်တဲ့စိတ်အပြည့်နဲ့။ မင်္ဂလာဦးအိပ်ခန်းထဲမှာ နန်းစံခမ်းတယောက်တည်း။မင်္ဂလာကုတင်ကို သူ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတာ။ခုတော့ကုတင်ပေါ်ထိုင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။လင်ယောက်ကျား ပြန်လာနေပြီ။သူငယ်ချင်းတွေက ခုနကမှပြန်သွားကာ အမျိုးမျိုးစသွားကြသည်။သူမဘဝမှာ ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတဲ့အပျိုစင်ဘဝကို ဒီည ချစ်ရတဲ့သူကို ပေးရတော့မည်။အတွေ့အကြုံက စာတွေ့သာရှိပြီး ကိုယ့်တွေ့မရှိခဲ့။ချစ်သူဘဝမှာ ကိုကိုကလဲ အခွင့်အရေးမယူ။
မင်္ဂလာဦးညမှ အပျိုဘဝကိုစွန့်လွှတ်မယ်လို့လဲပြောထားတာကြောင့်။သူစိတ်လှုပ်ရှားစွာ တောင်တွေမြောက်တွေး။ တံခါးဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ ချစ်ရတဲ့ဇနီးနန်း။ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်နေသည်။သူဝင်လာတော့တုန်သွားတာကိုတွေ့တော့ သူရီချင်သွားသည်။သူလဲ အဝတ်အစားချွတ်ပြီးရေချိုးလိုက်ဦးမယ်ပြောကာ ရေဝင်ချိုးလိုက်သည်။ရေချိုးခန်းကထွက်လာတော့ တပတ်လာပေးပြီး အဝတ်ထုတ်ပေးထားသည်။သူလဲ ရေသုတ်နေရင်း ညအိပ်ဂါဝန်ပန်းရောင်လေးနဲ့ လှနေတဲ့ချစ်သူကိုကြည့်ရင်း သူတကယ်ကြီး မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရပြီလို့ တွေးမိလိုက်သည်။သူအဝတ်ဝတ်ပြီးတော့ ”နန်း အိပ်ကြစို့လေ ပင်ပန်းနေတဲ့ဟာ” ”အင် မအိပ်ချင်သေးဘူး။အိပ်ချင် အိပ်နှင့် နန်း တီဗွီကြည့်မလို့” ”အာ မကြည့်နဲ့တော့လေ အိပ်ရအောင်” ”မအိပ်သေးပါဘူးဆို။ဘာလဲ ရပြီဆိုပြီး ချုပ်ချယ်ချင်တာလား ဟင်းဟင်း ဒါမျိုးမရဘူးနော်”
”ကဲ ဒီလောက် မှရှိလှတာ လာလေ့”ပြောပြီးနန်းကိုပွေ့ချီလိုက်တော့ ”အမေ့ ဘာလုပ်တာလဲ မအိပ်သေးဘူးနော် လွှတ် လွှတ်” ကုတင်ပေါ်တင်ပြီး နန်းရဲ့မျက်နှာချောချောလေးကို အနမ်းမိုးရွာချလိုက်ရာ အသံတိတ်သွားသလို နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်တော့ မျက်လုံးက မှေ့စင်းသွားသည်။ နန်းတယောက် ချစ်ရတဲ့ကိုကို့ရဲ့ အနမ်းတွေအောက်မှာ လွင့်မျောသွားသည်။ကိုကို့ရဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေအောက်မှာ အပေါ်တက်သွားလိုက် အောက်ကိုကျလာလိုက်ဖြစ်နေရသည်။ ”ကိုကို နာတယ်ဖြေးဖြေး” ”အစမို့နော် နန်း စိတ်ကိုလျှော့ထား” နန်းကိုသတိပေးရင်း နန်းရဲ့အဖုတ်လေးထဲလီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးနေရင်း အရည်တွေနဲ့ချောလာတာကြောင့် ဆက်ခနဲ ထိုးချကာအဆုံးထိဝင်သွားသည်။
”အား ရှီး နာတယ် ကိုကိုရယ် အဟင့်ဟင့်” ငြိမ်းချမ်းလဲ နို့တွေကိုတလှည့်စီစုပ်ရင်း ခဏရပ်ကာထားလိုက်သည်။တကိုယ်လုံးကိုပွတ်သပ်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်ပေးလိုက်သည်။နန်းလဲ ခံနိုင်လာခဲ့ရသည်။ကိုကို့ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေအောက်မှာ နန်း အရမ်းကို ကောင်းခဲ့ရသည်။မင်္ဂလာဦးညမှာ ကိုကိုက နန်းကို ပညာတော်တော်များများသင်ပေးခဲ့သည်။အိမ်ထောင်သက် နည်းနည်းကြာလာတာနဲ့အမျှ နန်းလဲ ကိုကို့ရဲ့သင်ပြပေးမှုကြောင့် ပညာတော်တော်များများတက်လာရသည်။ကိုကိုနဲ့ အတွဲညီညီအိပ်ရာထဲမှာ ဆက်ဆံတက်လာပြီ။ကိုကို့က သူ့အပေါ် အရမ်းကိုချစ်ပြီး အစစအရာရာ ကောင်းတာကြောင့် နန်းလဲ ကိုကို့အပေါ်မှာ မိန်းမကောင်းအဖြစ်နေပေးသည်။နန်းက လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်သေးပေမယ့် ကိုကိုက ကလေးယူချင်တာကြောင့် အိမ်ထောင်ကျပြီးတစ်နှစ်ကျော်မှာ ကိုကို့အတွက် ရင်သွေးလွယ်ထားရတော့ ကိုကိုအရမ်းပျော်သွားတဲ့မျက်နှာက သူမချစ်လို့မဝ။
ငြိမ်းချမ်းဘဝခုမှ တကယ်ငြိမ်းချမ်းသွားရတာပင်။ပျော်ရွင်စရာမိသားစုလေးတခုကို ဖန်တီးထားနိုင်ပြီ။ချစ်ရတဲ့ဇနီးရယ် ချစ်ရတဲ့သမီးရယ်အပြင် ခုနောက်ထပ်ကိုယ်ဝန်ကို နန်းကလွယ်ထားသည်။သူ့အတွက်အရာရာပြီးပြည့်စုံပြီ။ဒီမိသားစုဘဝလေးကို ဘယ်လိုမှအပျက်စီးမခံနိုင်။သူအိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက မိန်းမရှုပ်ခြင်းကိုလုံးဝရှောင်လိုက်သလို ဥမ္မာခင်နဲ့လဲ လုံးဝမှမပတ်သတ်တော့။သူမယူခင်နှစ်ပတ်လောက်အလိုမှာ ဥမ္မာခင်နဲ့ ငါးရက်အတူနေပေးလိုက်သည်။နောက်နောင်ဘယ်တော့မှထပ်မတွေ့ကြတော့နဲ့လို့ပြောခဲ့လိုက်သည်။တခါတခါမှာတော့ဥမ္မာခင်တို့လင်မယားအိပ်တဲ့ကုတင်မှာ သူနဲ့ ဥမ္မာခင်တို့ လုပ်တာကို ဗီဒီယိုခိုးရိုက်ထားတာကို ပြန်ကြည့်ပြီး သတိတော့ရမိသား။ဒါပေမယ့် ထပ်တော့မဆုံလိုတော့။
ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတော့ဖျက်ပစ်ရမှာနှမြောတာမို့ မျက်နှာတွေကိုတော့ editလုပ်ကာဖျက်ထားပြီး မူရင်းကိုတော့အပြီးတိုင်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ခုချိန်မှာတော့ သူစိတ်ထဲမှာ ဝေယံထက်နဲ့ ဥမ္မာခင်တို့အပေါ် ထားတဲ့ အမုန်းတွေက ပြေသွားလေပြီ။ရှေ့ဆက် သူ့ဘဝကို သာယာအောင်လုပ်မယ်လို့တွေးပြီး အိပ်မောကျနေတဲ့ သမီးကို အသာလေးနမ်းလိုက်ပြီး နန်းရဲ့ပါးလေးကိုနမ်းလိုက်တော့ ”ကိုကို ခုထိမအိပ်သေးဘူးလား” ”အင်းအိပ်မလို နန်းရဲ့” သူ့ဖက်လှည့်ကာရင်ခွင်ထဲဝင်လာတော့သူနန်းကိုဖက်ထားလိုက်သည်။ ”ကိုကို စိတ်လာနေတာလား မာနေတယ်”ပြောပြီးနန်းက သူ့လက်ကလေးနဲ့ အသာထုပေးနေသည်။သူလဲအလိုက်သိတဲ့နန်းကိုခပ်ဖွဖွလေးနမ်းပြီး ကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်မိလေသည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကိုကိုညီလေးမာနတေယျ